+UKawvida _ Uncomparable by Aung Naing - issuu
2 နမော တဿ ဘဂ၀တော အရဟတော သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဿ မာတိကာ စဉ်
တုနှိုင်းမမီ ဖန်တီးရှင်နှင့် မိတ်ဆက်ခြင်း
ဓမ္မအရိပ် (ကိုယ်ကျင့်တရား) ၆
ဓမ္မအရိပ် (ဗဟုသုတ) ၇
ဓမ္မအရိပ် (ကလျာဏမိတ္တ) ၈
အံ့ဖယ်ွသာသနာ ၁၂
နှစ်ပေါင်း ၂၅၀၀ကျော်ကဗိုင်းရပ်စ်ဆော့ဖ်ဝဲ ၁၃
အွန်လိုင်းပေါ်က မေးခွန်းတစ်ခု ၁၄
၂၀၀၈၊ စက်တင်ဘာ ကိုနိုင် (ကင်တာ-မြိတ်)
THUNANDAR စာပေတိုက် အမှတ်(၆၇) (၄-A)၊ ဓမ္မာရုံလမ်း၊ မြေနီကုန်း၊ စမ်းချောင်း ဖုန်း-၅၂၄၈၆၀၊ ၀၉ ၅၁၄၂၆၄၊ ၀၉ ၉၉ ၇၂၈၉၅ ထုတ်ဝေသူ ဒေါ်မိုးကေခိုင် ချိုတေးသံစာပေ၊ ရွှေနံ့သာကျေးရွာ၊ ပုလဲမြို့သစ်(၄) ပုံနှိပ်သူ အာရောဂျံပုံနှိပ်တိုက် (၀၅၅၆၄) အမှတ် ၆၉၊ ကျောက်စိမ်းပတ်လမ်း ရတနာကျွန်းရိပ်သာ၊ မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်
4 စာရေးသူ၏ ရင်တွင်းစကား ဤတုနှိုင်းမမီ စာစုများသည် online အွန်လိုင်းပေါ် မကြာခဏတက်ရောက်နေကြသော
လူကြီးလူငယ်လူရယ်ွများ
အနေဖြင့် စာရေးသူ၏ ၀ဲ့ဘ်ဆိုက်(website)တွင် ဖတ်ဖူးကြပေ လိမ့်မည်ဟု ထင်မြင်ယူဆမိပါသည်။ သို့သော်လည်း အွန်လိုင်း ပေါ် မရောက်နိုင်သည့် လူငယ်လူရွယ်အသီးသီးတို့ ဖတ်ရှုပြီး အသိဥာဏ်တိုးစေရန်
ရောက်အောင် ကြိုးပမ်းခဲ့ရပါသည်။ ယနေ့အိုင်တီခေတ်ကြီးတွင်
သည်နှင့်အမျှ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အရည်အသွေးများလည်း တဖြည်း ဖြည်း နိမ့်ကျလာနေသည်ဟု ထင်မြင်ယူဆမိပါသည်၊ ရုပ်ပိုင်းဆိုင် ရာ မည်မျှပင်ထွန်းကာစေကာမူ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အရည်အသွေး များ နိမ့်ကျလာနေသည်ဟု ဆိုပါလျှင် ထိုသူ၏ ဘ၀အဆင့်အ တန်းသည်လည်း နိမ့်ကျနေသည်ဟု ဆိုရပေလိမ့်မည်။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရည်အသွေးများ မြင့်မားလာစေရန် နှင့် ယနေ့ခေတ်လူငယ်များ တိုးတက်အောင်မြင်မှုများစွာတို့ဖြင့် အေးဆေးတည်ငြိမ်စွာ ဘ၀ကို လျှောက်လှမ်းနိုင်ကြဖို့ အရေးကြီး ပေသည်၊ သို့အတွက် ‘တုနှိုင်းမမီ’ က စာရှုသူများ၏ ဘ၀ကို တစ် စိတ်တစ်ဒေသ မြှင့်တင်ပေးနိုင်လိမ့်မည်ဟု ယုံကြည်မိပါသည်။ ထိုစာစုများအနက် (Perfect Enlightenment of the Buddha & Internet) အင်တာနက်နှင့်မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ဥာဏ်တော် အကြောင်းကို
ပထမဦးဆုံးရေးသားသော လုံးချင်းစာအုပ်ဖြစ်သည့်အပြင် စာရေး သူ၏ စာပေအတွေ့အကြုံနုနယ်သေးသည့်အတွက် အားနည်း
ခွင့်လွှတ်နားလည်ပေးကြပါရန်နှင့် စာဖတ်သူများ၏ မေတ္တာဖြင့် အကြံပေးမှုများကိုလည်း အစဉ်သဖြင့် လက်ကမ်းကြိုဆိုလျှက် ရှိပါသည်။ ထို ‘တုနှိုင်းမမီ’ စာစုတငွ် အမှာစာချီးမြှင့်ပေးသော ဦးဇနိန္ဒသာရ(မုံရွာနေဇာ)အား၎င်း၊ စာပေဖြစ်မြောက်ရေးကို အား ပေးတိုက်တနွ်းကူညီကြသော ကဗျာဆရာ ဦးဇောတိက(ညိုမင်း ဟန်)၊ကိုသန်းထွန်း(ဝေးအိမ်)၊ကိုအုန်းမြင့်(မိုးသက်)၊စာရေးဆရာ ၀င်းမြအောင်(မြိတ်)တို့အား၎င်း၊ လျှောက်ခံစားနားလည်ပေးသော
စာပေလမ်းကြောင်းတစ် ကိုနိုင်(ကင်တာ-မြိတ်) အား
၄င်း၊ ကွန်ပျူတာစာစီပေးသော မသီသီထွေး တို့အား အထူး ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။ အစဉ်ထာဝရငြိမ်းချမ်းပျော်ရွှင်ကြပါစေ ဦးကောဝိဒ(မြိတ်)
လိပ်စာ ဦးကောဝိဒ (မြိတ်) အေးရိပ်ချောင်မဟာစည်သာသနာ့ရိပ်သာ အမှတ်(၅)စစ်ဆေးရုံအနီး၊ တက္ကသိုလ်လမ်း၊ ကလွင်၊ မြိတ် Tel : 059-41843 , 09 8761857 URL : www.venkawwida.info, Email : venkawwida@gmail.com
6 တုနှိုင်းမမီ ဖန်တီးရှင်နှင့် မိတ်ဆက်ခြင်း (က) ၇.၆.၂၀၀၈ စနေနေ့ ညနေ ၆ နာရီ………….. မိမိ၏ လက်ကိုင်ဖုန်းမှ အချက်ပေးသံ မြည်လာသဖြင့် ကောက်ကိုင်ကာ
(မြိတ်) ထံမှ ဖုန်းဆက်ခြင်းဖြစ်သည်၊ ဆရာဝင်းမြအောင်(မြိတ်) နှင့် မိမိမှာ လူချင်းမတွေ့ဖူးသော်လည်း စာပေချင်း ရင်းနှီးနေ သည်၊ ဘာသာရေးမဂ္ဂဇင်းတစ်ချို့၏ စာမျက်နှာများပေါ်တွင် ဆုံ တွေ့နေကြပါသည်၊ ကိစ္စက…မြိတ်မြို့-အေးရိပ်ချောင် မဟာစည် သာသနာ့ရိပ်သာ လက်ထောက်ဆရာတော် ဦးကောဝိဒ ရေးသား ထုတ်ဝေမည့် တုနှိုင်းမမီ ဓမ္မရသစာစုများ လုံးချင်း အမှာစာရေး ပေးရန် ဖြစ်နေသည်။ ဦးကောဝိဒ(မြိတ်)က ဖုန်းဆက်ကိုင်ပြီး ပြောပါသည်၊ ကိုမြင့်ထနွ်း(Quality)၏ အမည်နှင့် နိဗ္ဗာန် ဓမ္မရသစာတမ်းများ စာအုပ်ပါ မိမိ၏အညွန်းလွှာမျိုး လိုချင်ကြောင်း ၀ိသေသပြု၍ စကားဆိုပါသည်၊ မှန်ပါသည်….ကိုမြင့်ထနွ်း(Quality) အမည်နှင့် နိဗ္ဗာန်
ခေတ်စကားဖြင့် ပြောသော် ပေါက် သွားခဲ့သည်။ မိမိက “ ၁၅.၆.၂၀၀၈ နေ့တငွ် မုံရွာသို့ ကြွစရာရှိ ကြောင်း
ကိုမြင့်ထနွ်း(Quality)၏
စာအုပ်တငွ် အမှာစာ (အညွန်းလွှာ) ရေးပေးခဲ့ရသည်ကိုး……… ၁၀.၆.၂၀၀၈ အင်္ဂါနေ့နံနက် ၁၀း၃၀ နာရီ…….. ငယ်ရွယ်နုပျိုသော
ကျောင်းသို့ ရောက်လာပြီး ဦးကောဝိဒ(မြိတ်)၏ တုနှိုင်းမမီ စာမူ နှင့်
သော) မြိတ်မြို့ အေးရိပ်ချောင် မဟာစည်သာသာနာ့ရိပ်သာ ၂၅ နှစ်ခရီး
ဆက်ကပ်ပါသည်၊ ဆရာလေးက “ မြိတ်မှ မနေ့က (၉.၆.၂၀၀၈) ဖလိုက်(Flight)နှင့်ပို့လိုက်ကြောင်း”
မြန်လိုက်ပါဘိ၊ ဆရာလေးက မဓမ္မစာရီ ဖြစ်ပြီး ဦးကောဝိဒ(မြိတ်) ၏
ဖြစ်ပါသည်။ အမြန်လိုချင်ပါသတဲ့………. မိမိထံရောက်လာတဲ့
အများအားဖြင့် အလျင်စလိုချည်းပင် မည်သို့ဖြစ်စေ….စာပေတာ ၀န် ထမ်းဆောင်နေတဲ့ မိမိကတော့ တာဝန်ကျေအောင် ဆောင် ရွက်ေပးခဲ့သည်ချည်းပင် ဖြစ်ပါ၏။ ယခုလည်း….စာမူကို ဖွင့်ကြည့်လိုက်သည်၊ ခေါင်းစဉ် ငယ် (အခန်း) ၁၂ ခု ပါဝင်သည်၊ “တုနှိုင်းမမီ….တုနှိုင်းမမီ….” နှုတ်မှ ရေရွှတ်ကြည့်မိသည်၊ ဒီအမည်မှာ မိမိနှင့်ရင်းနှီးနေသလို ရှိသည်၊ “တုနှိုင်းမမီ…မိခင်နို့ရည်….” အကယ်ဒမီရုပ်ရှင်မင်းသမီး ဒါရိုက်တာကြီး ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား
ကြာသည်။ (ခ) ဤ၌
အေးရိပ်ချောင်မဟာစည် သာသနာ့ရိပ်သာတွင် လက်ထောက် ဆရာတော်တစ်ပါးဖြစ်၍ အနေဖြင့်
စာရေးဆရာတစ်ဦး’ အနေဖြင့်မူ မိတ်ဆက်ရန်လိုအပ်လာသည်၊ ဤတာဝန်ကို မိမိအားပေးအပ်လာသည်….ဟု ခံစားမိသည်။ သို့ဖြစ်ပေရာ… ရှေးဦးစွာ စာရေးဆရာအကြောင်းနှင့် စာရေးဆရာ၏ သဘောသဘာဝ ပြီးတော့ မိမိ၏ စာရေးဆရာ ဘ၀ကိုပါ
အမှာစာ၊အမွန်းစာ၊အညွန်းလွှာဆိုကတည်းက မွန်းတာညွန်းတာ တွေ ရှိလာပါသည်။ စာရေးဆရာစစ်စစ်သည် စာရေးနေသူသာ ဖြစ်သည်၊ စာရေးနေချင်သူသာ
စာရေးနေရလျှင် (သို့) စာဖတ်နေရလျှင် ကျေနပ်နေတတ်သူမျိုး ဖြစ်သည်၊ စာပေကိစ္စ၌သာ မွေ့လျော် ပျော်မွေ့နေတတ်သူ ဖြစ် သည်၊ ပိုပိုသာသာ ညွန်းဆိုရသော် စာရေးဆရာတစ်ယောက်အဖို့ စာရေးခြင်း၊စာဖတ်ခြင်းကို လုပ်နေရလျှင် လောကကြီးကိုပင် မေ့ နေချင်သည်၊ မေ့ထားချင်သူမျိုး ဖြစ်သည်။ စာရေးဆရာစစ်စစ်သည် နာမည်ကျော်ရန် မရည်ရွယ်၊ ငွေကြေးရရန် ပဓာနမထား ဥစ္စာဓနကြီးပွားချမ်းသာမှု ကိစ္စများ ကို ဘေးဖယ်ထားတတ်သူမျိုး ဖြစ်သည်၊ သို့ကြောင်းပင် စာရေး
9 ဆရာစစ်စစ်တို့သည်(များသောအားဖြင့်) မကြီးပွားမချမ်းသာကြ
စာရေးဆရာတစ်ယောက် ကြီးပွားချမ်းသာနေသည်မှာ မဟုတ်တတ်ချေ၊
အကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့် ဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရှိရမည်ဖြစ်သည်။ ကောင်းပါပြီ ၊ စာရေးခြင်းသက်သက်ဖြင့် ကြီးပွားချမ်း သာပြီး ဘ၀ရပ်တည်နေသူတွေကော မရှိဘူးလို့ မဆိုလိုပါ၊ ရှိပါ သည်၊ သို့သော် စာရေးခြင်းဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုနေ သူ စာရေးဆရာအင်းအားစုနှင့် တွက်ကြည့်လျှင် အလွန်အရေ အတွက်
စာရေးဆရာစစ်စစ်သည် စာရေးနေရလျှင် ကျေနပ်မည်၊ သူရေး လိုက်သော စာများ၊စာအုပ်မဂ္ဂဇင်း၊ဂျာနယ်၊စာစောင်များပေါ်တွင် ပုံနှိပ်စာလုံးအဖြစ်
ဖြစ်သည်၊ စာတစ်ပုဒ် စာတစ်အုပ် ရေးထုတ်ပြီးတိုင်း ကြည်နူးမှု ပီတိတွေ
ဖြစ်ပါ၏။ စာရေးဆရာကြီး ‘ပီမိုးနင်း’ အကြောင်း အနည်းငယ် တင်ပြရသော် ဆရာကြီးလောက် စာရေးနိုင်သူ ရှိမည်မထင်ပါ၊ တိုးတက်ရေး၊ကြီးပွားရေး၊အောင်မြင်ရေးစသော တက်ကျမ်းများ၊ လူမှုရေး၊အိမ်ထောင်ရေး၊အချစ်ရေး၊ စိတ်ပညာပါမကျန် ရေးသား ပြုစုခဲ့သည်၊ သို့သော် သူကိုယ်တိုင်ကား ဥစ္စာဓန မချမ်းသာခဲ့ပါ၊ ဆရာကြီး ခံစားရသည့် ချမ်းသာသုခမှာ နာမည်နှင့်ပီတိများသာ၊ ဆရာကြီးသည် ကိုယ်တိုင်အဆက်မပြတ် စာပေများ ရေးသားနေ ရသဖြင့် ကြီးပွားချမ်းသာကြောင်း ကိစ္စများကို ဆောင်ရွက်ချိန်
အားရှိနေသူ များထဲတငွ် စာရေးဆရာများမှာ အရှေ့တန်းက ပါဝင်၏။ မိမိသည်လည်း
“စာပေဖြင့် လူမျိုးဘာသာ သာသနာအကျိုးကို သည်ပိုးဆောင် ရွက်မည်” ခံယူထားပါသည်၊ “မိမိမှာပီတိမျှသာ ချမ်းသာပါသည်” ဟု
သဘာဝအချို့ကို ဖေါ်ကောင်လုပ်လိုက်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်၊ အဓိက ရေးပြမှာက
အကြောင်း ဖြစ်ပါ၏။ (ဂ) ၁၀.၆.၂၀၀၈ အင်္ဂါနေ့……… နေ့လည်ဆမွ်းစားပြီးအချိန်တငွ် “တုနှိုင်းမမီ”ကို စဖတ် လိုက်သည်၊
တုနှိုင်းမမီ(၁) မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ကိုယ်ပိုင်အင်တာနက်………တဲ့၊ စိတ်ဝင် စားစရာ၊
အင်တာနက်ဆိုသည့်အသံက စိတ်ဝင်စားစရာပင်ဖြစ်သည်၊ ဗုဒ္ဓ ဘုရားရှင်၏ သဗ္ဗညုတဥာဏ်တော်ကြီးကို နှိုင်းယှဉ်ပြီး အမွှန်း တင်ထားသည်။ အင်တာနက်သည် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ သဗ္ဗညုတဥာဏ်တော် ကိုမမီပုံ၊ ယနေ့ခေတ် သုံးစွေဲနကြသော ၀က်ဘ်ဆိုက်ဒေတာ (website-
တုနှိုင်းမမီ(၂) ဓမ္မဟင်းလျာများ အမေ့ဟင်းလျာက အကောင်းဆုံးပင်၊
ဟင်းလျာအမျိုးမျိုးတို့တငွ်
လေးအသင်္ချေ ကမ္ဘာတစ်သိန်းကြာအောင် ချက်ပြုတ်ခဲ့ရသည်။ ကွန်ပျူတာ(Computer)
ပေရာ ဗိုင်းရပ်စ်(Virus) ပိုးကြောင့်ဖြစ်စေ၊ အခြားအကြောင်း အမျိုးမျိုးကြောင့်ဖြစ်စေ၊ထည့်သွင်းထားသော ဒေတာ(Data)များ ပျက်စီးသွားနိုင်ပေသည်၊ မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ဓမ္မဟင်းလျာသည်ကား… စားသုံးသူ၊ အသုံးပြုသူ(user)များအတွက် ဘယ်တော့မှ မပျက် စီး၊ ဘယ်တော့မှလည်း ပုပ်သိုးသွားမည် မဟုတ်တဲ့အကြောင်း…. ပြီးတော့
ဖတ်ကြည့်ချင်လျှင် စာရေးသူ ဦးကောဝိဒ(မြိတ်)က သူ၏ ၀က်ဘ် ဆိုက်(website)ဖြစ်သော
တုနှိုင်းမမီ (၃) ဓမ္မအရိပ်(ကိုယ်ကျင့်တရား) သီလအရိပ်(ဓမ္မအရိပ်)က ပို၍အေးမြသည်။ “သစ်ပင်အရိပ် ဆွေမျိုးရိပ်နှင့်၊ မိရိပ်ဖရိပ် ဆရာရိပ်တို့ မင်းရိပ်အေးစွာ ဆက်ဆက်သာ၏၊ ထိုမှာထက်ပင် -
12 မြတ်ရှင်ဘုရား ဟောကြားမိန့်ဟ ဓမ္မရိပ်သာ အေးမြပါသည် သူ ငါ ခိုဖို့ ကောင်းလှ၏” စသည့် ဓမ္မအရိပ်(ကိုယ်ကျင့် သီလ)အေးမြပုံတို့ကို
တုနှိုင်းမမီ(၄) ဓမ္မအရိပ်(ဗဟုသုတ) – ‘တရားကို နာမှသိ၊ သိမှကျင့်၊ကျင့်မှရ’ ပေလိမ့်မည်၊ ယနေ့ခေတ်သည် တရားကို လူကိုယ်တိုင် မြင်တွေ့နာကြားရန် မခဲယဉ်းသလို
ထေရ၀ါဒ ဘာသာရေး မဂ္ဂဇင်းများ၊ဂျာနယ်၊စာစောင် စာအုပ်များ အလျံပယ်ထက်ွရှိနေသောကြောင့်တည်း။ ဦးကောဝိဒ(မြိတ်)
ဥာဏ်ထက်သန်ရုံမျှမက အဓိဂမသုတဥာဏ်ရရှိမှ မဂ်ဖိုလ်နိဗ္ဗာန် ၀င်စံနိုင်ပုံ၊ တရားနာယူဖူးသော အကျိုးကျေးဇူး (အာဂမသုတ)၊ တရားရှုမှတ်ဖူးသော အကျိုးကျေးဇူး(အဓိဂမသုတ)တို့ကို ၀တ္ထု သာဓကများစွာဖြင့်
ဗဟုသုတသည်လည်း တုနှိုင်းမမီ သော ဓမ္မအရိပ်ဖြစ်ကြောင်း တင်ပြထားလေသည်။ စာရေးသူသည် ဆောင်းပါးတိုင်းဆိုလိုချက် ပေါ်လွင် စေရန် ၀တ္ထုသာဓကများကို ဖေါ်ဆောင်ထည့်သငွ်းထားသည်။
တုနှိုင်းမမီ(၅) ဓမ္မအရိပ် (ကလျာဏမိတ္တ)-
13 ဘ၀တွင် မိတ်ကောင်းဆွေကောင်းရှိရန် လိုအပ်ပုံ ဆရာကောင်း သမားကောင်းများကို မှီခိုဆည်းကပ်ရန် လိုအပ်ပုံ များကို ဓမ္မအရိပ် (ကလျာဏမိတ္တ)စာစုတငွ် ညွန်းဆိုထားလေ သည်။ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာ ၊အရှင်သာရိပုတ္တရာ၊အရှင်အာနန္ဒာ စ သော ဆရာကောင်းဆရာမြတ်(ကလျာဏမိတ္တ)များကို
ဆည်းကပ်ခွင့် ရရှိကြသဖြင့် မဂ်ဖုလ်ိနိဗ္ဗာန်ရရှိသွားကြပုံများကို သာဓက၀တ္ထုများဖြင့် ညွန်းပြထားပေသည်၊ သူတော်ကောင်းနှင့် ပေါင်းဖေါ်ရပြီး
ကောင်းများချည်း ဖြစ်ကြမည်ဆိုပါလျှင် ကမ္ဘာလောကကြီးတစ်ခု လုံး အေးချမ်းသာယာနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း တင်ပြထား၏။
တုနှိုင်းမမီ(၆) စိတ်ဝင်းစားဖွယ်အိမ်ကြီး….. အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တို့၏ မဂ် တရားဖိုလ်တရားတို့ကို အရိယာ တို့စံပျော်ရာ “စံအိမ်တော်ကြီး” အဖြစ် တင်စားဖွဲ့ညွှန်းထားသည်၊ စံအိမ်(၁၀)မျိုး ရှိကြောင်းကို လည်း
ဖေါ်ပြရသော်….. (၁) ပထမစံအိမ်သည် နိဝရဏတရားငါးပါး ကင်းရှင်း နေ၏။ (၂) ဒုတိယစံအိမ်သည် ဒွါရခြောက်ပေါက်တို့၌ ၀င်ရောက်ထိခိုက် လာသော
အစည် အာရုံခြောက်ပါးတို့၌ ခံစားချက်ကင်းနေ၏။ (၃) တတိယစံအိမ်သည် အပ္ပမာဒခေါ်တဲ့ သတိအမြဲရှိနေ၏ ။ (၄) စတုတ္ထစံအိမ်သည် … (က) ဆွမ်း၊သင်္ကန်း၊ကျောင်း၊ဆေး ပစ္စည်းလေးပါး မှီဝသဲုံးဆောင်၊ (ခ) သည်းခံမှု၊
14 (ဂ) ဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်မည့်အရာများကို ရှောင်ကြဉ်မှု၊ (ဃ)မကောင်းသော အကြံအစည်များကို ပယ်မှု၊ “မှီဝ၊ဲ သည်းခံ၊ရှောင်ပယ်လှန် လေးတန်မှီရာများ” ကို အကျယ် တ၀င့် ရှင်းလင်းတင်ပြထားသည်။ (၅) ပဉ္စမစံအိမ် - သီးသန့်သစ္စာဟုဆိုအပ်သော အယူမှားကို ပယ်၏၊ (၆) ဆဋ္ဌမစံအိမ်- ရှာမှီးမှုများမှ ကင်းရှင်းနေ၏၊ ရှားမှီးမှု သုံးမျိုး…. (က) ကာမေသနာ - ကာမဂုဏ်ခံစားရန် ကြံခြင်း၊ (ခ) ဘဝေသနာ - ဘ၀ကိုရှာမှီးခြင်း၊ (ဂ) ဗြဟ္မစရိယေသနာ - မြတ်သောအကျင့်ကို ရှာမှီးခြင်း၊ (၇) သတ္တမစံအိမ် - နောက်ကျုသော ကြံစည်မှုများမှ ကင်းစင်၏၊ ကြံစည်မှုသုံးမျိုး.. (က) ကာမ၀ိတက် - ကာမဂုဏ်ခံစားရန်ကြံစည်ခြင်း၊ (ခ) ဗျာပါဒ၀ိတက် - သူတစ်ပါးအား ဖျက်ဆီးရန် ကြံခြင်း၊ (ဂ) ၀ိဟိံသ၀ိတက် - သူတစ်ပါးအား ညင်းဆဲရန်ကြံခြင်း၊ (၈) အဋ္ဌမစံအိမ် - ၀င်သက်ထက်ွသက်များ ချုပ်ငြိမ်းနေ၏။ (၉) န၀မစံအိမ် - လောဘ ၊ဒေါသ၊မောဟ စသောကိလေသာ တရားများမှ ကင်းလွတ်သည့်စိတ် ရှိနေ၏။ (၁၀) ဒသမစံအိမ် - ကိလေသာအပေါင်းတို့မှ လွတ်မြောက်နေ သည်ဟု
တုနှိုင်းမမီ(၇) အမြတ်ဆုံးဥစ္စာ(သို့) တုနှိုင်းမီသော ဥစ္စာများ…
15 ဤစာစုများကို ဦးကောဝိဒ(မြိတ်)ကို
ကျော်လနွ်၍
စာအရေးသားကောင်းသူ တစ်ဦးအနေဖြင့် လည်း တွေ့ရသည်၊ ပြီးလျှင် သာမန်စာရေးသူတစ်ဦးမျှ မဟုတ်မူ ဘဲ
မိမိအကြောင်းမဲ့ မြင်ခြင်းမဟုတ်ပါ၊ (website)တွင် အမည်တင် ထားရုံမျှမက
ဖြစ်သည်၊ [တုနှိုင်းမမီ စာစု ၁.၂.၁၀.၁၁ တို့တွင်ရှု] အတွေးဟူသည်
အာရုံဝင်စားမှသာ ပေါ်လာတတ်သည်၊ “အတွေး” ကို ခေါ်ယူရ သည်၊ ခေါ်ယူ၍ ရရှိ ရောက်ရှိလာတတ်သောကြောင့် “ အတွေး အခေါ်”ဟု ခေါ်ရပေမည်၊ အတွေးအခေါ်မှ အတွေးအမြင်များ ဖြစ်လာရလေသည်၊ စာပေရေးသားပြုစုကြရာတွင် ပထမတွေး ကြရသည်၊
ပီပီပြင်ပြင် ဖြစ်လာတော့မှ စာရွက်ပေါ် (ကွန်ပျူတာပေါ်) ချရေးချ ရိုက်ကြရသည် မဟုတ်ပါလား၊ အမှာစာရေးရာ၌လည်း အတွေးပါ ရသည်၊ ထို့ကြောင့်ပင် တွေးရတာကြာပြီး ရေးရတာ မကြာပါ ဟု ဆိုရခြင်းဖြစ်ပါသည်၊ အတွေးအမြင် ကြည်လင်မှလည်း ဘ၀ဆို တာ ပီပြင်ကြမည် မဟုတ်ပါလော။ အမြတ်ဆုံးတုနှိုင်းမမီဥစ္စာဆိုတာ (Conviction – Saddha)။
16 လူတိုင်းတွင် သာယာရွှင်လန်းသည့် ဘ၀တစ်ခုကို ဖန် တီးခွင့်ရှိသည် (Everybody can create the happy life) လို့ဆို ထားသည်။ ထို့ပြင် လူ့အရည်အသွေးဆိုတာ သီလ(Morality)ပြီး တော့ ဟိရီနှင့်သြတ္တပ္ပ၊ ဟိရီကို (Shame to do evil, hiri)ဟု ဆိုပြီး သြတ္တပ္ပကို (Fear to do evil, attapa)ဟု ဖွင့်ဆိုထား သည်။ မကောင်းမှုပြုရန်
သြတ္တပ္ပ၊ ဤတရားနှစ်ပါးသည် လောကကြီးကို စောင့်ရှောက် လျှက်ရှိသော
လောကပါလတရား (Guardian of the world) ဟုညနွ်းပြုထား လေသည်။ စာဂ (Charity)၊ ပညာ(Knowledge)သမ္ပဇဉ်တရားလေးပါးကို
တုနှိုင်းမမီ(၈) အကောင်းဆုံးအရသာ - အကောင်းဆုံးအရသာသည် သစ္စာ ဖြစ်၏။ သစ္စာတို့တငွ်
ဆင်းရဲခြင်းအမှန်တရား- ဒုက္ခသစ္စာ၊ဆင်းရဲကြောင်း အမှန်တရားသမုဒယသစ္စာ၊
ဆင်းရဲချုပ်ကြောင်း အမှနတ်ရား- မဂ္ဂသစ္စာတုိ့ ဖြစ်သည်။ ပြီးတော့ လောကသစ္စာ ၊ ဓမ္မသစ္စာ……
17 လောကသစ္စာနယ်ပယ်တငွ်
ကတိသစ္စာတည်သော ခါဝယ် သြဇာလေးနက် ပေါ်ဆီတက်၍ နွယ်မြက်သစ်ပင် ဆေးဖက်ဝင်၏” ။ ဓမ္မသစ္စာနယ်ပယ်တငွ် စီးဆင်းနေသော မြစ်ရေအလျဉ် ကိုပင် ရပ်တန့်သွားစေပြီး၊ မြေပြင်ဖြစ်ကာ ကူးသွားနိုင်ခဲ့သော မဟာကပ္ပိနမင်းကြီး၏သစ္စာ၊ တောမီးကို ချုပ်ငြိမ်းစေခဲ့သော ဘုရားအလောင်းတော် ငုံးမင်း၏သစ္စာ၊ ကျုရိုးများကို
မျောက်မင်း၏သစ္စာ၊ ငုံးမင်း၏ မီးမလောင်သော တော၊ ဃဋိကာရ အိုးထိန်း သည်၏
မိုးမစိုစတ်ွသောအိမ်၊
ခတ်နှိပ်ထင်ရှားသော လ၊ ဤလေးမျိုးတို့မှာ ကမ္ဘာတည်သ၍ တည်ရှိနေမည်ဖြစ်သော ကပ္ပဋ္ဌိတိ တရားများ ဖြစ်လေသည်။ “ ထုံးမတိမ် ငုံး အိမ် ကျူ လနှင့် တူမျှစံနှိုင်း ထပ်တညီ ကပ္ပဋ္ဌီတည်တံ့တဲ့ သစ္စာသမိုင်း”
တုနှိုင်းမမီ (၉) အံ့ဖယ်ွသာသနာ- မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ အံ့ဖွယ်ရှစ်ဖြာ သာသနာ တော်ကြီးသည် တုနှိုင်း၍ မမီနိုင်သည့် သာသနာတော်ကြီး ဖြစ် ကြောင်း သာသနာတော်နှင့်ကြုံခိုက် သတိပဋ္ဌာန်တရားလေးပါး တို့ကို လေ့လာပွားများကြရန်ဖြစ်ကြောင်း တင်ပြထားပါသည်။
18 နှစ်ပေါင်း(၂၅၀၀)ကျော်က ဗိုင်းရပ်စ်ဆော့ဖ်ဝဲ တရားဟောပြောရာတွင်၎င်း၊စာပေးရေးသားတင်ပြရာ တွင်၎င်း၊
တင်ပြပုံ ကောင်းမွန်လျှင် နာယူချင်စဖွယ် တရားတစ်ပုဒ်၊ ဖတ် ရှုချင်စဖွယ် စာတစ်ပုဒ် ဖြစ်လာနိုင်ပေသည်၊ ပရိသတ်နာချင်၊ ဖတ်ချင်အောင် လျှော့ဈေး
ပိဋကတ်စည်းမျဉ်းကို ကျော်လွန်သွားတတ်ပါသည်၊ ဟောကြရာ ရေးကြရာ၌ သတိပြုကြစရာပင်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေ တင်ပြမှု (Presentation)ကတော့ ရှင်သန်လတ်ဆတ်နေသင့်ပါသည်။ ဦးကောဝိဒ(မြိတ်)၏
ကြည့်သောအခါ သူ၏တင်ပြမှုသည် ခေတ်မီသည်၊ နုပျိုလတ် ဆတ်သည်၊ ခေတ်ပရိသတ်၏ စိတ်ဓါတ်နှင့် သိပ်ဟပ်မည့် အရေး အသားမျိုး ဖြစ်သည်ကို တွေ့ရသည်၊ သူ၏ အရေးအသား အတွေးစကားများကို ဖတ်ရှုရင်း အတွေးပွားကြည့်နိုင်သည်။ နီဝရဏဗိုင်းရပ်(စ်)……….တဲ့။ မြတ်ဗုဒ္ဓသည် စိတ်တွင်စွကဲပ်တတ်သော စိတ်ဗိုင်းရပ် (စ်)ပိုးကို တွေ့ရှိသူ…….တဲ့။ ထိုဗိုင်းရပ်(စ်)(Virus)ပိုးများ
တွေ့ရှိသူ ထုတ်ဖေါ်ပေးသူ…..တဲ့။ သုတေသနပညာရှင်ကြီး…..တဲ့ဗျာ၊ ခေတ်မီလိုက်ပါဘိ၊
19 မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ တုနှိုင်းမမီ ဗိုင်းရပ်(စ်)ဆော့ဖ်ဝဲ (Virus software) ဟူသည် သီလ၊သမာဓိ၊ပညာ တည်းဟူသော မဂ္ဂင် အကျင့်တရား ရှစ်ပါး (The Ariya of Eight Constituents) အကျင့်တရားသာ ဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။
တုနှိုင်းမမီ(၁၁) အွန်လိုင်းပေါ်က မေးခွန်းတစ်ခု…… အွန်လိုင်း (online)ပေါ်က မေးခွန်းတစ်ခုတွင် ‘နိဗ္ဗာန်’ တကယ်ရှိသလား……မေးခွန်းကို ဖြေဆိုထားသည်၊ တုနှိုင်းမမီ ဖန်တီးရှင်ဖြစ်သော စာရေးသူ ဦးကောဝိဒ(မြိတ်)သည် ၂၀၀၆ ခုနှစ် ဇူလိုင်လကပင် စတင်၍ အွန်လိုင်းပေါ်တွင် ဓမ္မအလင်း ရောင် The Light of Dhamma ဟူသောခေါင်းစဉ် တင်ထားခဲ့ ခြင်းဖြစ်သည်။ သူ၏
ရည်ရယ်ွချက်ကလည်း
“မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ဓမ္မအလင်းရောင်များကို လူသားများအား လက်လှမ်း မီသမျှ
လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်သော ခေတ်နှင့်လျော်ညီသည့် အစီအစဉ်ဖြစ် သည်၊ မိမိမလုပ်နိုင်သည့် ကိစ္စများကို
လုပ်ဆောင်သူ ရှိနေ၍ အမှာစာရေးသူက သာဓု ခေါ်မိပါ၏။ တုနှိုင်းမမီ(၁၂) ဖန်တီးရှင်…… ‘ဖန်တီးရှင်’ ဟူသည် အမှန်စင်စစ် မိမိကိုယ်တိုင်ပင် ဖြစ်နေ၏။
20 မိမိတို့ အမှန်တကယ် ရယူပိုင်ဆိုင်နိုင်သော ဂရုကံ၊ အာသန္နကံ၊ အာစိဏ္ဏကံ၊ ကဋတ္တာကံများကို ပိုင်ဆိုင်ရရှိထားကြ သောကြောင့်ပေတည်း၊ အကြောင်းကို
အဆိုပါကံ(၄)မျိုး ခြွဲ ခမ်းစိတ်ဖြာတင်ပြ
ထားသည်။ xxxxxxxx ဤသို့အားဖြင့် ဗဟုသုတ၊စာပေရသ၊ဓမ္မရသများ ကို ကိုယတ်ိုင်ကိုယ်ကျ
ကလွင်ရပ်ရှိ အေးရိပ်ချောင် ဆရာတော်ငယ် ဦးကောဝိဒ(မြိတ်) ၏ ကိုယ်တိုင် စုဆောင်းရေးသားတင်ပြထားသော “တုနှိုင်းမမီ ဓမ္မရသစာစုများ”
တိုက်တနွ်း
လိုက်ရပေသည်။ မူရင်းစာကိုယ်များကို မဖတ်ရှုမီ စာတံတားထိုး၍ နိဒါန်း ပျိုးလိုက်ရပါကြောင်း၊ အချိုပေါ် သကာလောင်းပြီး ကောက်ညှင်း ပေါင်းကို
ဘုန်းကြီး သက်ရှည် ကျန်းမာပါစေ။
ပြည့်ဝပါစေ။ “နမော သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဿ” မုံရွာ နေဇာ ၁၂.၆.၂၀၀၈ (၁၄း၀၄ နာရီ)
22 တုနှိုင်းမမီ (၁) မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ကိုယ်ပိုင်အင်တာနက် ယနေ့ကမ္ဘာကြီး၌
သောအဟုန်ဖြင့် တိုးတက်လျှက်ရှိရာ International Network (Internet)ဆိုသည့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကွန်ရက် ချိတ်ဆက်မှု ဖြင့်
လောက်အောင် ကမ္ဘာ့အရှေ့ခြမ်းမှ အနောက်ခြမ်းသို့ E-mail ဖြင့် သော်၎င်း၊ G-talk, VZO chat, yahoo massanger, Skype စ သည်တို့ဖြင့်
ဆက်သယွ်၍
သည်၊ ထို့ကြောင့် ရှေးယခင်က ကမ္ဘာကြီးသည် အလွန်ကျယ် ၀န်းသည်ဟု ဆိုရသော်ငြားလည်း ယနေ့ အိုင်တီခေတ်ကြီးတွင် အလွန်ကျဉ်းမြောင်းသွားလေပြီ ဟု ဆိုရပါမည်။ တစ်ခါက
(Internet connection)ရက်ပုငိ်းလောက် ပြတ်တောက်သွားရာ သူ၏ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ နိုင်ငံတကာနှင့် အဆက်အသွယ် ပြတ်တောက်ခဲ့ရသည့်အတွက်(internet)မရှိလျှင်
အလွန်နစ်နာကြောင်း ပြောဆိုခဲ့ဖူးပါသည်၊ ဤသည်ကို ထောက် ရှုခြင်းဖြင့် ယနေ့ခေတ်၌ လူသားများအတွက် အင်တာနက်သည် အလွန်အရေးပါ အရာရောက်သည့်အပြင် မရှိမဖြစ် အလွန်လို အပ်သော အရာတစ်ခုအဖြစ်လည်း သက်သေခံနေပေသည်။ အကယ်၍ လူသားတို့အတွက် အင်တာနက်သည် မရှိ မဖြစ် လိုအပ်နေသော အရာတစ်ခုဖြစ်နေပြီဆိုလျှင် လွန်ခဲ့သော
လိုအပ်လိမ့် မည်ဟု တွေးတောစရာပင်ဖြစ်သည်။ အကြောင်းမှာ …ထိုခေတ်တုန်းက အင်တာနက် မ ပေါ်ပေါက်သေးချေ၊ သို့သော်လည်း အင်တာနက်ထက် အဆ ပေါင်းများစွာ စွမ်းရည်မြှင့်မားပြီး လောက၌ မည်သည့်အရာနှင့်မျှ တုနှိုင်းမမီသော အရာတစ်ခုကား အမှန်တကယ် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့လေ သည်၊ ထိုအရာကား တစ်ခြားမဟုတ်၊ မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ သဗ္ဗညုတ ရွှေဥာဏ်တော်ကြီးပင် ဖြစ်ပါသည်၊ ယနေ့ခေတ် အင်တာနက်၏ ဆက်သယ်ွနိုင်သော ဧရိယာမှာ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလောက်မျှသာ ဖြစ် ပါသည်၊ မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ သဗ္ဗညုတ ရွှေဥာဏ်တော်သည် ဤကမ္ဘာမျှ သာမက စကြာဝဠာ ကမ္ဘာပေါင်းများစွာသို့လည်း ဆက်သယ်ွနိုင် ပါသည်။ အင်တာနက်တငွ်
(website)များသို့ ခြေရာခံကာ မိမိ၏ information များကို ခိုးယူ နိုင်ပါသော်လည်း မြတ်ဗုဒ္ဓသည် သူ၏ကိုယ်ပိုင်အင်တာနက် ဟု ဆိုအပ်သည့် သဗ္ဗညုတရွှေဥာဏ်တော်ဖြင့် အလိုတော်ရှိသလို ကွန်ရက်ဖြန့်ကျက်ကာ
(information)များကို မည်သူမျှ ခြေရာခံ ခိုးယူနိုင်စမွ်း မရှိသည့် အပြင် လုံခြုံမှု(security)အပြည့်ရှိနေပေသည်။ ယခုဖြစ်ဆဲကာလတွင်လည်း
နတ်ပြည်၊ ဗြဟ္မပြည်တိုင်အောင် သိမြင်နိုင်သကဲ့သို့ ငရဲ၊တိရစ္ဆာန်၊ ပြိတ္တာစသည့်
ဖြစ်ရပ်မှန်များကိုလည်း အလိုရှိလျှ င် အလိုရှိသလောက် တည်ကျ စွာ သိမြင်နိုင်စွမ်း ရှိပါသေးသည်၊ လွန်ခဲ့သော အတိတ်ကာဆီက မရေမတွက်နိုင်သော
တီဗွီဖန်သား ပြင်တင်ွသိရသကဲ့သို့ တိကျမှန်ကန်သော အဖြေ များကို ပေးစွမ်းနိုင်ပါသည်၊ ထိုအရာကား “ပုဗ္ဗေနိဝါသာနုဿတိ ဥာဏ်” ဟု ဆိုရသည့် အစွမ်းထက်သော မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ကိုယ်ပိုင် အင်တာနက်ပင်တည်း။ ထိုမျှမက နောင်ဖြစ်လတံ့သော အဖြစ်အပျက်များကို လည်း လိုအပ်လျှင် လိုအပ်သကဲ့သို့ တိကျမှန်ကန်စွာ သိနိုင်ပါ သည်၊ ထိုအရာကား မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ “ အနာဂတံသဥာဏ်တော်”ပင် ဖြစ်ပါသည်။ အင်တာနက်ကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် လူသားတို့၏ စီးပွား ရေး၊အိမ်ထောင်ရေး၊ကျန်းမာရေး၊
လောကရေးရာများစွာကို တိုးတက်သာလွန်အောင် စွမ်းဆောင် နိုင်ကာ ဘ၀ပြဿနာ တစ်စတ်ိတစ်ဒေသကို ဖြေရှင်းပေးနိုင်ရုံ သာ ဖြေရှင်းပေးနိုင်သည်၊ ရာနှုန်းပြည့်ကား မဖြေရှင်းပေးနိုင်ပေ။ မြတ်ဗုဒ္ဓသည်ကား သူ၏ သဗ္ဗညုတရွှေဥာဏ်တော်ကို အသုံးပြုကာ လူသားများ၏ ဘ၀ကိုသာမက နတ်၊ဗြဟ္မာ သတ္တ၀ါ အားလုံးတို့၏ ဘ၀တိုးတက်အောင်မြင်မှုကိုပါ ရာနှုန်းပြည့်ရရှိစေ ရန် လမ်းညွန်မှုပေးနိုင်ပါသည်၊ ထို့ပြင် နတ်ဗြဟ္မာသတ္တ၀ါတို့၏ တကယ့်ဘေး
ဘေးစသည့် ဘေးဆိုးကြီးများမှလည်း လွတ်မြောက်စေရန် သူ၏ သဗ္ဗညုတဥာဏ်တော်ကို အသုံးချကာ လမ်းညွန်မှု အပြည့်အ၀ ပေးနိုင်ပေသည်၊ ထို့ကြောင့်လည်း မြတ်ဗုဒ္ဓသည် လူ နတ် ဗြဟ္မာ သတ္တ၀ါအားလုံး၏ အားကိုးရာ ဆရာတစ်ဆူ ဖြစ်ခ့သဲည် မဟုတ် ပါလော။
25 (ဘီစီ ၄၆၉-၃၉၉) ခန့်တငွ် ဆရာကြီး ဆိုကရေးတီး သည် သူ၏အမြင့်ဆုံး အတွေးအခေါ်များအနက် တစ်ခုဖြစ်သော “ကမ္ဘာကြီးသည် စက်လုံးကဲ့သို့ လုံးဝန်းသော သဏ္ဍာန်ရှိသည်” ဟူ၍ မိန့်ဆိုခဲ့သေးသည်၊ ထိုစဉ်က ဤအတွေးမျိုးကို လက်ခံသူ မရှိပါ ၊ ရှေးရိုးအစဉ်အလာ အယူအဆကို ဖီဆန်သူအဖြစ် သတ် မှတ်ခံခဲ့ရသည်၊ သေဒဏ်ကိုပင် စီရင်ခံခဲ့ရသည်၊ ထိုစဉ်က သူ၏ မိန့်ဆိုချက်ကား ယနေ့အဖို့ မှန်လွန်းလှသည၏။ ထို့ကြောင့် အဆင့်မြင့် ယနေ့စမ်းသပ်မှုများအရ ဆိုက ရေးတီးကို ချီးကျူးဂုဏ်ယူ ဂါရ၀ပြုထိုက်ပါပေ၏၊ သို့သော် ဆရာ ကြီးဆိုကရေးတီးထက် နှစ်ပေါင်းကိုးဆယ်ခန့်စော၍ ဤကမ္ဘာကြီး သာမက စကြာဝဠာကြီးတစ်ခုလုံး ၀ိုင်းဝန်းသော သဏ္ဍာန်ရှိသည် ဟု
ထို့ကြောင့် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏သဗ္ဗညုတဥာဏ်တော်ကိုကား မည်သူတစ် ဦးတစ်ယောက်မျှ တုနှိုင်းမမီနိုင်သော ဥာဏ်တော်ဟု ပြောလျှင် မှားအံ့မည်မထင်ပါ။ ၁၉၅၄
Spectrum Physics တွင် ရောင်စဉ်များကို သရုပ်ခွဲကြည့်ရာ မျက်လုံးသည် အရောင်များကို မြင်ရာ၌ တစ်ခုပြီးတစ်ခု (တစ် ရောင်ပြီးမှ တစ်ရောင်)မြင်ရသည်ဟူ၍ တွက်ချက်နည်းဖြင့်၎င်း၊ spectrometer ခေါ် ကိရိယာကို အသုံးပြု၍ လက်တွေ့နည်းဖြင့် ၄င်း၊ သက်သေပြခဲ့ကြသည်။ ရှင်းလင်းချက်မှာ မတူညီသော လှိုင်းအလျားတို့၏ ရွေ့ လျားမှုသည်
မြင်ရ သည်ဟူ၍ ဖြစ်သည်၊ အမှန်ကား မတူညီသော အရာများ ကို အစဉ်အတိုင်းမြင်ရသည်၊ု မြတ်စွာ ဘုရားက စိတ်ဟူသည် (ဤနေရာ၌ မြင်သိစိတ်) တစ်ချိန်တည်းတွင် နှစ်ခုတစ်ပြိုင်နက် မဖြစ်ကောင်း ဟူ၍ မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ တုနှိုင်းမမီသော ဥာဏ်တော်ဖြင့် အဘိဓမ္မာဒေသနာတော်၌ တိကျစွာ ဟောတော်မူခဲ့ပါသည်။ ဆိုအပ်ခဲ့ပြီးသည်တို့ကား လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း ၂၅၀၀ ကျော် ကာလက တကယ်ရှိခဲ့သည့် စွမ်းအားထက်မြက်သော မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ကိုယ်ပိုင်အင်တာနက်ပင် ဖြစ်ပါတော့သည်။ ဤသို့ဖြင့် ယနေ့ခေတ်မီပါသည်ဆိုသော အင်တာနက် သည် ခေတ်ဟောင်းဆီက မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ကိုယ်ပိုင်အင်တာနက် ထက် ဘာကြောင့်များ ဤမျှလောက်ကွာခြားပြီး အဆင့်နိမ့်နေရ ပါသနည်း။ ရှင်းပါဦးအံ့….ယနေ့ခေတ်
လာရန်အတွက် ပေးဆပ်ရသည့် အရင်းအနှီးကား…လူသားတို့၏ ဦးနှောက်ဖြင့် တီထင်ွပြီး ငွေကြေးပမာဏနှင့် အချိန်ကာလအား ဖြင့် အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ အရင်းအနှီးလောက်သာ ပေးဆပ် ရမည် ဖြစ်ပါသည်။ မြတ်ဗုဒ္ဓကား
အတွက် အလောင်းတော်ဘ၀ လေးအသင်္ချေနှင့်ကမ္ဘာတစ်သိန်း ကာလတိုင်အောင် လူတကာတို့ ပြုနိုင်ခေဲသာ ပါရမီတော်(၁၀) ပါးကို ဖြည့်ကျင့်ခဲ့ရသည်၊ ထိုသို့ဖြည့်ကျင့်ခဲ့ရာတွင် သမုဒ္ဒရာရေ မည်မျှပင် များပြားစေကာမူ မြတ်ဗုဒအ္ဓ လောင်းတော် လှူဒါန်း တော်မူခဲ့သော အသွေးတော်၏ ပမာဏကိုကား မမီနိုင်ပါ။
27 မိုးကောင်းကင်က များပြား
အရေအတွက်ကိုကား မမီနိုင်ပါ။ မြင်းမိုရ်တောင်ကြီးသည်
ထောင် မြင့်မားစေကာမူ လှူဒါန်းတောမူခဲ့သော ဦးခေါင်းတော် များ စုပုံထားသည့် ထုထည်ကိုကား မမီနိုင်ပါ။ ကမ္ဘာမြေကြီးသည် မည်မျှပင် ထုထည်ကြီးမားစေကာ မူ လှူဒါန်းတော်မူခဲ့သော အသားတော်၏ အရေအတွက်ကိုကား မမီနိုင်ပါချေ။ ယနေ့ခေတ် အင်တာနက်တငွ် ၀က်ဘ်ဆိုက် ဒေတာ (website – Data)များ ဘီလျံပေါင်းများစွာမက ရှိပါသော်လည်း ဆန်းကြယ်နက်နဲမှု အရာမှာမူကား မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ကိုယ်ပိုင်ဝက်ဘ် ဆိုက်တငွ် လွတ်တင်ထားသည့် သုတ်၊ ၀ိနည်း၊ အဘိဓမ္မာ တည်း ဟူသော ပိဋကတ်သုံးပုံကိုကား မမီနိုင်ပါချေ။ ဤကဲ့သို့ တုနှိုင်းမမီ ကွာခြားလွန်းမက ကွာခြားလွန်း လှသည့်အကြောင်းမှာ ပြဆိုခဲ့သည့်အတိုင်း အသက်၊သွေး၊ချွေး၊ များစွာဖြင့် ပေးဆပ်ရင်းနှီးခဲ့ရသော မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ပါရမီတော် အရင်း အနှီး ကြီးမားမှုကြောင့်ပင် ဖြစ်ပါသည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ….လောကလူအများ အသုံးပြုနေကြ သော အင်တာနက်၏ စွမ်းဆောင်ရည်မှာ ဘ၀တွင် အဓိကမကျ သည့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ထွန်းကားတိုးတက်မှုမျှသာ စွမ်းဆောင်နိုင် မှာ ဖြစ်ပြီး၊ မြတ်ဗုဒ္ဓသည် သူ၏ဥာဏ်တော်အား အသုံးချကာ ဟောကြားတော်မူထားသော
သတ္တ၀ါ အားလုံးတို့အတွက် ဘ၀တွင် အဓိကကျသည့် စိတ်ပိုင်း ဆိုင်ရာ
28 မည်သည့်အရာဖြင့် ဖြစ်စေ၊ တုနှိုင်းစေကာမူ တုနှိုင်း၍ မမီနိုင် ပါချေ။ ဤကဲ့သို့ နှိုင်းယှဉ်ရေးသားရခြင်းသည် ယနေ့ အိုင်တီ ခေတ်ကြီးတွင် အကြောင်းပြချက်မျိုးစုံတို့ဖြင့် အွန်လိုင်းပေါ်တက် နေကြသော
သည့် စကားလုံးများဖြင့် တန်ဆာဆင်ပြီး မြတ်ဗုဒ္ဓ၏တရားတော် များကို စိတ်ဝင်စားကာ ဘ၀တန်ဖိုး တိုးတက်မှုများစွာ ရရှိကြစေ ရန် ရည်ရယွ်၍ ယခုကဲ့သို့ Internet & Enlightenment of Buddha မြတ်ဗုဒ္ဓဥာဏ်တော်နှင့် အင်တာနက်အကြောင်းကို ရေး သားလိုက်ရခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ နိဂုံးချုပ်အားဖြင့်…..
ဂုဏ်တော်အစုံ သဗ္ဗညုတ ရွှေဥာဏ်တော်ဂုဏ်တို့ကို အာရုံပြု၍ ဗုဒ္ဓါနုဿတိ ဘာဝနာများ ကြိုးစားပွားများနိုင်ကြစေရန် ရည်ရယွ် လျှက်
လင်္ကာလေးကို ဖေါ်ပြလိုက်ရပါတော့သတည်း။ သဗ္ဗညုတဥာဏ်တော်အစွမ်း……. ၁။ သိရန်မှန်က မကျန်ရအောင်၊ လုံးဝစုံလင် အကုန် မြင်၊ သဗ္ဗဉ်ဥာဏ်တော အစွမ်းတည်း။ ၂။ သိသည့်တရား၊ များအပြား၌ ၊ ဟောထားစဖွယ်၊ နည်းသွယ်သယ်ွကို
တော် အစွမ်းတည်း။ ၃။ ကျွတ်ထိုက်ကြပေ၊ များဝေနေ၏ ဣနြေ္ဒစရိုက်၊ သူ့ အကြိုက်ကို၊
အစွမ်းတည်း။ ဥာဏ်တော်စမွ်းပကား ဤသုံးပါးကြောင့်၊ အများဝေနေ
29 ကျွတ်လတ်ွစေဖို့၊
ကြီးမာလေဘိ၊ ရှစ်ဆယ်ပြည့်၍ ပရိနိဗ္ဗာန်၊ စံသည့်တိုင်အောင်၊ သယ်ယူဆောင်၊ ဘုန်းခေါင်ငါတို့ဘုရားတည်း။ x x x x x x x
31 တုနှိုင်းမမီ (၂) အကောင်းဆုံးဟင်းလျာ “မြိန်ရာဟင်းကောင်း”
ဓလေ့ဝယ် ဟင်းလျာနှင့်ပတ်သက်၍ ထမင်းမြိန်သည်ဟု အဆိုရှိ တတ်ကြပါသည်၊ ထမင်းစားကြသောအခါ “ငါးပိသုတ်နှင့်အတို့ပါ မှ စားလို့ အဆင်ပြေတယ်”၊ တစ်ချို့က “ငါးကြော်လေးပါမှ မြိန်တယ်၊ မှိုဟင်းလေးပါမှ မြိန်တယ်” ဟု ပြောကြသည်၊ တတ် နိုင်သည့်အလွှာကဆိုလျှင် “ ပုဇွန်ဆီပြန်ချက်လေးနဲ့ စားလိုက်ရ ကောင်းမှာပဲ၊
ကောင်းမှာပဲ” စသဖြင့် ဟင်းလျာနှင့်စပ်လျဉ်း၍ မကြာခဏ ပြော ဆိုနေသံများကို ကြားနေရပါသည်။ ဤနေရာတွင် အရသာနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကိုးရီးယားနိုင်ငံ ရောက် မြန်မာအမျိုးသမီးတစ်ဦးက “အရှင်ဘုရား….ပြည်ပထွက် လာတာ ကြာပါပြီ၊ တစ်ခါတစ်ရံ ကိုယ့်ဒေသထွက် အစားအစာ များကို စားချင်စိတ်တွေ အရမ်းဖြစ်လာပါတယ်၊ အဲဒီအခါကျရင် အရှင်ဘုရားရဲ့ ၀က်ဘ်ဆိုက်(website) မှာဖတ်ရတဲ့အတိုင်း “မိမိ စားချင်သည်ဆိုသည့် ဟင်းလျာများသည် ဟိုးရှေးယခင်ကလည်း စားခဲ့ဖူးပေါင်း များလှလေပြီ” လို့ တွေးလိုက်တဲ့အခါ စားချင်တဲ့ အာသာဆန္ဒတွေ
ပါသည်။ ဤစကားရပ်ဖြင့် ဟင်းလျာ၏ ကောင်းသောအရသာ များကို
ပေသည်၊ သို့သော်လည်း ဟင်းလျာများ မည်မျှပင် ကောင်းသည်
ညွန်ပြပါ ဆိုလျှင် စာဖတ်သူများ မည်သည့်ဟင်းလျာကို ညွန်ပြ မည်နည်း။ အကယ်၍ အကောင်းဆုံးဟင်းလျာဟု သတ်မှတ်ခံရ စေကာမူ ထိုဟင်းလျာထက် ကောင်းသည့် နောက်ဆုံး(latest) ဟင်းလျာတော့ ဤသို့ဆိုလျှင်
မည်သည့်ဟင်း ဖြစ်နိုင်ပါသနည်း၊ အမေးရှိက အဖြေရှိရမည်ဖြစ် သည်၊
လောကတွင် အကောင်းဆုံးဟင်းသည် အချို၊အချဉ်၊ အဖန်၊အခါး၊ အစပ်၊ အငန်၊ ဆိုသည့်အရသာ (၆)မျိုးမှ တစ်မျိုးမျိုး သို့မဟုတ် နှစ်မျိုးသုံးမျိုး စသည့် အရသာတို့ကြောင့်သာ ကောင်းမွန်နေခြင်း ဖြစ်သည်ကို မည်သူမျှ ငြင်းနိုင်ကြမည် မဟုတ်ပေ၊ သို့သော် ထိုထိုအရသာတို့ထက် ထူးခြားသော ဟင်းတစ်ခုကို တွေးမိပါ သေးသည်၊ ဟင်းထက်
မေတ္တာ၊ ကရုဏာ၊မုဒိတာများဖြင့် ရောပြွမ်းနေသည့် ဟင်းလျာမျိုး ဖြစ်ပါသည်၊ ထိုဟင်းလျာမျိုးကို မည်သူ့ထံမှ ရနိုင်ပါမည်နည်း၊ ထိုဟင်းမျိုးကို အမေ့ထံကနေ ရနိုင်ပါသည်။ လောကတွင် အမေချက်သောဟင်းသည် မေတ္တာ၊ကရု ဏာ၊မုဒိတာ၊များပါဝင်ကာ အစွမ်းထက်သည့် ဟင်းလျာဖြစ်သော ကြောင့်
အကင်းဆုံးနှင့် အသန့်ရှင်းဆုံးဖြစ်ပါသည်၊ ထို့ကြောင့် လောတွင် အကောင်းဆုံးဟင်းလျာကို ညွန်ပြပါဆိုလျှင်
33 ဟင်းသည် အကောင်းဆုံး ဟု ညွန်ပြချင်ပါသည်၊ ထိုထက် ကောင်းသည့် အခြား ဟင်းလျာသည် လောကတွင် ရှိနိုင်လိမ့် မည်မထင်ပေ။ ထိုဟင်းမျိုးကို
သားသမီးများကသာ ရရှိပိုင်ဆိုင်နိုင်သော်လည်း အမေ မရှိပြီ တော့ပြီဖြစ်သော သားသမီးများအဖို့ မည်သည့်အခါမှ အမေ့ဟင်း ကို မရရှိနိုင်တော့ပေ၊ လောကသဘာဝ နိယာမ တရားအရ ပြန် လည်တောင့်တနေ၍လည်း ရနိုင်တော့မည် မဟုတ်ပေ။ မှန်ပါသည်၊
Law) အရ တည်မြဲခြင်းဟု မရှိနိုင်ပေ၊ မွေးဖွားခြင်းမှ သေဆုံးခြင်း သို့ ဦးတည်နေကြပေသည်၊ သက်ရှိသာမက သက်မဲ့အရာဝတ္ထု များသည်လည်း မြဲသည် ဟု မဆိုနိုငပ်ါချေ၊ အဘယ့်ကြောင့်နည်း ဟူမူ လူတို့၏ ဦးနှောက်ကဲ့သို့ ယနေ့ခေတ်၌ Data ပေါင်းများစွာ ကို
သဘော ရှိသောကြောင့် ဖြစ်လေသည်။ မကြာမီက……စာရေးသူ၏ computer hard disk ပျက်စီးသွားပါသည်၊ back-up မပြုလုပ်ထားသောကြောင့် လွန်ခဲ့ သောနှစ်များစွာက သိုမှီးထားသည့် တန်ဖိုးရှိသော Data များ ပျက်စီးရှုံးဆုံးခဲ့ရသည်၊ သက်ရှိလူသားများလောက်နည်းပါး စွမ်း နိုင်သည့် လည်း
34 ဤသို့ဆိုလျှင် သက်မဲ့ပစ္စည်း တစ်ခုသာဖြစ်သည့် မေတ္တာဓါတ်များ
ဟင်းလျာသည်လည်း တစ်ရက်မှနှစ်ရက်သို့ ကြာလျှင် ပုပ်သိုးပြီး ပျက်စီယိုယငွ်းသွားနိုင်ပါသည်၊ ထို့ကြောင့် အမေချက်သည့် ဟင်း လျာသည် မေတ္တာများစွာပါဝင်နေသော်လည်း အကောင်းဆုံး ဟု မဆိုနိုင်သေးပေ၊ ဤသို့ဆိုလျှင် လောကတွင် မည်သည့်ဟင်းက အကောင်းဆုံး ဖြစ်ချေမည်နည်း၊ အကောင်းဆုံး ဟင်းလျာ ဟု သတ်မှတန်နိုင်ရန်
တာရှည်ခံဖို့လိုပေသည်၊ ထိုဟင်းလျာကို အလွန်ဝေးကွာသော နေရာတွင်
ရရှိနိုင်ပေသည်၊ ယင်းဟင်းလျာကား….မြတ်ဗုဒ၏္ဓ ကမ္ဘာ့အံ့ဖယွ် ဓမ္မာ့ဟင်းလျာပင် ဖြစ်ပါတော့သည်။ ဓမ္မဟင်းလျာသည်
ကျော်ကတည်းက ချက်ပြုတ်ခဲ့သည့် ဟင်းဖြစ်သောကြောင့် ကာ လာကြာညောင်းခဲ့ပါသော်လည်း စားသုံးသူ (user)များအတွက် မည်သည့်အခါမျှ ပုပ်သိုးသည် ဟူ၍ မရှိသည့်အပြင် တာရှည်ခံ အောင် ရေခဲသတ္တာလည်း အသုံးပြုစရာ မလိုပေ၊ အလိုရှိသော အချိန်တွင် အလိုရှိသလောက် ထုတ်ယူစားသုံးနိုင်ပြီး၊ အချိန်မ ရွေး
အမြဲတမ်း (Update)ဖြစ်နေပါသည်၊ တာရှည်အထားခံနိုင်စေရန် မီး နှင့်ပြန်နွေးစရာမလိုသည့်အပြင် နောင် ကမ္ဘာပေါင်းများစွာ အသင်္ချေ အနန္တ ကြာခဲ့ပါသော်လည်း ပျက်စီးယိုယွင်းခြင်းမရှိ အသုံးပြုသူ(user) များအတွက် အမြဲတမ်း အဆင်သင့် ဖြစ်နေပါ တော့သည်။
ပြောလျှင် ကုန်နိုင်ဖွယ်မရှိသော်လည်း ဓမ္မဟင်းလျာနှင့် ပတ် သက်၍ သိထားသင့်သည့် သတ္တိထူးများကား…… -
ဓမ္မဟင်းလျာသည် အစ အလယ် အဆုံး ကောင်းစွာ ဟောတော်မူထားသော တရားတော် ဖြစ်ပါသည်။
သိရှိခစာံးနိုင်ပေ
အချိန်မရွေး အကျိုးခံစားခွင့် ရှိပါသည်။
လာလှည့်၊ ရှုလှည့်ပါ ဟု ဖိတ်ခေါ်ထိုက် လက်ကမ်း
ခေါ်ထိုက်သော တရားတော် ဖြစ်ပါသည်။ -
လေနာသောသူသည် လေနာဆေးပြားကို အမြဲတမ်း ခါးပိုက်အိတ်ထောင်ထဲ ထည့်ထားရသကဲ့သို့ လောဘ နာ ၊ ဒေါသနာ ၊မောဟနာ စသည့် ကိလေသာ အနာ ရောဂါ ထူပြောသူတို့အတွက် အနည်းကပ်ဆောင်ယူ ထားထိုက်သော တရားတော် ဖြစ်ပါသည်။
လျှပ်စစ်စမွ်းအင်ကို
ထုတ်လုပ်သောအခါ သူ၏ လျှပ်စစ်ကရိယာတစ်ခုအား အကြိမ်တစ်ထောင် စမ်းသပ်ပြီးမှ ထုတ်လုပ်ခဲ့သည်၊ သူအကြိမ်တစ်ထောင်က နာရီပိုင်းနှင့်လည်း
တော်တိုင် ဓမ္မဟင်းလျာကို ချက်ပြုတ်ခဲ့သည့်ကာလမှာ လေးအသေင်္ချနှင့်ကမ္ဘာတစ်သိန်း
တစ်အသင်္ချေသည် တစ်ဂဏန်း၏ နောက်၌ သုည ပေါင်း (၁၄၀) ရှိပေသည်၊ တစ်ကမ္ဘာဟူသည် အလျား၊ အနံ၊စောက် ရှစ်မိုင်ခန့်ရှိသော ကျောက်တောင်ကြီးကို
နှစ်တစ်ထောင်ပြည့်မှ ၀ါဂွမ်လေးဖြင့် တစ်ကြိမ်သာ ပွတ်
ကုန်သွားသော်လည်း တစ်ကမ္ဘာ၏ သက်တမ်းမပြည့် နိုင်သေးပေ။ ထိုကဲ့သို့ ကာလရှည်လျားစွာ ချက်ပြုတ်ပြီး ဗုဒ္ဓကိုယ်တော် တိုင် ထုတ်လုပ်ထားသော ဓမ္မဟင်းလျာသည် အပြစ်ပြောစ ရာမရှိလောက်အောင်ပင် တုနှိုင်းမမီ သော ဓမ္မဟင်းလျာ ဖြစ်ပါတော့သည်။ “ သဗ္ဗရသံ ဓမ္မရသော ဇိနာတိ” ဓမ္မအရသာကို ယှဉ် နိုင်သော
သံယုတ်ပါဠိတော်၌ မြတ်ဗုဒ္ဓ ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါသည်၊ ယခုလည်း ရှိမည်မဟုတ်၊နောင်လည်း ရှိလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ ဓမ္မဟင်းလျာကို စားသုံးသူ(user) များသည် အကြောင်းသိ ရုံမျှ အမြည်းသဘောမျိုး မဟုတ်ဘဲ မကြာခဏဆိုသလိုသုံး စွဲနိုင်လေလေ ဓမ္မဟင်းလျာ၏ သတ္တိထူးကို ပို၍ပို၍ သိလေ လေ ဖြစ်ပါသည်၊ ပကတိဟင်းများ၌ ဟင်း၏ အဆီအနှစ်ရှိ သလို
ထဲတငွ်
အဆီအနှစ်ထုတ်ကြည့်လျှင် သီလ၊သမာဓိ၊ ပညာ ရပါမည်၊ ထိုမှတဆင့် ထပ်၍ အဆီအနှစ်ထုတ်လျှင် အပ္ပမာဒ သတိ ဟူသည့် အနှစ်ကို ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ မြတ်ဗုဒ္ဓသည်
နိကာယ်ငါးရပ် ၊ ဓမ္မက္ခန္ဓာပေါင်း (၈၄၀၀၀)ဟူသည့် ဓမ္မများ ကို ဟောကြားတော်မူခဲ့ရာ ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုခါနီးတွင်… “ဟန္ဒ ဒါနိ ဘိက္ခဝေ အာမန္တယာမိ ဝေါ ၀ယဓမ္မာ သင်္ခါရာ အပ္ပမာဒေန သမ္ပာဒေထ”
37 ချစ်သားတို့……ရုပ်နာမ်ဓမ္မ သင်္ခါရ သဘောတရား တို့သည် ပျက်ခြင်းသဘောရှိ၏ ၊ ထို့ကြောင့် ချစ်သားတို့ ယခုအခါ
ဟု နောက်ဆုံး မိန့်မှာခဲ့သည့် မှတ်တမ်းအရ သတိတရားကို ပြည့်စုံအောင်
အတွက် သတိတရား ပြည့်စုံအောင် လိုက်နာကျင့်သုံးကြရုံ သာ ရှိပေတော့သည်။ ထို အပ္ပမာဒ ဟူသော သတိ အဆီအနှစ်ကို မိမိသန္တာန် ရရှိခံစားနိုင်ကြရာ သွား၊ ရပ်၊ ထိုင်၊ လျောင်း ဣရိယာပုထ် လေးပါးလုံးကို သတိပဋ္ဌာန်တရားလေးပါးတို့ဖြင့် အမြဲမပြတ် ရှုမှတ်ကြိုးစားသွားရပါမည်၊ ထိုကဲ့သို့ စဉ်ဆက်မပြတ် လိုက် နာ ကျင့်သုံးနေမည်ဆိုပါက လိုချင်မှု လောဘ၊ လိုတာမရ၍ အလိုမကျသည့် ဒေါသ၊ အမှန်အတိုင်းမသိမှု
သည့် ကိလေသာဘေးအန္တရာယ်များမှ ကင်းဝေးစင်ကြယ် သွားနိုင်ပြီး၊ စိတ်အနေသန့်ရှင်း ဘေးရန်ကင်း လွန်မင်းချမ်း သာသွားနိုင်ပါသည်။ ဤနေရာ၌ ဓမ္မဟင်းလျာကို စားသုံးသူတုငိ်း ရရှိနိုင် သည့် အကျိုးခံစားခွင့်အား သတိပဋ္ဌာနသုတ္တန် နိဒါန်းလာ အကျိုးတရားများကို ဖေါ်ပြလိုက်ပါသည်။ ဆွေမျိုးမိဘ ညီအစ်ကို မောင်နှမ ပျက်စီး၍ ဖြစ်စေ၊ စည်းစိမ်ဥစ္စာများ ပျက်စီးဆုံးရှုံး၍ ဖြစ်စေ၊ ရောဂါနှိပ်စက်၍ ဖြစ်စေ၊ သီလပျက်စီး၍ ဖြစ်စေ၊ အယူဝါဒဖေါက်ပြန် ပျက်စီး ၍ ဖြစ်စေ၊ စိုးရိမ်ပူဆွေးမှု သောက၊ ငိုကြွေးမှုပရိဒေ၀၊ကိုယ် ဆင်းရဲမှု ဒုက္ခ၊စိတ်ဆင်းရဲမှု ဒေါမနဿ၊စသဖြင့် ခါးသီးသည့်
လည်း လွတ်မြောက်နိုင်သည့်အပြင် ဘ၀သံသရာ ခန္ဓာရ လာသူတိုင်း တွေ့ကြုံရင်ဆိုင်ရမည့် အို- နာ- သေ ဆင်းရဲမှ လည်း အပြီးအတိုင် လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် ရရှိနိုင်ပေသည်၊ နောက်ဆုံး တကယ့်ချမ်းသာအစစ်ဖြစ်သည့် မဂ်ဖိုလ် နိဗ္ဗာန် ချမ်းသာကို ရရှိနိုင်ပေသည်။ ဓမ္မဟင်းလျာကို
သုံးစွသဲူ(user)များ
အနေဖြင့် အမှန်တကယ် သုံးစွဲနိုင်ကြရန် လမ်းညွန်မှုကို အကျဉ်းမျှ ဖော်ပြရမည်ဆိုပါလျှင်……… (၁)ကာယာနုပဿနာသတိပဋ္ဌာန် ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှု ဖြစ်ပေါ်သောအခါ ထိုထင်ရှားဖြစ်ပေါ် လာသော ကိုယ်အမူအရာ မှန်သမျှကို ရှုသိစိတ်ဖြင့် အမှန် အတိုင်း သိအောင် ရှုမှတ်ရမည် ဖြစ်ပေသည်။ (၂)ဝေဒနာနုပဿနာသတိပဋ္ဌာန် အခံခက်သည်ကို ခံစားရသည့် ဒုက္ခဝေဒနာ၊ချမ်းသာကို ခံ စားသည့် သုခဝေဒနာ၊ ဆင်းရဲသည်လည်း မဟုတ် ချမ်းသာ သည်လည်းမဟုတ်သော အလယ်အလတ် ခံစားမှု ဥပေက္ခာ ဝေဒနာစသည့် ခံစားမှုဝေဒနာများ ထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာလျှင် ထိုခံစားမှုများကို စူးစိုက်၍ ရှုမှတ်ရမည်ဖြစ်သည်။ (၃)စိတ္တာနုပဿနာသတိပဋ္ဌာန် စိတ်ဆိုး၊စိတ်ပျက်၊ဒေါသထွက် အလိုမကျ စသော အမူ အရာများသည် စိတ်တင်ွဖြစ်သည့်အတွက် စိတ်အမူအရာ ဟု ခေါ်ပါသည်၊ ထိုစိတ်အမူအရာများ ဖြစ်ပေါ်လာသော အခါတွင်လည်း ရှုမှတ်ရပါသည်။ (၄)ဓမ္မာနုပဿနာသတိပဋ္ဌာန် -
39 ပူသည့်သဘော အေးသည့်သဘော မြင်သည့်သဘော ကြားသည့်သဘော
လည်း ရှုမှတ်ရပါမည်။ ဤကဲ့သို့ မိမိသန္တာန်၌ ထင်ရှားပေါ်ရာကို ရှု မှတ်ကြရမည်ဖြစ်ပါသည်၊ ထိုသို့ရှုမှတ်ရာတွင် အချိန်ကာလ အားဖြင့် ခဏတာမျှမဟုတ် အဖန်ဖန်အထပ်ထပ် ရှုမတ်ှပွားများရပါမည်၊
သမာဓိ၊ပညာများ တိုးတက်လာကာ ဥာဏ်အားပြည့်လျှင် နောက်ဆုံးမဂ်ဖိုလ်နိဗ္ဗာန်သို့
အစစ်ကို ရရှိကြမည် ဖြစ်ပါသည်။ ဤသည်ကား တုနှိုင်းမမီ သည့် ဓမ္မဟင်းလျာများကို စားသုံးသူ (user)တိုင်း ရရှိနိုင်ေသာ အကျိုးတရားများ ဖြစ် ပါသည်၊ ထိုဟင်းလျာကို မည်သည့်လူမျိုးနှင့် ဘာသာတို့ သာ သုံးစွနဲိုင်သည် ဟု ကန့်သတ်ထားချက်မရှိ၊ လူမျိုးမရွေး ဘာသာမရွေး
ရယူသုံးစွနဲိုင်ကြောင်း
တိုက်တနွ်းရေးသား
41 တုနှိုင်းမမီ (၃) ဓမ္မအရိပ်(ကိုယ်ကျင့်တရား) “အမှီနဲ့နေကြ
ဆင်းရဲမယ်၊ အမှီနဲ့နေမှ ချမ်းသာမယ်…” ဟူသော စကားသည် လွန်ခဲ့သော ရှေးနှစ်ပေါင်း နှစ်ပေါင်း (၂၅၀၀)ကျော်ကာလက ပေါ်ပေါက်လာခဲ့သော စကားတစ်ခွန်း ဖြစ်သည်။ အမှီနဲ့နေကြ ဆိုရာဝယ် နေပူထဲက လာသော သူများ အတွက် သစ်ပင်အရိပ် အိမ်အရိပ် စသည်တို့သည် အလွန်အေးမြ ချမ်းသာသော နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်၊ ထို့အတူ သားသမီးများ သည်
နေထိုင်ကြရသကဲ့သို့ မိဘများကလည်း သားသမီးများကို မှီခိုရ သည့်အတွက် ချမ်းသာစွာ နေထိုင်ကြရသည်။ သုခါ ရုက္ခဿ ဆာယာဝ၊ တတော ဥာတိ မာတာပိတု၊ သစ်ပင်အရိပ်သည
ချမ်းသာသည် ဟု ဆိုရသော်လည်း ခိုနားသည့်အခိုက်သာ ချမ်း သာသောကြောင့် ထိုချမ်းသာမှုသည် ခေတ္တခဏမျှသာဖြစ်သည်၊ သစ်ပင်အရိပ်ချမ်းသာထက်
အေးမြချမ်းသာပါသည်၊ ဆွေမျိုးမိဘများ၏ အရိပ်သည် အေးချမ်း လှကြောင်းကို မြတ်ဗုဒ္ဓ မိန့်တော်မူခဲ့ဖူးပါသည်။ တစ်ခါက ကောသလတိုင်းပြည့်ရှင် ဘုရင်ကောသလ မင်းသည် ရင်းနှီးလိုသော
မြတ်ဗုဒ္ဓနှင့်တကွ ရည်ရယ်ွချက်ဖြင့်
ပေးပါရန် သာကီဝင်မင်းထံ တမန်တော် စေလွတ်ပြီး အတောင်း ခိုင်းလိုက်ပါသည်၊ သာကီနွယ်ဖွားများသည် မိမိတို့အမျိုးဇာတ်နှင့်
42 အခြားသူများ၏ အမျုိးဇာတ်ကို မရောနှောလိုကြပေ၊ သို့သော် လည်း ကောသလဘုရင်ကို မပေးပါက မကောင်းနိုင်ချေ၊ ပေး ပြန်ကလည်း ကြောင့်
“၀ါသဘခတ္တိယ” မင်းသမီးကို ဆက်သလိုက်သည်၊ ကောသလ မင်းကလည်း ၀ါသဘခတ္တိယကို သာကီနွယ် ဟုတ်မဟုတ် စုံစမ်း စေသည်၊ သို့သော်လည်း သာကီနွယ်တို့၏ ပိရိသော လုပ်ဆောင် ချက်ကြောင့် ယုံကြည်ကာ ၀ါသဘခတ္တိယ မင်းသမီးကို မိဖုရား အရာ တင်မြှောက်လိုက်သည်။ မကြာမီ…၀ါသဘခတ္တိယ
ယောင်္ကျားလေးတစ်ဦး ဖွားမြင်သည်၊ နာမည်က ‘၀ိဋဋူဘ’ လူ မှန်းသိတတ်ခါစ (၇)နှစ်အရွယ်တွင် အဖိုးအဖွားများနှင့် ဆွေမျိုး များကို တွေ့ချင် မြင်ချင် လှသောကြောင့် တစ်နေ့..၀ိဋဋူဘ မင်း သားသည် နောက်ပါအခြံအရံတို့နှင့်အတူ ကပ္ပိလ၀တ်သို့ သွားခဲ့ သည်၊ နေသင့်သလောက်နေပြီးသောအခါ ကောသလတိုင်းသို့ ပြန်လာသည်၊
၀ိဋဋူဘ နေထိုင်ခဲ့သော နေရာကို ဆဲရေးတိုင်းထွာပြီး နို့ရည် ရောသော ရေဖြင့် ဆေးကြောနေကြသော မြင်ကွင်းကို နယ်စပ် အရောက်ပစ္စည်းတစ်ခု မေ့ကျန်ခဲ့၍ ပြန်လာယူသူ အမတ်က မြင်လည်းမြင် ကြားလည်းကြားခဲ့သည်။ အကြောင်းစုံကို ၀ိဋဋူဘ မင်းသားအား ပြောကြား သောအခါ
နို့ရည်နဲ့ဆေးရင် ငါမင်းဖြစ်တဲ့အခါ ငါထိုင်တဲ့နေရာကို သူတို့ရဲ့ လည်ချောင်းသွေးနဲ့ ဆေးဖြစ်အောင် ဆေးမယ်” ဟု ပြင်းထန် သော အငြိုးအာဃာတများနှင့်အတူ ကြုံးဝါးလေတော့သည်။
သည့်အတိုင်း သာကီဝင်မျိုးတွေရှိရာ သက္ကတိုင်းသို့ ၀ိဋဋူဘ နှင့် စစ်သည်ဗိုလ်ပါများစွာ
မကြာမီ ဆွေမျိုးများ သွေးချောင်းစီးသေကျေပျက်စီးမည့် ဘေး ကြီးကို မြတ်စွာ ဘုရားသည် ဥာဏ်တော်နှင့် တွေ့မြင်တောမူသ ဖြင့် ဆွေမျိုးများအား ချီးမြှောက်ရန်အတွက် ကောသလတိုင်းနှင့် သက္ကတိုင်းတို့၏
နေပြောက်ထိုးသည့် သစ်ပင်အောက်တင်ွနေ
ထိုင်၍ စောင့်နေတော်မူပါသည်။ ၀ိဋဋူဘ မင်းသား ရောက်လာသောအခါ မြတ်ဗုဒ္ဓအား ရှိခိုးပြီး
အောက်မှာ ဘာကြောင့် ထိုင်တော်မူတာလဲ ဘုရား..၊ တပည့် တော်တို့
ပညောင်ပင်ရင်းမှ သီတင်းသုံးတော်မူပါဘုရား..” ဟု လျှောက် ထားသောအခါ မြတ်ဗုဒ္ဓက “ မြတ်သောမင်းကြီး ..ထိုသို့ နေ ပြောက်ထိုးသော်လည်း
အေးချမ်းလှပါတယ်” ဟု မိဘဆွေမျီုးတို့အရိပ် အေးမြကြောင်း မိန့်တော်မူခဲ့ပါသည်။ တတော အာစရိယော ရညော တတော ဗုဒ္ဓဿ နေကဓာ။ (လောကနီတိ) မိဘဆွေမျိုးများ၏ အရိပ်ထက် ဆရာ၏ အရိပ်က ပို၍ အေးမြချမ်းသာပါသည်၊ အဘယ်ကြောင့်နည်း ဟူမူ ဆွေမျိုးမိဘ များ၏ အထောက်အပံ့ဖြစ်သော ပစ္စည်းဥစ္စာကို ရန်သူငါးဦးက ရယူပိုင်ဆိုင်နိုင်သောကြောင့် ကုန်ဆုံးသွားနိုင်သည်၊ ဆရာကို မှီခို ရသော တပည့်များအဖို့ ဆရာထံမှ အတတ်ပညာများကို သင်ယူ
44 ၍ တတ်မြောက်လာသောအခါ ထိုအတတ်ပညာဖြင့် အသက် မွေးဝမ်းကျောင်းမှု ပြုနိုင်ပါသည်၊ “ ပညာရွှေအိုး လူမခိုး” ဟူ သည့်အတိုင်း မိမိတတ်ထားသော ပညာကို ဘယ်ရန်သူမျိုးမှ နှောက်ယှက်ဖျက်ဆီး၍ မရနိုင်ပေ။ ထိုကြောင့်
ဆရာသမားများ၏ မေတ္တာ ၊စေတနာ၊ ကရုဏာများကို တန်ဖိုး ထား၍ အတတ်ပညာကို အချိန်ရှိခိုက် ကြိုးစားသင်ယူခြင်းဖြင့် တန်ဖိုးရှိသော ဘ၀တစ်ခုကို တည်ထောင်နိုင်ရန် သတိထားသင့် ပါသည်။ တစ်ခါ မိဘအရိပ်ထက် ဆရာအရိပ်က ပို၍ ချမ်းသာ သော်လည်း ဆရာ၏ အရိပ်ထက် တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်နေသော မင်း၏ အရိပ်က ပို၍ အေးချမ်းသာပါသည်၊ ဆရာထံမှ သင်ယူ သော အတတ်ပညာဖြင့် အသက်မွေးကျောင်းမှု ပြုရသော်လည်း တိုင်းပြည်မြို့ရွာ သာယာအေးချမ်းမှု မရှိလျှင် မည်သို့မျှ အသက် မွေးဝမ်းကျောင်းမှု မပြုနိုင်ပေ၊ တိုင်းပြည်မြို့ရွာ အေးချမ်းပါမှ ချမ်း သာစွာ လုပ်ကိုင်ရှာဖွေ၍ ရမည်ဖြစ်ပါသည်၊ တိုင်းပြည်သာယာ အေးချမ်းဖို့အတွက်
မူတည်နေပါသည်၊ ထိုကြောင့် ဆရာအရိပ်ထက် မင်း၏အရိပ်က ပို၍ အေးမြချမ်းသာပါသည်။ တစ်ဖန် မင်းအရိပ်ထက် မြတ်စွာ ဘုရား၏ တရားတော် အရိပ်က ပို၍ အေးမြပါသည်၊ အကြောင်းကား .. မင်းအရိပ်ကို ခို လှုံ၍ ဖြစ်ပေါ်လာသော ချမ်းသာမှုသည် တစ်ဘ၀တာမျှသာ ဖြစ် သည်၊ မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ တရားတော်အရိပ်သသည် ပစ္စုပ္ပန်တစ်ဘ၀ သာမက နောင်ဘ၀များစွာမှာလည်း ချမ်းသာသကဲ့သို့ ဘ၀ပန်း တိုင် ဟု ဆိုအပ်သော နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာအထိ ပေးစွမ်းနိုင်ပါသည်။
45 အို ၊ နာ ၊ သေ ဘေး ဟုဆိုအပ်သော သံသရာဘေးမှလည်း လွတ်မြောက်နိုင်ပါသည်၊ အမှန်စင်စစ် ဆိုခဲ့ပြီးသော အရိပ်များ နှင့် မြတ်ဘုရား၏ တရားတော်အရိပ်ကို နှိုင်းယှဉ်၍ မရနိုင်သကဲ့ သို့ တုနှိုင်း၍လည်း မမီိနိုင်ပါချေ၊ ထို့ကြောင့် စာဖတ်သူများ အနေဖြင့် ငြိမ်းချမ်းမှုကို အပြည့်အ၀ပေးစွမ်းနိုင်သော မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ တရားတော်အရိပ်ကို
တင်ပြလိုပါသည်။ “ဧဟိပဿိကော - လာလှည့် ရှုကြည့်စမ်းပါ” ဟု ဖိတ် ခေါ်ထိုက်သော
ဘာသာမရွေး မှီခိုနိင်သည်၊ မည်သူက မှီခိုရမည်၊ မည်သူက မမှီခို ရ ဟု ကန့်သတ်ထားချက်မရှိ (universal) အားလုံးနှင့် သက် ဆိုင်ပါသည်။ အလျဉ်းသင့်၍ ပြောပါဦး.. တရားစာအုပ်တစ်အုပ်၏ မျက်နှာဖုံး၌ ‘ (
) ယောဂီများအတွက်သာ’ ဟု ရေးထား
သည်ကို ဖတ်ရှုခဲ့ရဖူးသည်၊ မြတ်ဗုဒ္ဓတရားတော်ပင် ဖြစ်ပါလျှက် တရားတော်ကို
သတ်မှတ်ပေးထားသည်မှာ နှုတ်တစ်ရာ စာတစ်လုံး အလွန်ဝန် လေးစရာ ကောင်းလှပါသည်၊ မဟာစည်ဆရာတော်၏ ကမ္မဋ္ဌာန်း နည်းကို မဟာစည်ယောဂီများသာ အားထုတ်ခွင့်ရှိသည်မဟုတ် (universal) ဖြစ်၍ လူမျိုးမရွေးဘာသာမရွေး အားထုတ်ခငွ့် ရှိပါ သည်။ ထို့အတူ မိုးကုတ်နည်း၊ စွန်းလွန်းနည်း၊သဲအင်းဂူနည်း၊ ကသစ်ဝိုငန်ည်း စသည်များကို သူတို့ယောဂီချည်းသာ အားထုတ် ခွင့် ရှိသည် မဟုတ်ပါ မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ တရားတော်မြတ်သည် ဗုဒ္ဓဘာ သာဝင်များနှင့်သာမက လူမျိုးမရွေး ဘာသာမရွေး အားလုံးနှင့်
ခိုလှုံကြရသော သူများအားလုံး ချမ်းသူမှုကို ရရှိနိုင်ကြမည် ဖြစ် ပါသည်။ လောက၌ တုနှိုင်းမမီသော အရိပ်တစ်ခုကို တွေ့ရှိကြ မည်ဆိုပါက ထိုအရိပ်သည် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ တရားတော်အရိပ်ပင် ဖြစ်ပါ လိမ့်မည်။ သစ်ပင်အရိပ် ဆွေးမျိုးရိပ်နှင့် မိရိပ်ဘရိပ် ဆရာရိပ်တို့ မင်းရိပ်အေးစွာ ဆင့်ဆင့်သာသည်၊ ထိုမှာထက်ပင် မြတ်ရှင်ဘုရား ဟောကြားမိန့်ဟ ဓမ္မရိပ်သာ အေးမြပါသည် သူ ငါခိုဖို့ ကောင်းလှ၏ ။ အရိပ်တကာ့ အရိပ်တို့၌ မည်သည့်အရိပ်မျှ မယှဉ်နိုင် သော မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ တရားတော်အရိပ်များအနက်………..
သီလအရိပ်ဟူသည် “ဣဓ ဘိက္ခဝေ ဘိက္ခု သီလ၀ါ ဟောတိ” (moral conduct, restraint in physical and verbal action.) ကိုယ်မှု ၊ နှုတ်မှုများ စောင့်ထိန်းခြင်းဟု ဆိုအပ် သော ‘သီလ’ (ကိုယ်ကျင့်တရား) သည် လူတိုင်းအတွက် မှီသင့် သည့် အရိပ်တစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။ လူသားအားလုံး
ချမ်းသာ ခြင်းသို့ ရောက်ကြရသည်၊ (၁) ချီးမွန်းခံရခြင်း၊(၂) စည်းစိမ်ဥစ္စာပေါများခြင်း၊ (၃)သေပြီးသည့်နောက် နတ်ပြည်သို့ ရောက်ခြင်းတည်းဟူသော ချမ်းသာသုံးမျိုးကို လိုလားတောင်းတ ကုန်သောသူများအတွက် သီလကို စောင့်ထိန်းကြရန် အရေးကြီး
လူမိုက်တစ်ရာချီးမွမ်းသည်ထက် လူပညာရှိတစ်ယောက်၏ ချီး မွမ်းခံရခြင်းက ပို၍ ၀မ်းမြောက်စရာ ကောင်းလှပါသည်၊ သီလရှိ သော သူများသည် တောင်းတတိုင်း အားလုံးပြည့်စုံနိုင်သည်၊ သေသောအခါ
စွမ်းဆောင်ပေးပါသည်၊ ထိုကြောင့် မြတ်ဗုဒ္ဓက သီလဟူသည် ကုသိုလ်ကောင်းမှု၏
သီလကို ဦးစွာဆောက်တည်ရသကဲ့သို့ တရားအားထုတ်မည်ဆို ပါကလည်း သီလကိုဦးစွာဆောက်တည်ရပါသည်။ သီလရှိသော သူများသာလျှင် ဒါနကုသိုလ် ၊ သမထ ဘာဝနာကုသိုလ်၊ ၀ိပဿနာဘာဝနာကုသိုလ်၊ မဂ်ကုသိုလ်၊ဖိုလ် ကုသိုလ် တရားများ ဖြစ်နိုင်စမွ်း ရှိကြပါသည်၊ ထို့ကြောင့် သီလ သည် ကုသိုလ်ကောင်းမှုများ၏ မွေးဖွားရာ မိခင်ကြီးသဖွယ် ဟု လည်း ဆိုနိုင်ပါသည်။ သီလကို အသက်နှင့်လေဲသာရဟန်းတစ်ပါး တစ်ခါက ရဟန်းတော်တစ်ပါးသည် တောလမ်းကလာ သော သူခိုးများကို မြင်၏၊ သူတို့လုပရ်ပ်ကို ရဟန်းမြင်သွားသည့် အတွက်
သစ်ပင်တစ်ပင်၌ နွယ်ကြိုးဖြင့် ပတ်ကာ ချည်နှောင်ထားခဲ့လေ သည်၊ မကြာမီ တောမီးကြီးလောင်သောအခါ ရဟန်းသည် ချည် ထားသော နွယ်ကြိုးကို ဖြတ်၍ ကိုယ်လန်ွရုန်းကာ ထွက်ပြေးလျှင် အသက်ချမ်းသာရာ ရနိုင်သော်လည်း သူ့ကို ချည်နှောင်ထား သော နွယ်ကြိုးသည် ရှင်သန်နေသေးသောကြောင့် ရုန်းလိုက် လျှင် ပြတ်နိုင်သည်၊ နွယ်မြက်ပြတ်လျှင် ပါစိတ်အာပတ်သင့်နိုင် သည့်အတွက် သီလာကိုတော့ အပျက်မခံနိုင် ဟု ဆုံးဖြတ်ချက်ချ
ထုတ်သောအခါ မကြာမီ စိတ်တည်ကြည်မှု (concentration) များ
ရင့်ကျက်လာသောအခါ အမှန်အတိုင်းသိမြင်သော (right view or wisdom) ပညာကို ရရှိခဲ့ပါသည်။ ဤသို့ဖြင့် ရဟန်းတော်သည် မကြာမီ အရဟတ္တမဂ်၊ အရဟတ္တဖိုလ် မျက်မှောက်ပြုပြီး အာသဝေါကင်းကွာ ရဟန္တာ အဖြစ်သို့ ရောက်ရှိတော်မူသည်၊ နောက်ဆုံး၌ ရဟန်းတော်သည် တောမီးအလောင်ခံရပြီး ပရိနိဗ္ဗာန်စံတော်မူခဲ့သည်၊ ဤသည်ကား သီလာ ကိုယ်ကျင့်တရားကို အမှီပြု၍ အလွန်အေးမြသော နိဗ္ဗာန် အရိပ်ကို ခိုလှုံရခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ သီလမကုစားမိ၍ ဘ၀ပျက်စီးရခြင်း သေးငယ်သော
မကုစားဘဲ နေက ဆင်းရဲရရှိနိုင်ကြောင်းကို သာဓက ထုတ်ပြပါ ဦးအံ့။ တစ်ခါက ရဟန်းတော်တစ်ပါး ပိန်းမြက်လေးတစ်ပင် ကို ဆွမဲိသည့်အတွက် ပါစိတ်အာပတ် သင့်သည်၊ သေးငယ် သော အာပတ်ဖြစ်၍ ထိုအာပတ်(သီလ)ကို မကုစားဘဲ နေခဲ့ရာမှ ၀ိပဿနာတရားကို အနှစ်နှစ်သောင်း ကာလပတ်လုးံ အားထုတ် ခဲ့သော်လည်း မဂ်ဖိုလ်တရားထူး မရရှိခဲ့ပေ၊ ပျံလွန်တော်မူသော ဧရကပတ္တနဂါးမင်း ဖြစ်ခဲ့ရသည်၊ ဤမျှသေးငယ်သော ပါစိတ်အာ ပတ်လေးကို ဒေသနာမကြား (မကုစား)ခဲ့သောကြောင့် သူ့ဘ၀ အပျက်ကြီးပျက်စီးခဲ့ရသည်။ ထို့ကြောင့် လော၌ သေးငယ်သည်ထင်ပြီး အထင် သေး၍ မရသော အရာလေးမျိုး ရှိပါသည်။
49 (၁) ကိုရင်လေးကို ငယ်သည်ဟုထင်ပြီး တစ်ခုခုခိုင်းစေမိမည်၊ ဆဲဆိုမိမည်၊ မထီမဲ့မြင်ပြုမည် ဆိုလျှင် မိမိကို အပါယ်က ဆွဲ ခေါ်သွားလိမ့်မည်။ (၂)သေးငယ်သော မီးပွားပင်ဖြစ်သော်လည်း မရိုမသေ ပြုမိလျှင် တစ်မြို့လုံး၊ တစ်နိုင်ငံလုံး၊ တစ်ကမ္ဘာလုံး ပြာကျသွားနိုင်သည်။ (၃)မြွေကို သေးငယ်သည်ထင်ပြီး မထီမဲ့မြင် ပြုမိလျှင် မြွေပေါက် ၍ အသက်သေဆုံးရသည်အထိ ဖြစ်ရတတ်သည်။ (၄)အိမ်ရှေ့မင်းသားကို ငယ်သေးသည်ဟု အထင်မသေးသင့်ပါ။ အထက်ပါ
မလေးမခန့်ပြုလျှင် အန္တရာယ် ကျရောက်နိုင်သကဲ့သို့ အာပတ်ကို သေးငယ်သည် ဟု ထင်ပြီး မကုစားခဲ့လျှင် ဘ၀ပျက်စီးသွားနိုင်ပါ သည်။ ထို့ကြောင့် အာပတ်ကို
အကြောင်းမရှိပေ။ အချူပ်ဆိုရသော် (morality)ကိုယ်ကျင့်တရားကို မှီခို ရသော သူများသည် ပစ္စုပ္ပန် တမလွန်ဘ၀သံသရာ၌ ချမ်းသာ သောဘ၀ကို တုနှိုင်း မမီ
ကိုယ်ကျင့်တရားကို အခါအခွင့် သင့်ခိုက် မှီခိုလိုက်ကြရန် လိုအပ် ကြောင်း……………..။
51 တုနှိုင်းမမီ(၄) ဓမ္မအရိပ် (ဗဟုသုတ) အကြားအမြင်ကို
ဆည်းပူးခြင်း ဟူသည့် အာဂမသုတနှင့် အနိစ္စစသည် ထင် အောင်ရှုမှတ်ခြင်း ဟူသည့် အဓိဂမသုတတို့သည် မိမိတို့၏ ဘ၀ အဆင့်အတန်းကို မြင့်မားစေပြီး ချမ်းသာကို ပေးစွမ်းနိုင်သည်၊ ထို့ကြောင့် ဗဟုသုတသည် တုနှိုင်းမမီ မှီခိုရာ အရိပ်တစ်ခု ဟု တင်စား ပြောဆိုရပေသည်။ ရှင်းလင်းဦးအံ့။
မြတ်စွာ ဘုရား ဟောကြားတော်မူ
သော တရားတော်များကို သင်အံလေ့လာ ကျက်မှတ် သုံးသပ် ဆင်ခြင်ခြင်း ပရိယတ္တိဓမ္မသုတ ရှိရမည်၊ တရားတော်လာသည့် အတိုင်းလက်တွေ့ကျကျ ကျင့်သုံးခြင်း ပဋိပတ္တိ ဓမ္မသုတ ရှိရ မည်၊ တရားအားထုတ်သော ယောဂီများသည် ဘုရားဟောစာ ပေကို လေ့လာခြင်း ပရိယတ္တိသုတရှိရန် လိုအပ်သကဲ့သို့ ကိုယ် တိုင်လည်း တရားရှုမှတ်အားထုတ်ခြင်း ပဋိပတ္တိသုတလည်း ရှိရပါ မည်၊ နိဗ္ဗာန်လိုလားသော ယောဂီသူတော်စင်တို့သည် အားထုတ် မည် ကြံလျှင် လက်ဦးအစ “ ငါ့သန္တာန်မှာ ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တ၀ါမရှိ၊ ငါ သူတစ်ပါး ယောင်္ကျား မိန်းမ မရှိ ရုပ်နာမ်မျှသာ ရှိသည်၊ ထိုရုပ် နာမ်များသည် မပြတ်တရစပ် ဖြစ်ပျက်နေသောကြောင့် မမြဲတဲ့ တရားတွေပါလား၊
မလိုက် သူ့သဘောသူ ဆောင်နေသောကြောင့် အနတ္တတရား တွေပါပဲလား”ဟု ပရိယတ္တိဓမ္မ ဗဟုသုတ အခြေခံ ရှိရပါမည်၊ “တရားနာလျှင် သဒ္ဓါရွှင် ပညာအသိတိုး” ဟူသည့် ဆောင်ပုဒ် အတိုင်း တရားတော်ကို နာကြား လေ့လာဖန်များသောအခါ ယုံ ကြည်မှုများ ပို၍ ထက်သန်လာပြီး “ အာဂမသုတ” ဟူသည့်
အတွက် အထောက်အပံ့ကောင်းများကို ပေးစွမ်းနိုင်ပေသည်။ ထို့အပြင် ပရိယတ္တိ ဓမ္မဗဟုသုတ အခြေခံ၍ ခန္ဓာ ငါးပါးရုပ်နာမ်တရားကို ရှုမှတ်ပွားများ အားထုတ်လျှင် မဂ်ဖိုလ် နိဗ္ဗာန်ကို မျက်မှောက်ပြုရပြီး အမတ ချမ်းသာရိပ်ကို ခိုလုံနိုင်ပါ သည်။ တရားနာဖူးအကျိုးကျေးဇူး(အာဂမသုတ) မြတ်စွာ ဘုရားလက်ထက်တော်အခါက ပုဏ္ဏားဇနီးမောင်နှံ
မည့်သည့်အချိန်၌ဖြစ်စေ ဦးဦးဖျားဖျား အလှူကို ပေးလှူလေ့ရှိ သောကြောင့် ပဉ္စဂ္ဂဒါယကာပုဏ္ဏား ဟု အမည်တွင်ခဲ့ပေသည်။ တစ်နေ့သောအခါ
မောင်နှံနှစ်ဦး တရားထူးရနိုင်ကြောင်းကို ဥာဏ်တော်နှင့် သိမြင် တော်မူသဖြင့်
ဆွမ်းရပ်တော်မူပါသည်၊ ထိုအချိန် ပုဏ္ဏားက အိမ်အနောက်ဖက် သို့ မျက်နှာမူ၍၄င်း၊ ပုဏ္ဏေးမက အိမ်အရှေ့ဖက်သို့ မျက်နှာမူ၍ ၄င်း ထမင်းစားနေကြသည်၊ မြတ်ဘုရားသည် အိမ်အရှေ့၌ ဆွမ်း အလှူခံရပ်တော်မူသည်ကို ဇနီးဖြစ်သူက မြင်၍ စဉ်းစားမိသည် မှာ “ ဘုရားကိုမြင်ရင် ငါ့ခင်ပနွ်းဟာ သူ့အတွက်ချက်ပြုတ်ထား သည့်
အတွက် ဆန်ဆေးရ၊မီးမွှေးရနှင့် အလုပ်များဦးမယ်၊ ထမင်းချက် ရတာမလွယ်ဘူး”
ဆွမ်းရပ်နေသည်ကို ခင်ပနွ်းသည်အား မပြောဆိုဘဲ တိတ်ဆိတ် စွာ ထမင်းစားနေပါသည်၊ တစ်ဝက်မျှ ထမင်းစားပြီးသောအခါ ပုဏ္ဏေးမက
53 အနီးသို့ ကပ်၍ “ ကန်တော့ဆမွ်းပါဘုရား” ဟု တိုးတိုးလေး ပြောလိုက်သောအခါ မြတ်ဘုရားသည် “ မင်းတို့ဆမွ်းကို မရရင် ငါမကြွနိုင်ဘူး” ဟူသောသဘောဖြင့် ဦးခေါင်းတော်ကို ညင်သာ စွာ ခါယမ်းတော်မူလိုက်သည်၊ ပုဏ္ဏေးမသည် မြတ်စွာ ဘုရား ဦးခေါင်းတော် ခါယမ်းတော်မူသည်ကို မအောင့်ထားနိုင်ဘဲ ရယ် မိလေတော့သည်။ ပုဏ္ဏေးမ ရယ်သံကြောင့် ပုဏ္ဏားကြီး အိမ်ရှေ့သို့ ကြည့် လိုက်သောအခါ မြတ်စွာ ဘုရား ဆွမ်းရပ်နေတော်မူနေသည်ကို တွေ့မြင်ရသည်၊ အိမ်ရှေ့သို့ထွက်လာပြီး “ အရှင်ဘုရား..ဆွမ်း ရပ်တော်မူနေတာ…တပည့်တော် မသိပါဘုရား၊ တပည့်တော်ရဲ့ ပန်းကန်ထမှဲာ စားပြီးလက်ကျန် တစ်ဝက်စာ ကျန်ပါတော့တယ် ဘုရား၊ ထိုစားကြွင်းစားကျန်ကို မြတ်ဘုရား အလှူခံတော်မူပါ သလားဘုရား”
“ဒါယကာပုဏ္ဏား…ငါတို့အလှူခံပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတာ ဦးဦးဖျားဖျားပဲ လှူလှူ ၊ စားကြွင်းကိုပလှဲူလှူ အလှူခံပါတယ်”
အခါ ပုဏ္ဏားသည် ချက်ချင်းပင် ကျန်ရှိနေသော ဆွမ်းကို မြတ်ဘု ရားအား ၀မ်းသာအားရ လောင်းလှူ လိုက်ပြီးလျှင် “အရှင်ဘုရား ….အရှင်ဘုရား တရားဟောသည့်အခါတိုင်း ဘိက္ခဝေ..ဘိက္ခဝေ လို့ခေါ်တာ တပည့်တော်ကြားရပါတယ်ဘုရား၊ အရှင်ဘုရား၏ တပည့်သားရဟန်းတော်များကိုသာ ဘိက္ခဝေ လို့ ခေါ်တာလား ဘုရား” မေးမြန်းလျှောက်ထား၏။ ထိုအခါ မြတ်စွာ ဘုရားက “ ဒီပုဏ္ဏားဇနီးမောင်နှံကို ဘာတရားများ ဟောရပါ့မလဲ” ဟု ဥာဏ်တော်ဖြင့် ကြည့်ရှုတော် မူသောအခါ
အကြောင်းနဲ့စပ်ပြီး တရားနာခြင်း၊ အာဂမသုတ ရှိခဲ့သည်ကို
54 တွေ့မြင်တော်မူ၍ ရုပ်နာမ်နှင့်စပ်သော တရားစကားကို မိန့် ကြားတော်မူခဲ့ပါသည်။ သဗ္ဗသော နာမရူပသ္မိံ ၊ ယဿ နတ္ထိ မမာယိတံ။ အသတာစ နသောစတိ၊ သ ဝေ ဘိက္ခူတိ ၀ုစ္စတိ။ ဤနေရာ၌ စာပေအသံနှင့်ပြောပါက နားမလည်မည် စိုးသောကြောင့် လက်တွေ့သဘောတရားဖြင့် ပြောပေးပါမည်၊ ယောဂီများသည်
ရလာသောအခါ စိတ်တည်ငြိမ်မှု (concentration)များဖြစ်ပေါ် လာသည်နှင့်အမျှ ရှုမှတ်တိုင်း၌လည်း အာရုံနှင့် မှတ်စိတ်မှတစ် ပါး တစ်ခြားမရှိ ၊ငါ သူတစ်ပါး ယောင်္ကျား မိန်းမ ဆိုတာမရှိ ငါ ငါ့ဥစ္စာဆိုတာလည်းမရှိ ရုပ်နာမ်တို့၏ သဘောကား ပေါ်လိုက် ပျောက်လိုက် မမြဲသော သဘောပဲ ၊ မပြတ်တရစပ် ဖြစ်ပြီးပျက် နေသောကြောင့်ဆင်းရဲချည်းပဲဟု သိမြင်လာသောအခါ ရုပ်နာမ် တရားများ ပေါ်ပြီးပျောက်သွားသော်လည်း စိုးရိမ်ထိတ်လန့်ခြင်း မဖြစ်တော့ချေ။ (၀ိနေယျ လောကေ အဘိဇ္ဈာဒေါမနဿံ) ရှုမှတ် တိုင်း ရှုမှတ်တိုင်း လောဘ ဒေါသ စသော ကိလေသာများ ကင်းနေပါတော့သည်။ ထိုသို့
ကုန်သွားအောင် ကျင့်ဆောင်နေကြသော ပုဂ္ဂိုလ်များကို ရဟန်း မဟုတ်သော်လည်း “ဘိက္ခု” ဟု ခေါ်ထိုက်၏ ဟု ဟောတော်မူ ခဲ့ပါသည်။ တရားအဆုံး၌ ပဉ္စဂ္ဂဒါယက ပုဏ္ဏားဇနီးမောင်နှံသည် သုံးမဂ်သုံးဖိုလ်
အရိယာပုဂ္ဂိုလ်များ အဖြစ်သို့ ရောက်ရှိကြပါသည်၊ ဤဖြစ်ရပ်၌ ပုဏ္ဏားဇနီးမောင်နှံတို့၏ အနာဂါမိ မဂ်ဖိုလ်ကို မျက်မှောက်ပြုရ ခြင်းသည် အတိတ်ကာလက ရုပ်နာမ်နှင့်စပ်သော တရားစကား
ပင်ဖြစ်ပါသည်။ ယနေ့ခေတ် မြန်မာနိုင်ငံတငွ် ဓမ္မကထိက အကျော်အ မော်များ
ဘာသာရေးမဂ္ဂဇင်းများလည်း များစွာထွက်ပေါ်နေသောကြောင့် ၄င်း၊ နာကြားစရာ လေ့လာစရာ အာဂမသုတများစွာ ရရှိရန် အခွင့်အခါ သာနေကြပြီ ဖြစ်၍ စာဖတ်သူများ အာဂမသုတနှင့် ပြည့်စုံအောင်
မနေကြပါနဲ့၊ နာကြားလေ့လာထားသည့် အာဂမသုတကို အခြေ ခံကာ လက်တွေ့ကျင့်သုံးခြင်းဖြင့် မိမိသန္တာန်၌ “ အသိဥာဏ်စစ်” ဟု ဆိုအပ်သော အဓိဂမသုတ ကို ရရှိနိုင်ရန် ကြိုးစားဖို့ လိုပေ သေးသည်။ အဓိဂမသုတ အစွမ်းကြောင့် နောင်တစ်ချိန် တရား အားထုတ်လျှ င် အဓိဂမသုတ အထောက်အပံ့ဖြင့် မဂ်ဖိုလ်နိဗ္ဗာန် မျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြောင်း ဖြစ်ရပ်မှန် အောက်ပါ ဇာတ်လမ်းကို တင်ပြပါဦးမည်။ အဓိဂမသုတနှင့် ရဟန်းတော်(၅၀၀) ရဟန်းတော်အပါး(၅၀၀)တို့သည်
တော်၌ သီတင်းသုံးတော်မူသော မြတ်စွာဘုရားထံမှ ကမ္မဋ္ဌာန်း ယူပြီး ၀ါတွင်းသုံးလ တရားအားထုတ်ကြသော်လည်း တရားထူး မရရှိကြသေးပေ၊ သီတင်းဝါလကျွတ်၍ မြတ်ဘုရားထံသို့ ရောက် လာကြရာ
ရရှိပါရဲ့လား” ဟုမေးတော်မူသောအခါ “ တရားထူးမရသေးပါ ဘုရား…တရားထူးမရတာ
56 ဘုရား” ဟု ရဟန်းတော်များက မြတ်စွာ ဘုရားအား မေး လျှောက်သောကြောင့်
တော်မူသောအခါ ထိုရဟန်းတို့သည် ကဿပ ဘုရားလက်ထက် တော်က
အနိစ္စလက္ခဏာကို ထင်ရှားအောင် ရှုမှတ်ခဲ့သော အဓိဂမသုတ ရှိနေသည်ကို မြင်တော်မူသည့်အတွက်….. သဗ္ဗေ သင်္ခါရာ အနိစ္စာ ၊ ယဒါပညာယ ပဿတိ။ အထ နိဗ္ဗိန္ဒတိ ဒုက္ခေ ၊ ဧသ မဂ္ဂေါ ၀ိသုဒ္ဓိယာ။ ဤနေရာ၌ စာအိုင်မည်စိုးသဖြင့် အဓိပ္ပါယ်သက်သက် ပြန်သွားပါမည်၊ ခန္ဓငါးပါး ရုပ်နာမ်တရားတို့သည် မပြတ်တရစပ် ဖြစ်ပျက်နေကြသဖြင့် မမြဲသောတရားချည်းပါပဲ ဟု တွေ့မြင် သည်ဆိုရာဝယ် တရားစာပေဖတ်ခြင်း ၊ တရားနာကြားခြင်းဖြင့် သိသော အသိမျိုးကို မဆိုလိုပေ၊ တရားရှုမှတ်ခိုက် ရှုမှတ်ဆမှဲာ ပင်လျှင် တကယ်အသိဥာဏ်အစစ်ဖြင့် မမြဲသောအနိစ္စလက္ခဏာ တရား ထင်ရှားစွာ သိမြင်ခြင်းကို ဆိုလိုသည်၊ တရားအားထုတ် သော ယောဂီသည် ထင်ရှားသော ဖြစ်ပေါ်လာသော ရှုသိစရာ အာရုံမှန်သမျှကို
ရှုသိစရာအာရုံလေးတွေသည် အမြဲဖြစ်နေသည်မဟုတ်ပါ၊ တစ်ခု ပြီးမှ တစ်ခုဖြစ်ပြီး ပျောက်နေတာကို တွေ့ရပေလိမ့်မည်။ အခံခက်သော
ထိုဒုက္ခဝေဒနာကို သည်းခံကာ စူးစူးစိုက်စိုက် ရှုမှတ်သွားပါက ထိုဒုက္ခဝေဒနာများသည် ပေါ်လိုက်ပျောက်လိုက်
အနိစလ္စ က္ခဏာတရားကို
ထင်ရှားစွာ သိမြင်ရပါသည်၊ နောက် မပြတ်တရစပ် ဖြစ်ပျက်နေ သည်ကို ရှုမှတ်နေဆဲ၌ တကယ့်အသိဥာဏ်အစစ်ဖြင့် သိမြင်လာ
57 ပါလိမ့်မည်။ ထိုသို့ တကယ့်အသိဥာဏ်ဖြင့် သိမြင် သောအခါ ဖြစ်ပျက်နေသော
သည်၊ ထိုသို့ ရုပ်နာမ်အပေါ် ငြီးငွေ့ခြင်းသည်ပင်လျှင် နိဗ္ဗာန်ကို ရောက်ဖို့ရာ လမ်းအစပါပဲ ဟု မြတ်စွာဘုရား ဟောကြား ပြီးသည် ၏အဆုံး၌ ရဟန်းတော် အပါး(၅၀၀)တို့သည် တရားရှုမှတ်မှုဖြင့် ရဟန္တာ ဖြစ်တော်မူကြလေသည်၊ ဤကား အဓိဂမသုတ ကို အခြေခံ၍ အမတချမ်းသာရိပ်ကို ခိုမှီကြရခြင်းပင်၊ ထို့ကြောင့် စာဖတ်သူများသည်လည်း သိထားလေ့လာထားသော အသိများ နှင့်လက်တွေ့တရားပေါင်းစပ်ပြီး ကြိုးစားအားထုတ်ကြရပါမည်။ ထိုသို့ဖြင့် ဗဟုသုတ ဟူသည့်တရားတော်အရိပ်သည် မိမိတို့အတွက်
တုနှုငိ်းမမီ
59 တုနှိုင်းမမီ (၅) ဓမ္မအရိပ် (ကလျာဏမိတ္တ) ကလျာဏမိတ္တ
ပညာရှိသူတော် ကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ရန် သူတော်ကောင်းကို မှီဝေဲပါင်းဖေါ်ရသည်။
ပုဂ္ဂိုလ်မျိူးကိုလည်းကောင်း ကောင်းမိတ်ဆွေဟု မိမိသန္တာန်၌
သူတော်ကောင်း ဖြစ်ရတော့သည်။ ဤကား သူတော်ကောင်းကို ပေါင်းဖေါ်ရကျိူး ဖြစ်သည်။ သိသာရန်ဆက်လက်ရှင်းပြပါဦးမည်။ သစ်တစ်ပင်ကောင်း ငှက်တစ်သောင်းခို ရှေးအခါက ကုန်သည် (၇၀၀)ကျော်တို့ရောင်းဝယ်ဖေါက်ကားရန် လှေကြီးတစ်စင်းဖြင့်
ထိုသို့ ခရီးထွက်လာကြရာ ရုတ်တရက် အင်အားပြင်းထန်သော မိုးသက်မုန်တိုင်းတစ်ခု ကျရောက်ခဲ့ သည်။ လှိုင်းလုံးကြီးများက တောင်ကြီးပမာဏမျှ ထိန်းထားမရဘဲ
သေဘေးနှင့် ရင်ဆိုင်လာရတော့လည်း လူးလားဆန်ခတ်ပြေးလွှားနေကြ
တစ်နေရာတွင် လူထူးလူဆန်း တစ်ယောက်သည် သေဘေးကို မမှုသည့်အလား
တစ်ယောက်ဖြစ်သည်။ ခရီးမထွက်မီ အိမ်၌ သံဃာတော်များ ပင့်ပြီး သင်္ကန်းများကပ်ကာ၊ သရဏဂုံ ၊ သီလဆောက်တည်လာ ခဲ့သည်။
ပြေးတွေ့နေခြင်းပင်။ လူအများက ထိုလူထူးလူဆန်းကိုကြည့်ပြီး `ဒို့မှာတော့
ကြောက်လိုက်ရတာ သင်ကတော့ ငြိမ်ချက်သားကောင်းနေတယ် အားကိုးစရာများရှိရင် ကျွန်တော်တို့ကိုလည်း ကူညီပါဦး” ဟု ပြောသောအခါ
ကျွန်ပ်တို့လည်း သရဏဂုံ သီလ ဆောက်တည်ချင်ပါတယ်” ဟု
ဆောက်တည်စေပါသည်။ လှေကြီးကလည်း နစ်မြုပ်နေပါတော့သည်၊
ပင်လယ် အောက် စုံးစုံးမြုပ်တော့မှာ သေချာသည်။ လှေမမြုပ်မီ လူ(၇၀၀)တို့အား ထိုလူထူးဆန်းက ``အမောင်တို့ ခုအချိန်ဟာ အလွန်အရေးကြီးတဲ့
ဟုပြောရင်းနှင့်ပင် လှေကြီး ပင်လယ်အောက် နစ်မြုပ် သွားပါ တော့သည်။ ကုန်သည်(၇၀၀)လည်း
တာဝတိံသာ၌ နတ်သားများ ဖြစ်ကုန်ကြသည်။ ထိုဖြစ်ရပ်တငွ် (သစ်တပင်ကောင်း
သောကြောင့် သေသောအခါ နတ်ပြည်လောက၌ ဖြစ်ကြရပါ သည်။ မိတ်ဆွေကောင်းကို မီ၍ ပူဆွေးသောကမဖြစ်ခြင်း ထိုမျှမကသေးပါ ၊ ကြောင့်
မိတ်ဆွေကောင်းကို အမှီရသော ဖြစ်ဖွယ်ရာ
တွေ့ကြုံ ရသော်လည်း။ စိုးရိမ်ပူဆွေးသောက မဖြစ်ပဲ ငြိမ်းချမ်းစွာ နေနိုင်ပါသည်။ သာဓက ထုတ်ပြဦးအံ့၊ တစ်ခါက
သော ကောသလမင်း၏ အထံတော်၌ အမှုတော်ထမ်းနေသည့် စစ်သူကြီးတစ်ဦး ရှိခဲ့ဖူးသည်၊ သူရဲ့နာမည်က မဟာဗန္ဓုလ ၊
ယောက်င်္ကျားလေးနှစ်ယောက်မွေးဖွားပြီး၊ တစ်ဆယ့်ခြောက်ကြိမ် တိုင်တိုင် သားယောင်္ကျားချည်း မွေးဖွားခဲ့ရာ သားယောင်္ကျား ပေါင်း (၃၂)ယောက်တိတိ ထွန်းကားခဲ့သည်။ တစ်နေ့သောအခါ
တရားသူကြီးတစ်ဦးသည် အမှုကို အမှန်အတိုင်း မဆုံးဖြတ်ဘဲ လာဘ်ပေးသည့်ဘက်အား
လာဘ်မပေးနိုင်သောကြောင့် အမှုရှုံးသောသူသည် မကျေနပ်ဖြစ် ကာ ဗန္ဓုလ စစ်သူကြီးထံသို့ ၀င်ပြီး အကျိုးအကြောင်း ပြောခါ ပြန်လည် တိုင်ကြားလေသည်။ အမှန်တရားကို လိုလားသော စစ်သူကြီးသည်
သူကိုယတ်ိုင်
လာဘ်စားခဲ့သော တရားသူကြီးအား ရာထူးမှ ပယ်ချခဲ့ပြီး ၊ ဗန္ဓုလစစ်သူကြီးအား ရာထူးမှ
ဗန္ဓုလစစ်သူကြီးအပေါ် အငြိုးထားကာ လုပ်ကြံနိုင်ရန်အခွင့်သာ သော
ကောသလမင်းကြီးအား တရားသူကြီးဟောင်းက “အရှင်မင်းကြီး စစ်သူကြီးမဟာဗန္ဓုလဟာ သူရဲ့ သား (၃၂)ယောက်နှင့်အတူ ပူးပေါင်းပြီး၊ အရှင်မင်းကြီးအားလုပ်ကြံရန်ကြံစည်နေကြကြောင်း ပါ အရှင်မင်းကြီး´´ ဟု မင်းကြီးအား လျှောက်တင်သောအခါ အသိဥာဏ် နည်းသော ကောသလရှင်ဘုရင်သည်ဗန္ဓုလစစ်သူ ကြီးကို အထင်လွဲလေတော့သည်။
63 ပဒေသရာဇ်မင်းတို့မည်သည် မိမိကို ပုန်ကန်လျှင် ပုန်ကန်သော
တနည်းနည်းနှင့် အပြတ်ရှင်းတတ်သည်။ ယခုလည်း သူအလွန် အားကိုးရသော စစ်သူကြီးမဟာဗန္ဓုလနှင့် သား(၃၂)ယောက်တို့ အား သတ်ဖြတ်ရန် ကြံစည်လေတော့သည်။ ကောသလဘုရင်သည် စစ်သူကြီး မဟာဗန္ဓုလအား ``စစ်သူကြီး….တိုင်းစွန်ပြည်ဖျားမှာ ကျန်းနေတယ်၊ သူပုန်ရန်ကို
သူပုန်များကို တိုက်ခိုက်ချေမုန်းရန် ထွက်ခွာသွားကြပါသည်။ အိမ်၌ ကျန်ရစ်ခဲ့သော ဇနီးဖြစ်သူ မလ္လိကာ ကား သူပုန်ရန်သူများကို ခင်ပွန်းလင်နှင့်
နေပါသည်။ ထိုအချိန်အတွင် နန်းတော်မှအရေးတကြီး စာတစ် စောင် ရောက်လာသည်။ `ဗန္ဓုလနှင့်သားတော်(၃၂)ယောက်တို့ သည်
လမ်းခွပ်လပ်တငွ်
ကျဆုန်းကုန်ကြပြီ ဖြစ်ကြောင်း ရေးထားသော စာဖြစ်နေသည်။ မလ္လကာသည် တစ်ခေါက်ဖတ်ကြည့်ပြီးသောအခါ သည်ချည်းပါပဲလို့
သူတို့လည်း ဒီပုတ်ထကဲဒီပေဲတွပဟဲာ၊ ဒီလမ်းသွားရမှာပေါ့´´ဟု
64 တရားနှင့်ဖြေလိုက်သည်။ သောကမဖြစ်ပါ၊ မျက်ရည်မကျပါ။ သူ့ဆွမ်းကျွေးပြွဲ ကီး စီမံကွပ်ကေဲနသည်။
မလ္လိကာ စိတ်ဆိုးမိမည်ဆိုး၍ ကုသိုလ်ပြုစဉ်အကုသိုလ်အဖြစ်မခံ ရန် အရှင်သာရိပုတရ္တာက တရားပြသတော်မူသည်။ ထိုအခါ မလ္လိကာသည်
ထုတ်ပြပြီး `တပည့်တော်မသည် ခင်ပွန်းနှင့်သား(၃၂)ယောက် တို့
ဆိုဖယ်ွရာ
မရှိပါဘုရား´ ဟု လျှောက်လိုက်လေသည်။ ဤကား တုနှိုင်းမမီသော မြတ်စွာ ဘုရား၏ အဆုံးမကို မီခိုရသောကြောင့် စိုးရ်ိမ်သောကဖြစ်ဖယ်ွတွေနှင့် ကြုံလာသော် လည်း (တရားနှလုံးသွင်းနိုင်၍) စိုးရိမ်ပူ ဆွေးသောက မဖြစ်သည့် သာဓကတစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။ သူတော်ကောင်းကို အမှီရသည့်အတွက်ဆွေမျိုးတို့အ လယ်၌ တင့်တယ်စွာနေရလေသည်။ လူ၊နတ်၊နိဗ္ဗာန်သုံးတန်ချမ်း သာကို ရရှိနိုင်ပြီးဆင်းရဲခမ်းသိမ်းကင်းပျောက်ငြိမ်းနိုင်သည်။ ဟု သဂါထာဝဂ္ဂသံယုတ်၊
ဟောကြားထားပါသည်။ ထို့အပြင် မြတ်ဗုဒ္ဓလက်ထက်တော်က ရာဇဂြိုလ်ပြည်၌ တမ္ဗဒါဌိက သူ့ရဲ့အလုပ်က
65 (၅၅)နှစ်တိုင်တိုင် လူများသတ်လာ ခဲ့သော်လည်း သူတော် ကောင်းဖြစ်သော အရှင်သာရိပုတ္တရာကို အမှီရရှိသည့်အတွက် သေသောအခါ ဤသည်ပင်လျှင်
မီဝရဲသည့်
ကလျာဏမိတ္တ၏ အကျိူးရလဒ်ဖြစ်ပါသည်။ တစ်ခါကအရှင်အာနန္ဒာသည်မြတ်ဗုဒက္ဓိုလျှောက်ထား သည်မှာ``မြတ်စွာဘုရား….သူတောင်ကောင်းအမှီရသောပုဂ္ဂိလ် များသည်
ဟု လျှောက်သောအခါ၊ မြတ်ဘုရားက ``ချစ်သား အာနန္ဒာ ဒီလိုမပြောနဲ့ ဒီလိုမပြောနဲ့ ´´ဟု နှစ်ကြိမ်တိုင်တိုင်တားမြစ်တော် မူပြီး၊ ``ချစ်သား အာနန္ဒာ ….သူတော်ကောင်း ကိုအမှီရတဲ့အ တွက်
များစွာသောသူတို့သည် တရားထူးရပြီး ၊ကျွတ်တန်းဝင်ကုန်ကြပြီ’ ဟု မိန့်တော်မူခဲ့ပါသည်။ ယနေ့ခေတ်၌လည်းမဟာစည်ဆရာတော်ဘုရားကြီး တည်းဟူသော တို့သည်
တရားအားထုတ်ခငွ့်ရရှိပြီး၊
စွန်းလွန်းဆရာတော် စသော ထင်ရှားသည့် သူတော်ကောင်း ဆရာတော်ကြီးများးကို ပညာ၊ လည်း
66 မီဝေဲပါင်းဖေါ်ရာမှ ရရှိသော တုနှိုင်းမမီ အကျိူးတရားများပင် မဟုတ်ပါလော။ တစ်ဖန်
ကြောင့် ဆိုးကျိူးများ ရရှိနိုင်သည်။ ရှင်ဒေ၀ဒတ်ကို ဆရာပေါင်း မှားခဲ့သော
အ၀ီစိငရဲဖြစ်သော်လည်း မြတ်ဗုဒ္ဓကို အမီပြုလိုက်ရသည့်အတွက် အပြစ်မှလျော့ကာ
ဆရာအတင်မှားပြီး လူသတ်လာ ခဲ့သည့် အင်္ဂုလိမာလသည် အမေကိုသတ်ရန် ပြေးလိုက်လာရာကနေ မြတ်ဗုဒ္ဓနှင့်တွေ့ပြီး ၊ မြတ်ဗုဒ္ဓထံမှ
တစ်ရွာ လုံး၊ တစ်မြို့လုံး ၊တစ်နိင်ငံလုံး တစ်ကမ္ဘလုံးသည် လည်း ငြိမ်းချမ်းသာယာသော အခြေ နေသို့ ရောက်ရှိမည်မှာ မလွပဲါပေ။ အချူပ်ဆိုရသော် လောက၌သူတော်ကောင်းနှင့်ပေါင်း ဖေါ်ရပြီး သူတော်ကောင်းတရားကျင့်သုံး၍ သူတော်ကောင်းများ ချည်းဖြစ် ကြမည်ဆိုပါလျှင် မိမိနှင့်တကွ လောကကြီးတစ်ခုလုံး အေးချမ်းသယာကြမည် သည်
68 တုနှိုင်းမမီ (၆) စိတ်ဝင်စားဖွယ်အိမ်ကြီး လောက၌ အဆောက်အဦ၊ တိုက်တာ၊အိမ်စသည်များ သည် လူသားတို့အတွက် နားခိုရာ၊ အပန်းဖြေရာ နေရာဖြစ်သည့် အပြင် နေပူ ၊မိုးရွာ၊အပူဒဏ်၊အအေးဒဏ် စသည့် သဘာဝဘေး အန္တရာယ်တို့မှ ကင်းဝေးရာ နေရာလည်း ဖြစ်သောကြောင့် လူ သားများ၏ မရှိမဖြစ် လိုအပ်သော အရာတစ်ခု ဖြစ်ပေသည်။ လူသားများသည် မိသားစုနှင့် ပျော်ရွှင်စွာ နေထိုင်နိုင် ရန် အိမ်၊ တိုက်စသည့်အဆောက်အဦးများကို ငွေကြေးတတ်နိုင် သူများက ကိုယ်ပိုင် ၀ယ်ယူကာ အိမ်ပိုင်နှင့် နေထိုင်ကြသူများ ရှိ သကဲ့သို့ ငွေကြေးမတတ်နိုင်သူများက စပေါ်ပေး၍ ငှားရန်ကာ အိမ်ငှားဖြင့် နေထိုင်ကြသူများလည်း ရှိကြပါသည်၊ မည်သို့ပင်ဖြစ် စေ လူသားများ နေထိုင်ရာအဆောက်အဦးများသည် သဘာဝ ဘေးအန္တရာယ်မှ ထိုက်သည့်အားလျော်စွာ ကင်းလွတ်ပါသော် လည်း တစ်ခါတစ်ရံ မိုးသက်လေပြင်းကျကာ ရေထဲမျောပါသွား ခြင်း၊တစ်ခါတစ်ရံ အဖျက်မီးကြောင့် မီးထဲပါသွားခြင်း၊ အမွေခံစား သားသမီးများကြောင့်လည်း အိမ်ရှိ အတွင်းပစ္စည်းများကုန်သွားနိုင်ခြင်း စသဖြင့် အမျိုးမျိုး ပျက်စီး ဆုံးရှုံးနိုင်ပါသည်၊ ထိုကဲ့သို့ ဆုံးရှုံးမှု
ပြိုကျပျက်စီးရမည်မှာ သေချာလှသော သဘာဝနိယာမတရား တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ သို့သော်လည်း သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကို ကျော်လွှား နိုင်သည့်အပြင် ရေ၊ မီး၊ မင်းဆိုး၊ သူခိုး၊သားသမီးဆိုး ဟူသည့် ငါး
တန်ဖိုး မဖြတ်နိုင်သော အိမ်ကြီးတစ်လုံးကား ယခင်က ပေါ် ပေါက်ခဲ့ဖူးလေပြီ ၊ ထိုအိမ်ကြီးသည် တန်ဖိုးအားဖြင့် ဘီလျံသန်း ပေါင်းများစွာ ပေးဝယ်ပါသော်လည်း ၀ယ်၍ မရချေ၊ ဘီလျံသန်း ပေါင်းများစွာ မဆိုထားနှင့် လူသားများ နေထိုငရ်ာ ဤကမ္ဘာကြီး ဖြင့်
မရနိုင်ပါ၊ ဤသို့ဖြင့်လျှင် ထိုအိမ်ကြီးကို ၀ယ်၍ မရတော့ပြီလော၊ ၀ယ်နိုင်သူများ ပိုင်ဆိုင်သူများ ရှိပါသေး၏လော၊ အမှန်စင်စစ် စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာကောင်းသော ပေးဝယ်၍
အသက်ခန္ဓာဖြင့် ရင်း၍ ယူမည်ဆိုပါက ယူ၍ ရကောင်းရနိုင်ပါ လိမ့်မည်၊ ထိုအိမ်ကား တစ်ခြားမဟုတ်။ အရိယာများ၏ မြင့်မြတ် သော စံအိမ်တော် ဖြစ်ပါသည်။ ထိုစံအိမ်တော်ကြီးသည်
မဟုတ်၊ လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း(၂၅၀၀)ကျော်က ပေါ်ပေါက်ခဲ့ပြီး၊ ယခုထက်တိုင်
နောင်တင်ွလည်း
မည်သို့မျှ ပျက်စီးခြင်းသို့ မရောက်နိုင်သောကြောင့် တုနှိုင်းမမီ စံအ်ိမ်တော်ကြီး ဟု ခေါ်ဝေါ်တင်စားမည်ဆိုလျှင် လွန်အံ့မထင်။ ထို
အတုမရှိ မြတ်စွာဘုရားရှင် ဖြစ်ပါသည်၊ အတုမရှိမြတ်စွာ ဘုရား သည် တုနှိုင်းမမီ စံအိမ်တော်ကြီးကို ကိုယ်တော်တိုင် သိမြင် တော်မူ၍
စံအိမ်တော်ကြီးရှိရာသို့ ရောက်ရှိသွားခဲ့ကြသော လူနတ် ဗြဟ္မာ များသည် ဂဏန်းသင်္ချာအားဖြင့် ရေတွက်၍ မနိုင်ပါချေ။
70 မြတ်သော စံအိမ်တော်ကြီးတွင် အရိယာပုဂ္ဂိုလ်များ သည် ရှေးပဝေသဏီက နေထိုင်ကြသကဲ့သို့ ယခုလည်းနေထိုင် ကြဆဲ နောင်ကိုလည်း နေထိုင်ကြပေလိမ့်ဦးမည်၊ မြတ်သော စံအိမ်တော်ကြီး၏ အရည်အသွေးမှာ (၁၀)မျိုးရှိပါသည်။ ပထမစံအိမ်တော်ကြီး ပဉ္စဂ္ဂင်္ ၀ိပ္ပဟီနော နိဝရဏတရားငါးပါးကို
တုနှိုင်းမမီ ပထမစံအိမ်တော်ကြီး၏ အရည်အသွေး တစ်ခုဖြစ်ပါ သည်။ နိဝရဏတရားငါးပါးကို အရိယာပုဂ္ဂိုလ်များ၌ ပယ်သတ် ပြီးပြီ၊ ဤသည်ကိုပင်လျှင် ပထမစံအိမ်တော်ကြီးဟု ခေါ်ဆိုရပါ သည်။ ရှင်းပါဦးအံ့။ ပုထုဇဉ်ဖြစ်ကြသော လူသားများသည် လိုချင်ဖွယ်ရာ အာရုံတွေနှင့် တွေ့ကြုံရလျှင် လိုချင်မှု ဆန္ဒက မဖိတ်ခေါ်ဘဲ ရောက်ရှိလာစမြဲပင် ဖြစ်သည်၊ ၀ိသဘာဂ ဆန့်ကျင်ဖက်အာရုံ (မိန်းမက ယောင်္ကျားကို ယောင်္ကျားက မိန်းမကို)နှင့် တွေ့မြင်ရ၍ နှစ်သက်လိုချင်မှုများ ဖြစ်လာသည်၊ ထို့အတူ ကြားမှု၊နံမှု၊ စားမှု၊ ထိတွေ့မှု၊
နှစ်သက်ဖယ်ွရာ
တွေ့ကြုံသောအခါတွင်လည်း လိုချင်မှုဆန္ဒများ ဖြစ်ပေါ်ရလေ သည်။ လိုတာရလျှင်
စိတ်မချမ်းသာ ဖြစ်တတ်သကဲ့သို့ ကြမ်းတမ်းသည့် အသံများ ကြားရလျှင် စိတ်မချမ်းသာခြင်းများ ဖြစ်တတ်သည်၊ ထို့အတူ မနှစ်သက်သော အနံ့၊ အရသာ၊ အထိအတွေ့၊အကြံအစည်များ
71 နှင့် ရင်ဆိုင်ရပြီဆိုလျှင်လည်း အလိုမကျ စိတ်ဆိုးဒေါသထွက် တာတွေ ဖြစ်လာရပေသည်။ တစ်ခါတစ်ရံ စိတ်ထဲရှင်းလင်းကြည်လင်မှုမရှိ ၊မည်သို့ မျှ စဉ်းစားတွေးတော၍မရ၊ တွေတွေဝေေ၀ကြီး ဖြစ်နေတတ်ပါ သည်၊ တစ်ခါတစ်ရံ ဘယ်လိုမှ ထိန်းလို့မရအောင် ငိုက်မျဉ်းလာ သည်၊ ထိုင်းထိုင်းမှိုင်းမှိုင်း ဖြစ်ကာ ပျင်းရိခြောက်သွေ့ပြီး ကုသိုလ် တရားများ ဖြစ်နိုင်ရန် ထကြွလုံ့လမှုမရှိ တွန့်ဆုတ်နေတတ်ပါ သည်။ တစ်ခါတစ်ရံ စိတ်စုစည်း၍လည်းမရ ၊စိတ်မတည်ငြိမ် ဘဲ ဟိုရောက်ဒီရောက်ဖြစ်ကာ စိတ်တွေ ပျံ့လွင့်နေသည့်အခါမျိုး လည်း ရှိပေသည်၊ ထို့အပြင် ယခင်က ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးသော ကိစ္စတို့၌ အမှားပြုလုပ်မိ၍
သည်။ တစ်ခါတစ်ရံ အကြောင်းအရာတစ်ခုအပေါ် သံသယ များ လွှမ်းမိုး၍ ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင် ဆုံးဖြစ်ချက်ချ၍ မရ၊ ကိုယ့်ကိုကိုယ် စိတ်ချ ယုံကြည်မှုမရှိ ဆုံးဖြတ်ရမည်ကို ချီတုံချတုံဖြစ်ကာ ဒွိဟ ဖြစ်နေသော
၀ယ် တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခု ၀င်ရောက်နေတတ်ပါသည်၊ ထိုတရား များ ရှိနေသည့် ကာလပတ်လုံး စိတ်၏ငြိမ်းအေးမှုကို မရရှိဘ၊ဲ အနှောင်အဖွဲ့ ခံနေရသည့်ပမာ စိတ်သည် လွတ်လပ်မှုမှ ကင်း လျှက် ရှုပ်ထွေးကျဉ်းကြပ်လျှက်ရှိသည်၊ ထိုစိတ်သည် မည်သည့် အခါမျှ ကုသိုလ်စိတ်မဖြစ်နိုင် ကုသိုလ်မဖြစ်အောင်လည်းတားဆီး
ဟုခေါ်ဆိုရ ပါသည်။ ဥပမာ….ရွှေထည်များတွင် အများအားဖြင့် သံ၊ကြေး၊ ဂျွတ်၊ခဲ၊ဘော်၊ စသော အညစ်အကြေးငါးမျိုး ပါဝင်နေသည်၊ ထို အညစ်အကြေးများ ပါဝင်နေသော ရွှေထည်ကို တန်ဆာပြုလုပ် လျှင် ထိုတန်ဆာသည် ကြမ်းတမ်းခြင်း၊ပျက်လယ်ွခြင်း၊
ဆတ်ခြင်း၊ ကြိုးလွယ်ခြင်း၊ မကြာမီ အရောင်ပြယ်ခြင်းများ ဖြစ် တတ်ပါသည်၊ ထို့ကြောင့် တန်ဆာမပြုလုပ်မှ ရွှေထဲတငွ် ပါဝင် နေသော အညစ်အကြေး ငါးမျိုးကို ဖါးဖိုပေါ်တွင် တင်၍ သန့်စင် လေ့ ရှိကြပါသည်၊ ထိုအခါ စင်ကြယ်သော ရွှေကို ရရှိပေသည်။ ထို့အတူ စိတ်တွင် နိဝရဏ တရားဟူသော အညစ်အ ကြေး
မစင်ကြယ်ပေ၊ စိတ်ထဲတငွ် ရှိနေသော ထိုအညစ်အကြေးငါး မျိုး ကို ၀ိပဿနာဖားဖိုပေါ် တင်လိုက်သောအခါ မကြာမီ အရည်အ သွေးကောင်းသော ကြည်လင်သော စိတ်များ ဖြစ်လာရသည်။ ၀ိပဿနာဟူသည်
သင်္ခါရတရားများကို ရှုမှတ်ရသည် ဖြစ်ရာ ရှုမှတ်မှု စွမ်းရည် တိုးတက်လာလျှင်
များကို ရှုမှတ်မှုတို့ဖြင့် ပယ်သတ်နေလျှင် အရိယာနှင့်တူအောင် ကျင့်သုံးနေသည်ဟု
တစ်ချက် မြင့်မြတ်သော စံအိမ်တော်ကြီးသို့ ရောက်နေရပါသည်၊ မရှုမှတ်လျှင် ရောက်မည်မဟုတ်ပေ၊ အိမ်မပိုင်သော်လည်း အငှား အိမ်နှင့်နေရသကဲ့သို့ ပုထုဇဉ်များ တရားရှုမှတ်ပြီး လောဘစ သော ကိလေသာများကို တဒင်္ဂ ပယ်ဖျောက်နေလျှင် အရိယာတို့
နှင့်တူလှပါသည်။ ထိုမှတစ်ဆင့် အဆက်မပြတ် ရှုမှတ်၍ လေးမဂ်လေး ဖိုလ် အစဉ်အတိုင်း မျက်မှောက်ပြုနိုင်ပြီ ဆိုပါက အရိယာတုိ့၏ စံအိမ်တော်ကြီးတွင် အပြီးအပိုင် နေရမည်ဖြစ်ရာ အိမ်ပိုင်နှင့် နေရသည်ဟု ဆိုရပါမည်။ ထို့ကြောင့်
အားမထုတ်နိုင်သေးသဖြင့် အရိယာအစစ်မဖြစ်သေးသော်လည်း အရိယာအတုနှင့်တူအောင်
မဖြစ် ဖြစ်သည့်နည်းနှင့် ၀ိပဿနာတရားကို ကြိုးစားအားထုတ် စေချင်လှသည်။ ဤသည်မှာ စာရေးသူ၏ ရင်တငွ်းစကားဖြစ် ပါသည်။ ဒုတိယစံအိမ်တော်ကြီး ဆဠင်္ဂသမ္ပန္နာ ဂတော အင်္ဂါ ၆ ပါးနှင့် ပြည့်စုံခြင်းသည် ဒုတိယစံအိမ်တော်ကြီး ၏ အရည်အသွေးတစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။ အင်္ဂါ ၆ ပါးဆိုသည်မှာ မျက်စိ၊ နား၊ နှာ၊ လျှာ၊ ကိုယ်၊ စိတ် ဒွါရခြောက်ပါးကို ပြောပါသည်၊ ထိုဒွါရ ၆ ပါးနှင့် အဆင်း၊ အသံ၊ အနံ့၊ အရသာ၊ အထိအတွေ့ ဓမ္မာရုံ အာရုံ ၆ ပါးနှင့် (အာရုံနှင့်ဒွါရ)တွေ့ကြုံသောအခါ ချစ်ခြင်းမုန်းခြင်း မရှိခြင်းသည် ပင်လျှင် အင်္ဂါ ၆ ပါးနှင့် ပြည့်စုံသည် ဟုခေါ်ပါသည်။ အရိယာရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်များတွင် ကောင်းသောအရာကို မကောင်းသောအရာကို
အာရုံ ဒွါရ ဆုံခိုက် နှစ်သက်သာယာသည်၊ အလိုမကျ
ဒေါသထွက် အာရုံဆုိး များ အပေါ်တွင် မုန်းလာနသည်။ နံနက်
ဘ၀ပေါင်း မရေမတွက်နိုင်တော့ပေ။ လူ့ဘ၀သည် အချိန်ကာလ အားဖြင့် အလွန်တိုတောင်းလှပါသည်၊ ထိုတိုးတောင်းလှသည့် မိမိဘ၀ကို လိုချင်မှု၊ စိတ်ဆိုးမှု စသည်များနှင့် အချိန်မကုန်စေ သင့်ပေ၊
ကုန်လန်ွစေရန် ရှုမှတ်ပွားများ အရိယာနှင့်တူ
အောင် ကျင့်နေသည် မည်ပါပေတော့သည်။ ထိုကဲ့သို့ လိုချင်မ၊ှု စိတ်ဆိုးမှု စသည်များ ပယ်ဖျောက် နိုင်ရန်
တွေ့ကြုံနေဆဲတို့တငွ် ထိတယ်၊သိတယ်
ရှုမှတ်မှုကြာလာသောအခါ အာရုံနှင့်ရှုမှတ်သည့်စိတ် တစ်ထပ် တည်းကျလာပါတော့သည်၊ ဤသည်ကိုပင် ပစ္စုပ္ပန်တည့်သည်ဟု ပြောဆိုကြပေသည်၊ ထိုအခါ စိတ်တည်ငြိမ်မှုများ ရရှိလာကာ ရှုစရာနှင့် ၄င်းအပေါ်သိနေသော ရှုသိစိတ်လေးမှ လွ၍ဲတစ်ခြား မည်သည့် အရာမျှ မရှိပေ၊ ထိုသဘောတရားများသည်လည်း မြဲ သည်ဟူ၍
တွေ့ရဖန်များလာသောအခါ ထိုသဘောတရားများ အပေါ်တွင် နှစ်သက်သာယာမှု စိတ်ဆိုးမှု စသည် ဖြစ်မလာတော့ပေ၊ ယောဂီ သည် ၀မ်းသာဝမ်းနည်း ဖြစ်စေနိုင်သည့် အရာများကို ရှုမှတ်နေ
ရဟန္တာ အသွင်ကဲ့သို့ ချမ်းသာစွာနေနိုင်ပေသည်။ လက်တွေ့ကျင့်သုံးနိုင်ရန် မဟာစည်ဆရာတော်ဘုရား ကြီး၏ ဆောင်ပုဒ်ကို ဖေါ်ပြပေးလိုက်ပါသည်။ အဆင်းမြင်ရာ၊ ရှုမှတ်ခါ ၊ မှန်စွာ သိပါစေ၊ အသံကြားရာ၊ ရှုမှတ်ခါ ၊ မှန်စွာ သိပါစေ အနံ့နံရာ၊ ရှုမှတ်ခါ ၊ မှန်စွာ သိပါစေ အရသာ သိရာ၊ ရှုမှတ်ခါ ၊ မှန်စွာ သိပါစေ အတွေ့ထိရာ၊ ရှုမှတ်ခါ ၊ မှန်စွာ သိပါစေ သဘောပေါ်ရာ၊ ရှုမှတ်ခါ ၊ မှန်စွာ သိပါစေ ၀မ်းသာမဖက်၊ စိတ်မပျက်၊ ရှုလျှက် လျစ်လျူနေ၊ ရဟန္တသငွ် ၊ ယောဂီရှင်၊ ရှုလျှင် ဖြစ်နိုင်ပေ။ တတိယ စံအိမ်တော်ကြီး ဧကရက္ခော - သတိတည်း ဟူသော အစောင့်အ ရှောက်နှင့် ပြည့်စုံခြင်းသည် တတိယစံအိမ်တော်ကြီး၏ အရည် အသွေး တစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။ အိမ်ကြီးတစ်လုံးတွင် ဓားပြစသည့် ဘေးအန္တရာယ်က
အစောင့်အရှောက် ချထားရပါသည်။ ထို့အတူ သတိတည်းဟူသော အစောင့်အရှောက်မရှိ လျှင် အပေါက်(၆)ပေါက်မှနေ၍ လောဘစသော ကိလေသာ ရန်သူများ ၀င်လာနိင်ပါသည်။ ကိလေသာရန်သူများ မ၀င်နိုင် စေရန် ဒွါရ(၆)ပါး၌ သတိ အစောင့်အရှောက်ထားပေးရပေသည်၊
76 သတိအစောင့်အရှောက်နှင့် ပြည့်စုံလျှင် အကျိုးတရားများစွာ ရရှိသည့်အပြင် ကိလေသာများလည်း ကင်းစင်နိုင်ပေသည်။ သတိမတော သဒါမတော - သတိနှင့်ပြည့်စုံသောသူ တို့အတွက် လက်ရှိဘ၀မှာပင်လျှင် အမြဲတမ်း ကောင်းနေပါသည် သတိ မံ သုခံ မေဒတိ - သတိစိုက်လျှက် ရှုမှတ်နေသော ပုဂ္ဂိုလ် သည်
ရရှိခံစားနိုင်ပေသည်။ သတိတရားဖြင့် ရှုမှတ်နေသောသူသည် မနက်ဖြန်အတွက် မြတ်နေပါသည်။ သတိထား၍ ပေါ်ရာပေါ်ရာ ကို ရှုမှတ်ကြကုန်သော သူတို့သည် အို နာ သေ အလုံးစုံသော ဘေးဒုက္ခအပေါင်းမှ လွတ်မြောက်နိုင်၏ ဟု မြတ်ဗုဒ္ဓဟောတော် မူခဲ့သည့်အပြင် သတိနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ရနိုင်သော အကျိုးတရားများ သည်
နေရာ ၊ မည်သည့်အချိန်အခါမဆို သတိတရားဖြင့် နေနိုင်လျှင် ကိလေသာများ တဖြည်းဖြည်း ခေါင်းပါးသွားမည်၊ ခေါင်းပါးခြင်းမှ အပြီးသတ် ပယ်သတ်နိုင်မည် ဖြစ်သောကြောင့် သတိအစောင့် အရှောက်ရှိခြင်းသည်
အရိယာတို့အသွင်ကဲ့သို့ ငြိမ်းချမ်းစွာ နေနိုင်ကြပေသည်။ စတုတ္ထစံအိမ်တော်ကြီး စတုရာပဿနောစတုတ္ထစံအိမ်တော်ကြီး၏ အရည်အသွေးကား လေးပါး သော အရာဌာနကို မှီရမည် ဖြစ်ပါသည်။ မှီရာလေးပါးဆိုသည်မှာ-
မှီဝရဲမည်။ (၂) သည်းခံရမည်။ (၃) ဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်မည့် အရာများကို ရှောင်ကြဉ်ရမည်။ (၄) မကောင်းသော အကြံအစည်များကို ပယ်ရမည်။ ထိုလေးခုကို မှီရာလေးပါး ဟုခေါ်ပါသည်။
အကျဉ်းမှတ်ရန်ဆောင်ပုဒ် (မှီဝ၊ဲ သည်းခံ၊ ရှောင် ပယ်လှန် လေးတန်မှီရာများ) (၁) မှီဝဲ ရဟန်းတော်များအနေနှင့် ဆွမ်း၊သင်္ကန်း၊ကျောင်း၊ဆေး ဟုခေါ်ဝေါ်ရသကဲ့သို့ လူပုဂ္ဂိုလ်များ အနေနှင့်မူ ထမင်း ၊ အ၀တ်၊ အိမ်၊ ဆေး ဟုခေါ်ဝေါ်ရမည်ဖြစ်သည်။ ပုထုဇဉ်များသည် ကိုယ်ကြိုက်နှစ်သက်သည့်
အကျေနပ်ကြီး ကျေနပ်ကာ ကောင်းသောအရသာအပေါ်တွင် တပ်မက်သာယာမှု
“ဒီစားစရာမျိုးကို ငါ့မို့လို့ စားနိုင်တာ၊ ဒီအ၀တ်မျိုးကို ငါမို့လို့ဝတ် နိုင်တာ အလွန်ကောင်းတဲ့အိမ်မျိုးနှင့် ငါမို့လို့ နေနိုင်တာ၊ တန်ဖိုး ကြီးပြီး အလွန်ရှားပါးတဲ့ဆေးမျိုးကို
ငါမို့လို့ မှီဝဲနိုင်တာ” ဟု
ထောင်လွှားသ်ည့ မာန်မာနများ ၀င်လာ၏။ စားလျှင်လည်း “ငါစားတယ်၊ အ၀တ်ဝတ်လျှင်လည်း ငါဝတ်တယ် ၊ အိမ်တင်ွနေလျှင်လည်း ငါနေတယ်၊ ဆေးမှီဝလျှဲင်
78 လည်း ငါဆေးမှီဝဲတယ် ဟု အထင်အမြင်မှားကာ ငါ ဟူသည့် လွဲမှားသော အယူအဆ (ဒိဋ္ဌိ)၀င်လာသည်။ ဤကဲ့သို့ ပစ္စည်းလေးပါးကို အခြေခံ၍ တဏှာ၊မာန၊ ဒိဋ္ဌိများ မိမိသန္တာန်၌ ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းသည် ဘ၀နာအမိုး မကောင်းသဖြင့် ကိလေသာအမိုးများ စိုစတ်ွကာ ပင်ပန်းစွာ နေထိုင်ရခြင်း ဖြစ်ပါ သည်။
အိမ်သန့်တငွ်
နေထိုင်ရသည်မဟုတ်ဘဲ အိမ်စုတ်လေးတွင် မိုးမလုံ လေမလုံ ပင်ပန်းစွာ နေထိုင်ရသည်နှင့် တူလှပါသည်။ အရိယာသူတော်ကောင်းကြီးများသည် ဆွမ်း၊သင်္ကန်း၊ ကျောင်း၊ဆေး
မှီဝသဲုံးဆောင်သောအခါ
အခြေခံ၍ သာယာမှု(တဏှာ)၊ ထောင်လွှားမှု(မာန) အယူမှားမှု (ဒိဋ္ဌိ)များ ၀င်ရောက်လာခြင်း မရှိတော့ဘဲ တုနှိုင်းမမီ စံအိမ်တော် ကြီး၌ နေနိုင်ကြပါသည်။ ထို့အတူ ပုထုဇဉ်များသည်လည်း အစာစားသောအခါ “ အသိတေ အပိတေ သာယိတေ ခါယိတေ သမ္ပဇာနကာရီ ဟောတိ” သမ္ပဇဉ် ဥာဏ်ရှင်ကာ (စားတယ်၊၀ါးတယ်၊မျိုတယ်) စသည့် အမှတ်သတိဖြင့် မပြတ်ရှုမတ်ှပြီး စားသုံးမည်ဆိုပါလျှင် အစားအစာကို အခြေခံ၍ ကိလေသာများသည် တဒင်္ဂ(တစ်ခဏ) ပယ်သတ်ပြီး ဖြစ်နေတော့၏။ နောင်တငွ် ရှုမှတ်မှု အရည်အသွေး မြင့်မားလာပါက အာသဝေါကင်းကွာ ရဟန္တာ ဖြစ်တော်မူကာ တုနှိုင်းမမီ အရိယာစံအိမ်တော်ကြီးတွင် အစဉ်အမြဲ နေထိုင်နိုင်ပါ သည်။ ထိုအကြောင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍တစ်ခါက
တော် ထွန်းကားခဲ့စဉ် မြို့၊ရွာ၊ လမ်းဆုံ လမ်းခွတို့၌ ခရီးသွား ရဟန်း၊ရှင်၊လူများ နားနေ အပန်းဖြေနိုင်ရန် ဇရပ်များ ဆောက်
ရဟန်းတော်များ ကျောင်းမှထွက်ကာ ဆွမ်းခံလေ့ရှိကြပါသည်။ ဆွမ်းခံပြီးသော အ ခါ သီတင်းသုံးရာ ကျောင်းသို့ ပြန်ရမည်မှာ အလှမ်းကွာလှ သောကြောင့် လမ်းဆုံ၌ ဆောက်လုပ်ထားသော ဇရပ်ပေါ်တွင်ပဲ ဆွမ်းဘုဉ်းပေးတော်မူကြရပါသည်၊ ထိုသို့ ဆွမ်းဘုဉ်းပေးကြရာ တွင် မပြတ်သော အမှတ်သတိဖြင့် ဆွမ်းဘုဉ်းပေးတော်မူကြခြင်း ကြောင့် ဆွမ်းဘုဉ်းပေးပြီးသည်နှင့် တစ်ပြိုင်နက် အာသဝေါကင်း ကွာ
ဆွမ်းဘုဉ်းပေးစဉ် ရဟန္တာဖြစ်တော်မူခဲ့ကြသည်မှာ “ရဟန္တာမဖြစ် ဖူးသည့် ဇရပ်ရယ် ဟူ၍ မရှိပါ” ဟု စာပေတွင် မှတ်သခိဲ့ရပါ သည်။ အ၀တ်အထည်၊သင်္ကန်းဝတ်ရုံသည့်အခိုက်တွင်လည်း “သင်္ဃာဋိ ပတ္တစီဝရဓာရဏေ သမ္ပဇာနကာရီ ဟောတိ” သမ္ပဇဉ် ဥာဏ်ယှဉ်ကာ ကိုင်တယ်၊ယူတယ်၊၀တ်တယ်၊ လှတဲယ် စသည့် အမှတ်သတိဖြင့် အ၀တ်အထည်ကို
တဒင်္ဂ(တစ်ခဏ) မ၀င်လာနိုင်တော့ဘဲ ငြိမ်းအေးနေပေလိမ့်မည်။ ကျောင်း အိမ်များတွင် နေထိုင်သည့်အခိုက် သမ္ပဇဉ် ဥာဏ်ယှဉ်ကာ
ကောင်းကောင်း မှတ်၍ နေကြလေ” ဟူသည့်အတိုင်း မပြတ်ရှု မှတ်ခြင်းဖြင့် နေထိုင်သွားမည်ဆိုပါက နေစရာ ကျောင်း အိမ်တို့ ကို အခြေခံ၍ ကိလေသာများသည် တဒင်္ဂ(တစ်ခဏ) မ၀င်လနိုင် တော့ဘဲ ငြိမ်းအေးနေပေလိမ့်မည်။
80 ကျန်းမာရေးအတွက် ဆေးမှီဝသဲည့်အခိုက် သမ္ပဇဉ် ဥာဏ်ယှဉ်ကာ (သောက်တယ်၊ မျိုတယ်)ဟု သတိနှင့် ရှုမှတ်ပြီး ဆေးမှီဝြဲ ကမည်ဆိုပါလျှင် ကျန်းမာရေးအတွက် ဆေးကို အခြေခံ ၍
မ၀င်လာနိုင်တော့ဘဲ ငြိမ်းအေးနေပေလိမ့်မည်။ အရိယာများ
မှီဝေဲတ်ာမြူ ကသည့်အခါ
ကိလေသာမဖြစ်သကဲ့သို့ ပုထုဇဉ်များသည်လည်း ဆွမ်းစသည် ကို မှီဝဲရာ၌ တဏှာ၊မာန၊ဒိဋ္ဌိ မဖြစ်စေဘဲ မပြတ်ရှုမှတ်မှုဖြင့် မှီဝေဲနသောကြောင့် အရိယာမဟုတ်သော်လည်း အရိယာအသွင် ကဲ့သို့ ငြိမ်းချမ်းစွာ နေနိုင်ကြပေသည်။ (၂) သည်းခံ မြင်မှု၊ကြားမှု၊နံမှု၊စားမှု၊ထိသိမှု၊စသည့် အဆိုး အာရုံနှင့် တွေ့ကြုံရမှသာလျှင်
သည်။ အမှန်ကား ကောင်းသော အာရုံနှင့်တွေ့ကြုံရလျှင်လည်း သည်းခံရမည် ဖြစ်ပေသည်။ အထူးသဖြင့် တရားအားထုတ်သောအခါ ဆင်းရဲသည့် ဒုက္ခဝေဒနာအပေါ် ဒုက္ခဝေဒနာကို
အတွက် စိတ်တည်ငြိမ်မှု မရရှိနိုင်ပေ။ ထိုတွင် သတိထားရမည့် အချက်တစ်ခုက ဝေဒနာကို သည်းမခံနိုင်လျှင် ဣရိယာပုထ်ကို ပြင်ပေးရပါမည်၊ မခံနိုင်ဘဲနှင့် ပေထိုင်၍
မလွယ်ကူပေ။ သည်းခံနိုင်သမျှကို သည်းခံ၍ ရှုမှတ်သွားပါက စိတ်တည်ငြိမ်မှု ရလွယ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် သည်းခံခြင်းသည်
ဒုတိယမှီရာတစ်ပါး ဖြစ်ပေတော့သည်။ ဤနေရာတွင် အလျဉ်းသင့်၍ ပြောလိုပါသေးသည် တစ်ချို့က
စရာမလို ပင်ပင်ပန်းပန်းအားထုတ်လျှင် အတ္ထကိလမထ အကျင့် ဟု
စွပ်စွေဲ ပြာဆိုနေပါသေးသည်။
သည်ကို မလိုလား၊ သက်သာစွာ အားထုတ်ရလျှင် ကြိုက်နှစ် သက်ကြပါသည်။
လှုံ့ဆော်ရေးသား ဟောပြောနေလျှင် အမှန်တကယ် နိဗ္ဗာန်လို လား
ကောင်းလှပါသည်။ ဤသို့ဆိုလျှင် မြတ်ဗုဒ္ဓလက်ထက်တော်က နည်းလမ်း မှနက်န်စွာ
အတ္ထကိလမထ ဟုစပ်ွစွဲရာ ရောက်နေပါသည်။ ဗုဒ္ဓဘုရားရှင် လက်ထက်တော်က အသက်(၇)နှစ်အရွယ် ဥတ္တရာ အမည်ရှိ သော
မအိပ်၊မစား၊မသောက်ဘဲ (၇)ရက်မြောက်နေ့တငွ်
ရဟန္တာ ဖြစ်တော်မူခဲ့သည့် သာဓကလည်း ရှိခဲ့ပေသည်။တခြား သာဓကတွေလည်း
မဂ္ဂင်ရှစ်ပါး အကျင့်မပါဘဲ ပင်ပန်းစွာ အားထုတ်မှုကို အတ္ထကိလ မထ အကျင့် ဟု ခေါ်ဆိုပြီး၊ မဂ္ဂင်ရှစ်ပါး (သီလ၊သမာဓိ၊ပညာ) အကျင့်ပါလျှင်
အတ္ထကိလမထ အကျင့်မဟုတ်သည့်အပြင် မဇ္ဈိမပဋိပဒါ အကျင့်
သိစေချင်လှပါ သည်။ (၃) ရှောင်ကြဉ်ရမည် နိဗ္ဗာန်လိုလားကြသောသူများသည် သားရဲ တိရစ္ဆာန် ပေါများသော
တိရစ္ဆာန် ဘေးရန်ကြောင့် တရားအားထုတ်မှု ပျက်သွားနိုင်သည်။ ဆူးငြောင့်စသည် ပေါများသော နေရာများတွင်လည်း တရားအား ထုတ်ပါက
ပျက်သွားနိုင်ပါသည်။ နေရာများကို
တတိယမှီရာတစ်ပါး ဖြစ်ပေတော့၏။ (၄) ပယ်လှန်သင့်တာတွေ ပယ်လှန်ခြင်း ပယ်လှန်ရမည့်တရားများမှာ တွေးတောကြံစည်
ပယ်ရမည်။ သူတစ်ပါးကို သေပါစေ၊ ပျက်စီးပါစေဟု ကြံစည်စိတ် ကူးမှု
စိတ်ကူးမှု ၀ိဟိံသာဝိတက်ကို ရှောင်ကြဉ်ရပါမည်။ ထိုကြံစည် စိတ်ကူးမှုများ ဖြစ်ပေါ်လျှင် စိတ်ဆင်းရဲရပါသည်။ ထိုစိတ်ဆင်းရဲ စေသည့်
တိုတောင်းလွန်းလှသည့်အတွက် ကောင်းတာတွေကိုပဲ ပြုလုပ် သင့် ၊ ပြောဆိုသင့် ၊ ကြံစည်သင့်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ကြံစည်
83 စိတ်ကူး တွေးတောမှုများ ဖြစ်ပေါ်လာလျှင် ‘ကြံစည်တယ်၊ စိတ်ကူးတယ်၊ တွေးတယ်’ ဟု မပြတ်ရှုမှတ်ပြီး ပယ်လှန်သွားမည်ဆိုပါက
ကြံစည်စိတ်ကူးမှုများကို ပယ်လှန်ခြင်းသည်လည်း မှီရာလေးပါး အနက် စတုတ္ထမှီရာတစ်ပါးဖြစ်သည်။ ဤကား မှီရာလေးပါးနှင့် ပြည့်စုံရမည်
ဖြစ်ပါသည်။ ပဉ္စမစံအိမ်တော်ကြီး ပဏုန္နပစ္စေကသစ္စော တုနှိုင်းမမီ
အသွေးမှာကား သီးသန့်သစ္စာကို ပယ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။ ဤနေရာ၌ သီးသန့်သစ္စာ ဟူသည် သဿတဒိဋ္ဌိနှင့် ဥစ္ဆေဒဒိဋ္ဌိကို ဆိုလိုပါသည်။ လောကတွင် သဿတဒိဋ္ဌိ အယူရှိ သူသည်
တစ်နေရာရာတွင် အသက်ကောင်အလိုက် ပြောင်းရွှေ့ပြီး ရှိမြဲ တည်ရှိနေသည်ဟု
မိမိအယူသာ မှန်သည်၊ တခြား အယူဝါဒမှန်သမျှ မှားသည်ဟု သူက ပယ်ချသည်။ ထိုသို့သော
လမ်းစဉ်သာဖြစ်သည်။ ဥစ္ဆေဒဒိဋ္ဌိ အယူရှိသောသူသည် ပုဂ္ဂိုလ် သတ္တ၀ါသေလျှင်
သည်ဟု ယုံကြည်ယူဆကာ သေပြီးသည့်နောက် ဟိုဘ၀ဒီဘ၀ ရှိသေးသည် ဆိုတာတွေဟာ အလကားအမှားတွေပဲ ဟု ပယ်ချ သည့် အယူများသည် မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ အယူများ ဖြစ်ပါသည်။ ထိုမိစ္ဆာ အယူဝါဒပင်လျှင် သီးသန့်သစ္စာများ ဖြစ်နေပါသည်။ ဆိုခဲ့ပြီးသော သီးသန့်သစ္စာများသည် ရဟန္တာပိုဂ္ဂိုလ်တို့
84 တွင် ပယ်ပြီး ဖြစ်လေသည်။ သို့သော်လည်း ပုထုဇဉ်များ၏ သန္တာန်တငွ် ရှိနေပါသေးသည်။ ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်များသည် ပေါ်ဆဲ မပြတ်ရှုမှတ်နေလျှင် ရုပ်နာမ်၏ သဘောဖြစ်သည့် ပေါ်မှု ပျောက် မှုတို့ ထင်ရှားသိလာလေသည်။ ထို့သို့ ရှုမှတ်ရင်းဖြင့် ရုပ်နာမ်တို့ ၏ ပေါ်မှုကို သိမြင်လျှင် သေပြီးနောက် ဘ၀ပြတ်သည်ဆိုသည့် ဥစ္ဆေဒ ဒိဋ္ဌိကို ပယ်ပြီး ဖြစပ်ပါသည်။ တစ်ဖန် ရုပ်နာမ်တို့၏ ပျောက်မှုကို
ထိုသို့ ရှုမှတ်မှုဖြင့် ပယ်ခြင်းသည် တဒင်္ဂ(တစ်ခဏ) ပယ်ခြင်းဖြစ် ရာ သောတာပတ္တိမဂ်ဖိုလ် ရရှိပြီးသော သူများသည် ထိုသီးသန့် သစ္စာများ အားလုံးကင်းပျောက်သွားလေတော့သည်၊ ထို့ကြောင့် သီးသန့်သစ္စာများကို ပယ်ခြင်းသည် ပဉ္စမ မြောက် တုနှိုင်းမမီ စံအိမ်တော်ကြီး၏ အရည်အသွေး ပင်ဖြစ်ပေ တော့သည်။ ဆဋ္ဌမစံအိမ်တော်ကြီး
သမ၀ယသဋ္ဌေသနော ဆဋ္ဌမမြောက် တုနှိုင်းမမီ စံအိမ်တော်ကြီး၏ အရည်အ သွေးမှာ ရှာမှီးမှုမှ ကင်းစင်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ရှာမှီးခြင်းဟူသည် ကာမေသနာ - ကာမဂုဏ်ကို ရှာမှီးခြင်း၊ ဘ၀သေနာ - ဘ၀ကို ရှာမှီးခြင်း၊ ဗြဟ္မစရိယေသနာ
ဖြစ်ပါသည်။ ကာမေသနာ - ကာမဂုဏ်ကို ရှာမှီးခြင်း၊ ပုထုဇဉ်လူသားများမှာ ထိုရှာမှီးမှုဖြင့် မကင်းကြသေး ချေ၊
85 နောက်တစ်ကြိမ်မြင်ရန်အတွက် ကာမဂုဏ်ကို
ကောင်းသောအနံ့၊ကောင်းသောအရသာ၊ ကောင်းသော အထိ အတွေ့များကိုလည်း နေ၀င်သည်အထိ
အတွက် မနားမနေ ရှာဖွေကြရသကဲ့သို့ အ၀တ်အထည်အသုံး အဆောင်များဖြင့်
နေထိုင်ရန် တိုက်တာအဆောက်အဦများအတွက်လည်း မနား မနေ များစွာ ရှာဖွေကြရသည်၊ ကြည့်ချင်စရာများကိုလည်း စဉ်နှင့်အမျှ
သော အသံများကိုလည်း ရှာဖွေပြီး နားထောင်ကြပါသည်။ တစ်ခါတစ်ရံ ပျင်းရိငြီးငွေ့လာပြီဆိုလျှင် သာယာနာ ပျော်ဘွယ်ရှိသော သီချင်းလေးကို နားထောင်လိုက်ရသည့်အခါ သူ၏စိတ်ထတဲငွ် စိုစိုပြေပြေ ဖြစ်လာသည် ဟု လူတစ်ဦးက ပြောဖူးပါသည်၊
ရှာမှီးနေရလျှင် ကျေနပ်သည်မှာ ဓမ္မတာပင်ဖြစ်သည်၊ ကုန်းပေါ် ရောက်လျှင် နေတတ်သည့် ‘ငါး’ ကဲ့သို့ ပုထုဇဉ်လူသားတို့၏ စိတ် သည်လည်း
ကာမဂုဏ်အာရုံတငွ် နစ်မျောပြီး နေတတ်ကြသည်၊ ခြသေ့င်္ ၊ကျား စသည့် အသားစားသတ္တ၀ါတို့သည် အညှီအဟောက်ကို ကြိုက် နှစ်သက်ကြသကဲ့သို့
ကိလေသာ အညှီအဟောက်ကို နှစ်သက်ကြသည်၊ ထိုကိလေ သာအညှီအဟောက်မှ အရုန်းထွက်ချင်ကြပေ။ ကောင်းသောအနံ့များရအောင်လည်း
သည်၊ မိမိခန္ဓာကိုယ်တငွ် ကောင်းသောရနံ့များ ရရှိရန် ရေမွေး
လည်း နေ့စဉ်နှင့်အမျှ ငွေကြေးကို ပင်ပင်ပန်းပန်း ရှာဖွေနေကြရ သည်၊
ယခုခေတ်တငွ် အ၀တ်အထည် ၀တ်ကြရာ၌ ခေတ်ရေစီးကြောင်း ကို အသားပေးကာ အရှက်လုံရုံမျှ ၀တ်ဆင်သည်မဟုတ်တော့ဘဲ အပေါ်ကဆိုလျှင် လည်ဟိုက်၊ နောက်ကျောကဆိုလျှင် ကျောပြင် ကြီးမြင်ရပြီး၊
အနောက်ကွ၊ဲ မလုံ့တလုံ ၀တ်နေကြသည်မှာ မြန်မာတို့၏ အမြင် နှင့်ကြည့်လျှင် ယိုသူမရှက် မြင်သူပင် ရှက်စရာ ကောင်းလှပါ သည်။ ထိုမလုံ့တလုံ အ၀တ်အထည်များကိုပင် ၀တ်နိုင်ရန် ငွေကို ရှာမှီးရသည်မှာလည်း နားရသည်ဟူ၍ မရှိပေ၊ အားလုံးအတွက် လိုအပ်သည့်ငွေကို ရှာမှီးနေကြသည်မှာလည်း တရားသောနည်း လမ်းဖြင့် ရှာဖွေကြရသကဲ့သို့ မတရားသော နည်းလမ်းဖြင့်လည်း အချို့မှာ နေ့စဉ် ရှာဖွေနေကြရသည်။ ထိုသို့
သဘာဝဘေးအန္တရာယ်မျုိုးစုံစသည့် ပြင်ပ အန္တရာယ်နှင့်လည်း ရင်ဆိုင်ကြရသကဲ့သို့  ဥစ္စာရလာလျှင် လိုချင်နှစ်သက် သာယာ သည့် လောဘ ၊တွက်ချေမကိုက်ထင်သည့်အတိုင်းမဖြစ်လာလျှင် နှလုံးမသာယာသည့်
အန္တရာယ်တွေနှင့်နေ့စဉ် ရင်ဆိုင်နေကြရသည်၊ လူသားတို့သည် ရောင့်ရတဲင်းတိမ်မှု မရှိသည့်အတွက် အမြဲတန်း ပင်ပင်ပန်းပန်း ရှာဖွေနေကြရသည်။
87 ထို့ကြောင့် ဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်က ပုထုဇဉ်လူသားများ သည် မည်သည့်အခါမျှ ပြည့်စုံသည်ဟု မရှိခဲ့ပေ၊ အမြဲတန်း တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုတော့ ပတ်သက်လျှင်
ရောင့်ရတဲင်းတိမ်မှုလည်း
ထိုသူများကို တဏှာ၏ ကျေးကျွန်တွေဟု မိန့်တောမူခဲ့ပေသေး သည် မဟုတ်ပါလော။ အရိယာတို့သည် ကာမဂုဏ်အာရုံကို မည်သည့်အခါမျှ ရှာမှီးခြင်း မရှိသကဲ့သို့ ပုထုဇဉ်များသည်လည်း တရားရှုမှတ်မှု စွမ်းရည်မြင့်မားလာလျှင် ကာမအာရုံကို ရှာမှီးမှုသည် တစ်ခဏမျှ၊ တစ်အောက်ကြာမျှ
ဘဝေသနာ - ဘ၀ကို ရှာမှီးခြင်း ဘ၀ကို ရှာမှီးခြင်းဟူသည် ပုထုဇဉ်များတွင် လူ့ဘ၀၊ နတ်ဘ၀၊
ရည်ရယ်ွကာ
ဒါနကုသိုလ် ပြုခြင်းသည်လည်း ကုသိုလ်ကို အကြောင်းပြု၍ ဘ၀ ချမ်းသာကို
အရိယာတို့တငွ်
သောတာပန်၊သကဒါဂါမ်တိုင်အောင် ဘ၀ကိုရှာမှီးကြချေသေး၏၊ အရိယာရဟန္တာဖြစ်လျှင်တော့ ဘ၀ကို ရှာမှီးခြင်း မရှိတော့ပေ၊ တရားရှုမှတ်ခြင်းဖြင့် တဏှာနည်းအောင် ကင်းအောင် ပါးအောင် ကျင့်နေသည့်အတွက်
ကျင့်နေသည် မည်ပေ၏၊ ထို့ကြောင့် တရားရှုမှတ်ခြင်းသည် ဘ၀ ကို ရှာမှီးမှုမှ အခိုက်အတန့် ကင်းနေသည် ဟုဆိုရပေမည်။
ဗြဟ္မစရိယေသနာ - မြတ်သောအကျင့်ကို ရှာမှီးခြင်း၊
မြတ်ဗုဒ္ဓသာ သနာတော်မှအပ တစ်ခြားသော အကျင့်များကို မြတ်သောအကျင့် ဟု ထင်ယောင်ထင်မှားဖြစ်ကာ ရှာမှီးကြခြင်း ဖြစ်သည်၊ မိမိတို့ ကိုးကွယ်နေသည့် မြတ်ဗုဒ္ဓသာသနာတော်က မဂ္ဂင်(၈)ပါးအကျင့်ကို ကျင့်သုံးမှု မရှိသည့်အပြင် မိမိကိုယ်၌က လည်း
မြတ်သည်ထင်သော အကျင့်များကို ရှာမှီးနေကြသည်။ မြတ်သောအကျင့်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ (popular) သည်၊
လူတို့ဝန်းကျင်တငွ်
သဲဆမွ်းစားသောအကျင့်၊
သည် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ စကားတော်ကို အဓိပ္ပါယ်လွမှဲားစွာ မှတ်ယူပြီး ကျင့်နေ
ဦးလေးဖြစ်သူရဟန်းက အာသဝေါကင်းကွာ ရဟန္တာဖြစ်ပြီး၊ တူ ဖြစ်သူရဟန်းက ပုထုဇဉ်အဖြစ်နှင့်ပင် ရှိနေသေးသည်။ တစ်နေ့ သောအခါ ဦးလေးရဟန်းက ဆွမ်းခံရာမှပြန်လာသော တူရဟန်း အား “ငါ့ရှင် မောင်ပဉ္ဇင်း…ဒကာဒကာမများ လှူလိုက်တဲ့ ဆွမ်းကို ဘုဉ်းပေးသုံးဆောင်တဲ့အနေရာမှာ လျှာပူမလောင်စေနဲ့နော်” ဟု အမိန့်ရှိသောအခါ တူရဟန်းက “ ဆွမ်းစားတဲ့အခါ လျှာပူမ လောင်စေဘဲ စားရမယ်လို့ ဆိုတယ် ၊ ခံလာတဲ့ဆမွ်းကလည်း အေးလို့ နေပြီ။ ဒါဟာ ပကတိမီးတော့ မဟုတ်တန်ရာ၊ အေးတဲ့ ဆွမ်းပဲဖြစ်စေ၊ပူတဲ့ဆမွ်းပဲဖြစ်စေ
အပူလောင်ခံပြီး မစားနဲ့ လို့ဆိုတာဖြစ်လိမ့်မယ်” ဟုသင့်လျော် စွာ နှလုံးသွင်းပြီး ဆွမ်းစားဆဲတွင် သတိကပ်၍ တရားရှုမှတ်ရာ ဆွမ်းစားပြီးသောအခါ တူဖြစ်သည့်ရဟန်းလေးသည် အာသဝေါ ကင်းကွာ
ပကတိမီး မလောင်စေရန် စားရသည်မဟုတ်ဘဲ ကိလေသာမီး အပူမလောင်စေရန်အတွက် စားရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုကြောင့် ပကတိမီးလွတ်စားခြင်းသည် အပြင်
အကျင့်ကို သူအထင်ကြီးကာ ကြည်ညိုနေသူတို့အတွက် အထူး သတိထားသင့်လှပေသည်။ နောက်အကျင့်တစ်ခုက
သက်သတ်လတ်ွအကျင့်ပါ၊
လူတို့သည်လည်း ထိုအကျင့်ကို ကုသိုလ်ရသည်ထင်၍ အကျင့် မြတ်တစ်ခုဟု အထင်မှားနေကြသည်၊ အမှန်စင်စစ် ထိုသက် သတ်လတွ်
ဒေ၀ဒတ်က မြတ်ဘုရားထံ တောင်းခဲ့သော အကြောင်းအရာများ အနက် သက်သတ်လွတ်စားခြင်းတစ်ခုလည်း ပါဝင်သည်။ ထိုစဉ် ကထိုအကျင့်ကို မြတ်စွာ ဘုရား ခွင့်ပြုတော်မမူခဲ့ပေ။ ဆိုလိုသည် မှာ
အကျင့်ကို ကိုယ်တိုင်မကျင့်သုံးပဲ အထင်သေးကာ သာသနာအ ပြင်ပမှ ထူးဆန်းသည်ဟု ထင်မှတ်သော အကျင့်တွေကို မြတ် သောအကျင့်ပဟဲု မှတ်ထင်၍ မြတ်သောအကျင့်ကို ရှာမှီးနေကြ ခြင်းဖြစ်သည်။ အရိယာသူတော်စဉ်များသည်
တရားသည်သာ နိဗ္ဗာန်သို့ ရောက်ရှိကြသောကြောင့် မဂ္ဂင်(၈)ပါး
90 အကျင့်မှတစ်ပါး တစ်ခြားအကျင့်များကရှာမှီးခြင်းမရှိတော့ပေ အကျင့်နှင့်ပတ်သက်၍
ဆုံးဖြတ်နိုင်ကြပေသည်။ ပုထုဇဉ်ပင်ဖြစ်သော်လည်း မဂ္ဂင်(၈)ပါး အကျင့်ဖြင့် ဖြစ်ပေါ်ရာ ဖြစ်ပေါ်ရာကို သတိကပ်၍ ရှုမှတ်နေမည် ဆိုပါလျှင် ရှုမှတ်ဆ၌ဲရှာမှီးမှုမှ ကင်းစင်ပြီး တည်ငြိမ်အေးချမ်းနေ ပေမည်။ ထို့ကြောင့် ကိုယ့်ဘ၀ တည်တည်ငြိမ်ငြိမ် အေးအေးချမ်း ချမ်း ဖြစ်စေရန် ပုထုဇဉ် လူသားများအတွက် အရေးတကြီးလို အပ်သော
သတိတရားထားနိုင်လေလေ ကာမဂုဏ်ရှာမှီိးမှုမှ ဆဋ္ဌမမြောက်
အိမ်ပိုင်ဘ၀သို့ လုံးဝရောက်ရှိသွားပေလိမ့်မည်။ သတ္တမမြောက် စံအိမ်တော်ကြီး
အနာဝိလသင်္ကပ္ပေါ သတ္တမမြောက် တုနှိုင်းမမီ စံအိမ်တော်ကြီး၏ အရည် အသွေးမှာ နောက်ကျုသော အကြံအစည်မှ ကင်းစင်ခြင်း ဖြစ် သည်။
အကြံအစည်များမှာ ကာမ၀ိတက် နှစ်သက်ဖွယ်ရာ
မမြင်ရသည်ဖြစ်စေ၊ “ ဒီမြင်ကွင်းမျိုး နောက်တစ်ခါ မြင်နိုင်အောင် ဘယ်လိုများ လုပ်ရမလဲ” ဟု တွေးတော ကြံစည်ခြင်းမျိုးကို ဆိုလိုပေသည်။ ထို့အတူ ကောင်းသည့်အသံ ၊ အနံ့၊အရသာ၊
တွေးတော နေခြင်းကို ကာမ၀ိတက် ဟုခေါ်ပါသည်။ ဗျာပါဒ၀ိတက် လူတစ်ယောက်ကို ဒုက္ခရောက်သွားအောင် ဘယ်လို လုပ်လိုက်ရမည်နည်း ဟု သူတစ်ပါးအား သေကျေပျက်စီးသွား အောင် ကြံစည်တွေးတောခြင်းမျိုးကို ဗျာပါဒ၀ိတက် ဟုခေါ်ပါ သည်။ ၀ိဟိံသာဝိတက် “သူ့ကို
ကောင်းလိုက်မလဲ ဟု သူတစ်ပါးအား ညှဉ်းဆဲရန် ကြံစည်နေခြင်း မျိုးကို
အကြံအစည်ဟူသမျှသည် အရိယာသူတော်ကောင်းများတွင် မရှိ တော့ပေမယ့်
ရှိနေပါသေးသည်။ ထိုမကောင်းသောအကြံအစည်များကို ‘သတိ’ တရားထားကာ တွေးလျှင် ‘တွေးတယ် တွေးတယ်’ ဟု ရှုမှတ်ပြီး ပယ်ဖျောက်သွားမည်ဆိုလျှင်
ပယ်ဖျောက်နေသည့်အတွက် ပုထုဇဉ်ပင်ဖြစ်စေကာမူ တုနှိုင်းမမီ အရိယာတို့၏ သတ္တမမြောက်စံအိမ်တော်ကြီးတွင် ခေတ္တ နေထိုင် နိုင်ကြကာ အရိယာနှင့်တူအောင် ကျင့်နေသည် မည်ပါပေသည်။ အဋ္ဌမမြောက် စံအိမ်တော်ကြီး
ပဿဒ္ဓ ကာယသင်္ခါရော ကာယသင်္ခါရော
ဆိုလိုပေသည်။ ၀င်သက်ထွက်သက် ငြိမ်းနေခြင်းသည်လည်း အဋ္ဌမ မြောက် တုနှိုင်းမမီ စံအိမ်တော်ကြီး၏ အရည်အသွေးတစ်ခုဖြစ်
92 ပေသည်။ ထွက်သက်ဝင်သက်ငြိမ်းသည်ဟု ဆိုရာဝယ် ၀ိပဿ နာတရားအားထုတ်၍ ၀ိပဿနာနှင့်ယှဉ်သော စတုတ္ထဈာန် ရရှိ နေသူများသည် ထွက်သက်ဝင်သက် မရှိဘဲ ငြိမ်းအေးနေသည့် သဘောကို ဆိုလိုပေသည်။ န၀မမြောက် စံအိမ်တော်ကြီး -
လေသာများမှ ကောင်းစွာလွတ်သောစိတ်ရှိနေခြင်းသည် န၀မ မြောက်
ဖြစ်ပါသည်။ တရားရှုမှတ်ရာဝယ် ရှေ့အမှတ်နှင့် နောက်အမှတ် တို့ ဆက်စပ်မိအောင် ရှုမှတ်နိုင်လျှင် စိတ်သည် အခြေခံအဆင့် ဖြစ်သည့်
အားကောင်းလာကာ မရှုမှတ်ပေမယ့် စိတ်သည် လောဘစသည် ကိလေသာမှ တစ်ခဏမျှ ကင်းနေပါသည်။ ထိုသို့ ကိလေသာ သည် တဒင်္ဂကင်း(တစ်ခဏမျှ) ၀ိက္ခ မ္ဘန(တစ်အောင့်ကြာမျှ) ကင်းနေခြင်းသည် ပုထုဇဉ်ပင်ဖြစ်စေကာမူ န၀မမြောက် တုနှိုင်းမ မီ စံအိမ်တော်ကြီး၌ နေထိုင်ကြာကာ အရိယာမဟုတ်သော်လည်း အရိယာနှင့် တူနေပါတော့သည်။ ဒသမမြောက် စံအိမ်တော်ကြီး သုဝိမုတ္တပညောအရိယာပုဂ္ဂိုလ်များသည် သူတို့၏ စိတ်တငွ် လောဘ စသော ကိလေသာများလုံးဝမရှိ၊ ကိလေသာမှ လွတ်နေသည်ဟု
စံအိမ်တော်ကြီး၏ အရည်အသွေးပင် ဖြစ်ပေသည်။ အချူပ်ဆိုရသော်
မျိုးတွင် အရိယာပုဂ္ဂိုလ်များ နေထိုင်တော်မူကြသကဲ့သို့ ပုထုဇဉ် များလည်း တရားရှုမှတ်မှု စွမ်းရည်မြင့်မားလာလျှင် ထိုတုနှိုင်းမမီ စံအိမ်တော်ကြီးများ၌ ခေတ္တ နေထိုင်နိုင်ကြသကဲ့သို့ အရိယာနှင့် တူအောင်လည်း
သိစေချင်ပါသည်။ ထိုသို့သိမြင်ပြီး ကြိုးစား၍တရားရှုမှတ်လျှက် ၀ိပဿနာဥာဏ်များ တိုးတက်မြင့်မားလာကာ မဂ်ဖိုလ်သို့ ရောက် ရှိ၍ တကယ့်ကိုယ်ပိုင်ဖြစ်သော တုနှိုင်မမီ စံအိမ်တော်ကြီးများ တွင် စိတ်ချ၊ လက်ချ နေထိုင်နိုင်ကြောင်း တိုက်တနွ်းရေးသား လိုက်ရပါတော့သတည်း။
95 တုနှိုင်းမမီ (၇) အမြတ်ဆုံးဥစ္စာ ပစ္စည်းဥစ္စာတို့သည် လူသားတို့အား ကျောင်းကျိုးကို ဖြစ်စေတတ်သကဲ့သို့
ပစ္စည်းဥစ္စာကြောင့် လူသားအချင်းချင်း ယုံကြည်မှု အတိုင်းအ တာတစ်ခုအထိ ကောင်းကျိုးကို
ယုံကြည်မှုခေါင်းပါးကာ လူမှုရေး အဆင်မပြေမှုကိုလည်း ဖြစ်စေ တတ်ပါသေးသည်။ ထို့အတူ
ကျန်းမာရေး ကောင်းအောင် အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ စွမ်း ဆောင်နိုင်ကြသည်။ ယခုခေတ် popular ဖြစ်နေသော အသဲ ‘စီ’ ပိုးရောဂါသည် ကုရာနတ္ထိ ဆိုသော်ငြားလည်း ယခုပြည်ပနိုင်ငံ များတွင် သိန်းပေါင်းရာချီ၍
ကြောင့် ပျောက်လုနီးပါးဖြစ်လျှက် စိတ်ချမ်းသာစွာ ဘ၀တွင် ဆက်လက်ရပ်တည်နေနိုင်ကြသည်မှာလည်း
ကောင်းကျိုးဟုဆိုရပေမည်။ သို့သော်လည်း ပစ္စည်းဥစ္စာကြောင့် အသက်ဆုံးရှုံးရသည်လည်း
အိမ်ထောင်ရေးအဆင်မပြေမှုကိုလည်း ဖြစ်စေတတ်သည့်အပြင် အိမ်ထောင်ရေးအဆင်ပြေမှုကိုလည်း
တစ်ခါတစ်ရံ လူသားများအား အသက်အန္တရာယ်ကို ပြုတတ် သည့်အပြင် ကိုယ့်ကိုကိုယ်သတ်သေကာ အဆုံးစီရင်သွားသည် ကိုလည်း စိတ်မကောင်းစွာ ကြားရမြင်ရပါသေးသည်။
လူသားတို့ကို ကောင်းကျိုးဆိုကျိုး တစ်ခုခုတော့ ပေးပေမည်။ ဆိုးကျိုးကို
ကောင်းကျိုးတရားရရှိပြီဟု ပျော်ရွှင်ဝမ်းသာကြမည်မှာ မှန်သော် လည်း ထိုကောင်းကျိုးတရား၏ နောက်ကယ်ွတငွ် ဆိုးကျိုးက ထက်ကြပ်မကွာ လိုကလ်ာသည်ကို စာရှုသူများ သတိထားသင့် ပေသည်။
သာ ခံစားကြရမည့်အပြင် စိုးရိမ်ပူပန်မှု ငိုကြွေးမှု စိတ်ဆင်းရဲမှု မကင်းသည့် ခံစားမှုဖြင့် ခံစားကြရပေသည်။ လောကတွင်
အတွက် ကောင်းကျိုးရရှိသကဲ့သို့ ဆိုးကျိုးလည်း ရရှိသည်မှာ သဘာဝနိယာမ
ကောင်းကျိုးချည်း သက်သက်သာ ပေးနိုင်သည့် တန်ဖိုးရှိ ဥစ္စာ များလည်း လောကတွင် ရှိပေသည်၊
သုံးစြွဲ ခင်းဖြင့် ပစ္စုပ္ပန်ဘ၀တွင် လူတော်လူကောင်းတစ်ယောက် အဖြစ်သို့
အောင် ကောင်းကျိုးပေးနိုင်သည့်အပြင် ဘ၀သံသရာနောက်ဆုံး အထိတိုင်အောင်လည်း
ကြောင့် ဖေါ်ပြလတ္တံ့သော ဥစ္စာများကို တုနှိုင်းမမီ ဥစ္စာများဟု တင်စားရခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ထိုတုနှိုင်းမမီ ဥစ္စာပစ္စည်းများကို လူကြီးလူငယ် လူ ရွယ်အသီးသီး
သုံးစွနဲိုင်ပြီး
သာယာရွှင်လန်းသည့် ဘ၀တစ်ခုကို ဖန်တီးနိုင်ပါသည်။ (you can create the happy life) ထိုတုနှိုင်းမမီဥစ္စာများမှာ (၁) ယုံကြည်မှု (Conviction- Saddha) သဒ္ဓါတရား-
97 ယုံကြည်သည်ဟုဆိုရာတွင် ယုံကြည်တိုင်း သဒ္ဓါ တရားဟု မခေါ်ဆိုနိုင်ပေ။ ဘာ့ကြောင့်ဆိုလျှင် လောကတွင် ယုံကြည်တိုင်း အမှန်တရားဟု မဆိုနိုင်သော်လည်း အမှန်တရား တိုင်းကိုတော့ ယုံကြည်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။ မှန်ကန်သောတရား တိုင်းကို ယုံကြည်လျှင် ထိုယုံကြည်မှုမျိုးကို ‘သဒ္ဓါ’ ဟု ခေါ်ဆိုကြ ပါသည်။ သဒ္ဓါတရား ဆိုသည်မှာ ရတနာသုံးတန် ကံ၊ကံ၏ အကျိုးတရားများကို ယုံကြည်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ ကံနှင့်ကံ၏ အကျုိးတရားများကို သဘာဝအမှန်တရား ဟုလက်ခံသည်ဆိုလျှင် ထိုလက်ခံယုံကြည်သည့် စိတ်ကလေး သည် တဖြည်းဖြည်း ကြည်လင်လာပါသည်။ ထို့ကြောင့်လည်း သဒ္ဓါတရားကို
အဓိပ္ပါယ်ဖငွ့်ဆိုကြပါသည်။
သဒ္ဓါတရားသည် လက်နှင့်တူသည်ဟု မြတ်ဗုဒ္ဓဟောတော်မူခဲ့ပါ သည်။ ‘လက်’ရှိလျှင် မည်သည့်အရာကိုမဆို ယူနိုင်သကဲ့သို့ ပုည ကြိယာဝတ္ထု(၁၀)ပါး
လက်ဖြစ်ပါသည်။ ပုညကြိယာဝတ္ထု(၁၀)ပါးအနက် ဒါန၊သီလ၊ဘာဝနာကို မူ နားလည်လွယ်၍ မရေးတော့ပြီ။ ‘အပစာယန’ ဆိုသည်မှာ ကြီးသူကို ငယ်သူက ရိုသေခြင်းကို ခေါ်ပါသည်။ ထိုသို့ ကြီးသူကို ရိုသေမှုပြုခြင်းသည် မိမိ၌ ရှိသော မာန်မာနကိုလည်း ချိုးနှိမ်ပြီး သားဖြစ်သလို စိတ်ထားနူးညံ့လာကာ မေတ္တာစိတ်ဖြင့် ပြုနိုင်၊ ပြောနိုင်၊ တွေးတောနိုင်လာသည့်အပြင် မိမိစိတ်ကို ချမ်းသာ သည့်ဘက်သို့ နောက်တစ်ခုက
98 လုပ်အားပေးကုသိုလ်ယူလျှင် တခြားအချိန်နှင့်မတူ စိတ်ရွှင် လန်းပြီး ချမ်းသာနေပေသည်။ ထို့အတူ
ရည်ရွယ်ကာ ပရဟိတလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်းသည်လည်း ကုသိုလ်ရလှပေသည်။ နောက်တစ်ခုက ‘ပတ္တိဒါန’- မိမိကုသိုလ် ကို လူနတ်ဗြဟ္မာများအား အမျှအတန်းပေးဝေခြင်းသည် စိတ် ချမ်းသာလှသည်ဖြစ်၍
အမျှအတန်းပေးဝေလာလျှင် ၀မ်းမြောက်စွာ သာဓု ခေါ်ရခြင်း သည်လည်း စိတ်ချမ်းသာမှုတစ်မျိုးမို့ ကုသိုလ်ရလှပေသည်။ တစ်ခါတစ်ရံ
ကြည်ကြည်လင်လင် လန်းလန်းဆန်းဆန်းဖြစ်ကာ ဓမ္မဿဝနာ ကိုသုလ် ရနိုင်ပေသည်။
တစ်ဖက်လူအား စေတနာဖြင့် ဟောပြောပြသပေး၍ တစ်ဖက် သား နားလည်လျှင် စိတ်ချမ်းသာရသည့် ဓမ္မဒေသနာကုသိုလ် တစ်မျိုးဖြစ်သည်။ အယူဝါဒပိုင်းဆိုင်ရာတွင် အယူအမြင်စင်ကြယ် မှသာလျှင် လမ်းကြောင်းမှန်ကန်သည့်အတွက် ကုသိုလ်ရနိုင်ပေ သည်။ အယူအမြင် စင်ကြယ်ရေးနှင့်ပတ်သက်၍ ရေးသားရ လျှင် ကျယ်ဝန်းလှသည်ဖြစ်ရာ ဤ၌ စာဖတ်သူများ နားလည်သဘော ပေါက်ရုံ တင်ပြရလျှင် လူသားတို့အတွက် ကိုးကွယ်အားထားရာ သည် ရတနာသုံးပါးမှတစ်ပါး အခြားမရှိပေ။ အဘယ့်ကြောင့် နည်း၊ လူသားတိုင်းမရင်ဆိုင်ချင်သော်လည်း ရင်ဆိုင်နေရသည့် အို၊နာ၊သေဘေး အန္တရာယ်များမှ လွတ်ကင်းနိုင်၊ လွတ်ကင်းရန် လမ်းညွန်ပေးနိုင်သည့်အရာမှာ
ဘိုးဘိုးအောင် နတ်သူငယ်၊ အတွင်း(၃၇)မင်း၊အပြင်(၃၇)မင်းစ
မှန်ကန်သော လမ်းညွန်မှုကိုလည်း မပေးစွမ်းနိုင်ပေ။ ထို့ကြောင့် မိမိအား အန္တရာယ်ပေါင်းစုံမှ လမ်းညွန် ကယ်တင်ပေးနိုင်သည့်အရာမှာ ဘုရား၊တရား၊သံဃာ ရတနာသုံး ပါးပဲ ဖြစ်သည်ဟု အယူအမြင်စင်ကြယ်ရပါသည်။ ထိုသို့ စငယ် ကြယ်ပါက လမ်းကြောင်းမှန်သည့်အတွက် အခြေခံကုသိုလ်များ နှင့်
သဒ္ဓါဟူသည့် လက်ဖြင့် ကုသိုလ်များ ရနိုင်ပုံ ဖြစ်ပေသည်။ လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း (၂၅၀၀)ကျော်ဆီက သက်တော် ထင်ရှား မြတ်စွာ ဘုရားသည် သာဝတ္ထိပြည် ဇေတ၀န်ကျောင်း တော်၌ သီတင်းသုံးတော်မူစဉ် ညသန်းခေါင်ယံအချိန်၌ နတ်သား တစ်ပါးက
အကောင်းဆုံးသော တုနှိုင်းမမီ အရင်းအနှီးဥစ္စာဆိုတာ ဘာပါလဲ ဘုရား”
လောကတွင် တုနှိုင်းမမီ အရင်းအနှီးဥစ္စာကား အခြားမဟုတ် ရတနာသုံးတန်၊ကံ ၊ ကံ၏အကျိုးကို မြတ်နိုးယုံကြည် လက်ခံ သည်ဟူသော သဒ္ဓါ ဟူသောဥစ္စာသာဖြစ်တယ်” ဟု သဂါထာဝဂ္ဂ သံယုတ်ပါဠိတော်၊ ၀ိတ္တသုတ်၌ ဟောတော်မူခဲ့ပါသည်။ လောကတွင် ရွှေ၊ငွေပစ္စည်းဥစ္စာတို့နှင့် အရင်းအနှီးပြု လျှင် ရွှေငွေစသော ဥစ္စာများသာ ရလာပါမည်။ ။သဒ္ဓါတရားကို အရင်းအနှီးပြုလျှက်
တရားများပြုလုပ်လျှ င် ကုသိုလ်တရားများ ရရှိကာ ရာထုးဂုဏ် သိမ် စည်းစိမ်ဥစ္စာတို့ကိုလည်း ရနိုင်ပေသည်။ နတ်ပြည်(၆)ထပ် ၊ ဗြဟ္မာရပ်သို့လည်း ရောက်နိုင်၏။ နောက်ဆုံး၌ နိဗ္ဗာန်ကိုလည်း
တုနှိုင်းမမီ ဥစ္စာတစ်ခု ဖြစ်ပေသည်။ ‘သဒ္ဓါယ တရတိ သြဃံ’ သြဃလေးဖြာ ဘ၀သံသရာ ဟိုဖက်ကမ်းသို့ ရောက်ရှိအောင် ကူးမြောက်ချင်ပါသည်ဆိုလျှင် ယုံကြည်မှု သဒ္ဓါတရားဖြင့် ကူးမြောက်နိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် သဒ္ဓါတရားသည် လူနတ်နိဗ္ဗာန် သုံးတန်ချမ်းသာကို ရောက်ရှိနိုင် သည့်အတွက် ထို သဒ္ဓါတရားသည် သတ္တ၀ါများအဖို့ အလွန်အ ရေးပါသည့် မရှိမဖြစ် လိုအပ်သောကြောင့် တုနှိုင်းမမီ ဥစ္စာတစ်ခု ရေးသားရခြင်း ဖြစ်ပေသည်။ တစ်ဖန်
သောက်ရေကို မယူဆောင်ကြပေ၊ လမ်းခရီးတွင် စကြာမင်းက ရေသောက်ချင်သည်ဆိုလျှင်
ပါလာသော ပတ္တမြားရတနာဖြင့် စိမ်လိုက်သောအခါ နောက် ကျုနေသောရေများသည်
များကို ရရှိပါသည်။ ထိုပတ္တမြားရတနာရှိလျှင် ယခုခေတ် ရေသန့် စက် လုပ်သူများအတွက် အထူးအဆင်ပြေလိမ့်မည်။ ထိုအတူ နောက်ကျုနေသော စိတ်ကိုလည်း သဒ္ဓါတရားဖြင့် ကြည်လင် အောင် လုပ်ပေးနိုင်သည်။ စိတ်သည် လိုချင်ဖယ်ွအာရုံများနှင့် တွေ့လျှင် လိုချင်မှု ကာမဆန္ဒဖြစ်ပေါ်သကဲ့သို့ လိုချင်တာမရလျှင် နှလုံးမသာယာမှု ဗျာပါဒများ ဖြစ်ပေါ်သည်။ ထိုသို့ဖြစ်ပေါ်လျှင် စိတ်သည်နောက် ကျုပြီး ကုသိုလ်တရားများ မဖြစ်နိုင်တော့ပေ။ ကုသိုလ်တရားဖြစ် အောင်
တားဆီးပိတ်ဆု့တိတ်သည့်အတွက်
တရားများကို နီဝါရဏ တရားများဟု ခေါ်သည်။ ထိုတရားများ
ရံဖန်ရံခါ စိတ်သည် ဒါနမပြုချင် ၊ သီလမဆောက်တည်ချင်၊ဘာ ၀နာတစ်မျိုးမျိုးလည်း မပွားများချင်ဘဲ တွန့်ဆုတ်နေတတ်သည့် အခါလည်း ရှိပေသည်။ ရံဖန်ရံခါ စိတ်ပျံ့လွင့်မှုများ ပူပန်မှုများ ယုံမှားသံသယများလည်း ဖြစ်လာတတ်သည်။ ထိုမကောင်းသည့် တရားများ ပပျောက်လိုလျှင် သဒ္ဓါ တရားဖြင့် အစားထိုးပေးရပါ သည်။ သဒ္ဓါ၏ စွမ်းအားကြောင့် မကောင်းသည့်စိတ်များ ပ ပျောက်ကာ
လန်းဆန်းလာပါတော့သည်။သဒ္ဓါ တည်းဟူသော ပတ္တမြားရတ နာဖြင့်
သဒ္ဓါတရား၏ စွမ်းအားကို ပို၍ သိကြရပါသည်။ အဘယ့်ကြောင့် နည်း၊ လူသားများသည် စားဝတ်နေရေးအတွက် ကိုယ်ကိုယ်တိုင် ရှာဖွေလုပ်ကိုင်ရကြသည့်အတွက်
ရောက်မှု သဒ္ဓါတရား၏ တန်ဖိုးကြီးမှုတို့ကို အသိနည်းပါးကြပါ သည်။ နတ်သားနတ်သမီးများသည် နတ်ပြည်တငွ် ကံ တရား၏ အကျိုးဆက်များဖြင့် နေရရှာသည်။ ထိုကံကုန်လျှင် နတ်ပြည် တွင် နေထိုင်ခငွ့် သက်တမ်းတိုးရန် အခွင့်အလမ်း မရှိတော့ပေ။ လူသားများတွင် ကုသိုလ်ကံကုန်လျှင် ကံဆက်၍ ကံဆက်၍ ကံ မြင့်အောင် ပြုစွမ်းနိုင်သည့် အခွင့်အရေး အပြည့်အ၀ ရရှိကြကာ ဘ၀တွင် နေထိုငခ်ငွ့်သက်တမ်း တိုးနိုင်ပေသည်။ နတ်ဘ၀တွင် ကံပေးသမျှဖြင့် ရောက်ရေဲနရသည်။ ကံကုန်လျှင် ကံဆက်ရန်
ဘုရားလက်ထက်တော်က ဘုရားကို အမှီပြု၍ နေထိုင်ခွင့်သက် တမ်း တိုးသွားသည့် သမဏဗြဟ္မဏ နတ်သားစတာတွေတော့ အနည်းငယ်မျှ
နတ်သက်ကြွေကာ စုတေကြရသည်က များလှပေသည်။ ထို့ ကြောင့် နတ်များသည် လူသားများထက် သဒ္ဓါတရား၏ စွမ်းအား ကို ပိုသိကြပါသည်။ ထိုအကြောင်းကို နတ်တို့မှာတမ်းဖြင့် သိသာ နိုင်သောကြောင့် ဖေါ်ပြဦးအံ့။ နတ်သား၊နတ်သမီးများသည် ကုသိုလ်အထောက်အပံ့ နှင့် နတ်ပြည်တွင် ဥပပတ်ပဋိသန္ဓေဖြင့် (၁၆)နှစ်အရွယ် ရုတ်တ ရက် ဖြစ်ပေါ်လာရပါသည်။ နတ်ပြည်၌ စတင်ဖြစ်ပေါ်ကတည်း က သူတို့၏ ကိုယ်တငွ် နတ်ဝတ်တန်ဆာများ တစ်ပါတည်း ပါလာကြပေသည်။ မည်သည့်အခါမျှ လျှော်ဖပ်ွရသည်ဟု မရှိသ ဖြင့် ယခုခေတ်ကဲ့သို့ အ၀တ်လျှော်စက် သုံးစရာမလိုသည့်အပြင် သူတို့၏
ရေချိုးပေးစရာလည်း မလိုပေ။ အသက်အတိုင်းနေ၍ နတ်ပြည်မှ စုတေခါနီးလျှင် သူတို့၏ ဂျိုင်းကြားမှ ထူးဆန်းစွာ ချွေးများထွက် လာသည်။
ညိုးနွမ်းလာတော့သည်။ နတ်များစုတေခြင်း(သေခြင်း)နှင့် ပတ် သက်၍ အကြောင်းလေးမျိုးရှိသည်။ ၄င်းတို့မှာ (က)အသက် တမ်းကုန်၍ သေခြင်း။(ခ) ကံကုန်၍ သေခြင်း။(ဂ)အာဟာရကုန် ၍သေခြင်း။(ဃ) အမျက်ဒေါသထွက်၍ သေခြင်းတို့ဖြစ်သည်။ အကြောင်းလေးမျိုးအနက် အကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့် နတ်များ စုတေခါနီးအချိန်တွင် နတ်ပြည်ရှိ အဖေါ်နတ်များက စုတေတော့မည့်
စကားသုံးခွန်းကို မှာကြားကြလေသည်။ စကားသုံးခွန်းမှာ (၁) အမောင်နတ်သား….ဘာမှ စိတ် ပျက်မနေပါနှင့်၊ ဒီကစုတေရင် အကောင်းဆုံးနေရာဘုံကို ရောက် အောင်သွားပါ။ (၂)ထိုနေရာသို့ ရောက်စဉ် အကောင်းဆုံးလာဘ် ကို ရအောင်ယူပါ။ (၃) ရလာသောလာဘ်ကို ခိုင်မာအောင် လုပ်ခဲ့ပါ ဟူ၍ ဖြစ်သည်။ ထိုစကားသုံးခွန်းအနက် အကောင်းဆုံး ဘုံဌာနသို့ ရောက်အောင်သွားပါ ဟူသည် လူ့ပြည်သို့ ရောက် အောင်သွားဟု ပြောခြင်းဖြစ်သည်။ (၂) အကောင်းဆုံးလာဘ်ကို ရအောင်ယူခဲ့ပါဟူသည်
ပြောခြင်းဖြစ်သည်။ (၃) ရရှိလာသော ထိုလာဘ်ကို ခိုင်မာအောင် လုပ်ပါ ဟူသည် ရရှိလာသော ထိုသဒ္ဓါတရားကို မိမိသဏ္ဍာန်တွင် မပျောက်ပျက်သွားပါစေနှင့်ဟု ပြောခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုနတ်တို့၏ မှာတမ်းစကားများဖြင့် သဒ္ဓါတရားသည် မည်မျှအရေးပါကြောင်း ဘ၀အတွက်
လောကုတ္တရာသဒ္ဓါ ဟု နှစ်မျိုးရှိပေသည်။ ပုထုဇဉ်တို့၏ သဏ္ဍာန် ၌ ရှိသော သဒ္ဓါတရားသည် ခိုင်မြဲမှု မရှိလှသောကြောင့် လောကီ သဒ္ဓါတရား ဟု ခေါ်ဆိုရပါသည်။ လောကုတ္တရာသဒ္ဓါတရားနှင့် စပ်လျဉ်း၍ မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော်က သောတာပန်အ ရိယာဖြစ်ပြီးသော ဓနဉ္ဇာနီ ပုဏ္ဏေးမ၏ ဖြစ်ရပ်ကား စိတ်ဝင်စားစ ရာ ကောင်းလှပါသည်။ တစ်နေ့ ဓနဉ္ဇာနီပုဏ္ဏေးမ၏ခင်ပနွ်းသည် တိတ္ထိတက္ကတွန်းတွေကို အိမ်ပင့်ပြီး ဆွမ်းဖိတ်ကျွေးမည်ဖြစ်သော ကြောင့် “ရှင်မ…ငါ့ဆရာတက္ကတွန်းတွေလာလျှင် မင်းရဲ့ ရဟန်း
ယောင်းမှားပြီး ခေါ်မိရင် မင်းကို ငါသတ်ပစ်မယ် ဟု ခြိမ်းခြောက် ထားသော်လည်း ခင်ပွန်းသည်၏ ဆရာများဖြစ်သော တိတ္ထိတက္က တွန်းများ
ရတနာသုံးပါး ယုံကြည်မှုနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အသက်ကို ရန်ရှာမည် ဆိုသော်လည်း
ယုံကြည်မှုသဒ္ဓါတရားကိုတော့ လုံးဝအပျက်မခံခဲ့ပေ။ တစ်ဖန်
သိကြားမင်းက “ ဟဲ့..သုပ္ပဗုဒ္ဓ သင်ဟာ အလွန်ဆင်းရဲတဲ့အတွက် တစ်သက်လုံးစားလို့မကုန်အောင် ပစ္စည်းတွေပေးမယ်၊ ဒါပေမယ့် သင်ကတိတစ်ခုပေးရလိမ့်မယ်၊ လောကမှာ ဘုရား၊တရား၊သံဃာ ရတနာသုံးပါးမရှိ လို့ ပြောရမယ်” လို့ ဆိုသောအခါ သုပ္ပဗုဒ္ဓသည် “အခုပြောနေတဲ့အသံရှင်က ဘယ်သူပါလဲ”ဟု မေး၏။ “သိကြားမင်းက
သိကြားမင်းဖြစ်တယ်”ဟု ပြန်ဖြေပါသည်။ သုပ္ပဗုဒ္ဓက “အသင်သိ ကြားမင်း..ကျုပ်
မစွန့်လတ်ွနိုင်ဘူး၊
သင်ထင်သလို ငါဟာ ဆင်းရဲတဲ့လူတစ်ယောက်မဟုတ်ဘူး၊ ငါ့မှာ သူတော်ကောင်းဥစ္စာများနှင့် ပြည့်စုံလို့ ငါဟာ လူချမ်းသာတစ် ယောက်ပါဟု ပြန်လည်တုံ့ပြန် ပြောဆိုခဲ့ပါသည်။ သိကြားမင်းက
ဖျက်ဆီးပါသော်လည်း သုပ္ပဗုဒ္ဓ၏ သဒ္ဓါတရားကိုမူ လုံးဝဖျက်ဆီး ၍ မရခဲ့ပေ။ ပစ္စည်းဥစ္စဖြင့် ဖြားယောင်းပါသော်လည်း ပစ္စည်းဥစ္စာ
လုံးဝအပျက်မခံခဲ့ပေ။ ဤသည်မှာ ခိုင်မြဲသော လောကုတ္တရာသဒ္ဓါတရားမျိုး ဖြစ်သည်။
လောကီသဒ္ဓါတရားကနေ ခိုင်မြဲသည့် လောကုတ္တရာသဒ္ဓါတရား မျုိး
သေးစေကာမူ ပုထုဇဉ်ဘ၀၌ ရရှိထားသည့် သဒ္ဓါတရားများကို ပျောက်ပျက်မသွားစေဘဲ နည်းရာကနေ များလာအောင် ကြိုးစား ဆောင်ရက်ွရန် လိုအပ်လှပေသည်။ ဤသို့ဖြင့် သဒ္ဓါ ဥစ္စာသည် ဘ၀သံသရာတစ်လျှောက် လူ၊နတ်၊ဗြဟ္မာ သတ္တ၀ါအားလုံးအတွက် မရှိမဖြစ် အလွန်အရေး ပါကြောင်း သိသာထင်ရှားလှသောကြောင့် ထိုဥစ္စာကို မည်သည့် အရာမျှ တုနှိုင်း၍ မမီနိုင်ဟု တင်စားလိုက်ရပါသည်။ လူ့အရည်အသွေး (morality) သီလဥစ္စာပစ္စည်းကား လူသားတို့၏ အရည်အသွေးတစ်ခု ဖြစ်သည့် ကိုယ်ကျင့်တရားဖြစ်ပါသည်။ ထိုကိုယ်ကျင့်တရားနှင့် စပ်လျဉ်း၍ တုနှိုင်းမမီ(၃)တွင် သီလအရိပ် ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ရေးသား ခဲ့ပြီး ဖြစ်သော်လည်း ပို၍ပြည့်စုံသွားစေရန် ကျန်တာလေးတွေကို ဆက်လက်ရေးသားပေးပါဦးမည်။ ကိုယ်ကျင့်တရားသည် ၀ါရိတ္တသီလနှင့်စာရိတ္တသီလဟု နှစ်မျိုးရှိပေသည်။ ၀ါရိတ္တဆိုသည်မှာ တားမြစ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ အဘယ့်ကြောင့် တားမြစ်ရပါသနည်းဟူမူ ဥပမာ- မီးကိုကိုင်လျှင် ပူလိမ့်မည်၊
ပါဏာတိပါတ၏ ခါးသီးသော တုံ့ပြန်မှုကို ခံရပေလိမ့်မည်။ ထို့ ကြောင့် ပါဏာတိပါတ စတာတွေကိုမလုပ်ပါနှင့် ဟု တားမြစ် ထားသည်ကို ၀ါရိတ္တသီလ ဟုခေါ်ပေသည်။ စာရိတ္တသီလဟူ သည်
မယားကျင့်ဝတ်၊ စသည့် ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာများ ကျင့်သုံးခြင်းကို ခေါ်ပါသည်။ ဤတွင် ၀ါရိတ္တသီလနှင့်ပတ်သက်၍ (ပါဏာတိပါတာ ဝေရမဏိ) သူတစ်ပါးအသက်ကို သတ်ခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်ပါ၏ ဟု ဆောက်တည်ရုံမျှနှင့် အဘယ်ကြေင့်နည်း၊
အသက်အန္တရာယ်ကို အကာအကွယ်ယူရန်ဟုဆိုကာ အသက် သေစေနိုင်သည့် လက်နက်များကို မိမိလက်ဝယ်ထားရှိမည် ဆိုပါ ကလည်း ပါဏာတိပါတ သီလ မပြည့်စုံနိင်သည်ကို သတိထားရ ပေမည်။ အဒိန္နာဒါနာ သူတစ်ပါးပစ္စည်းကို ခိုးခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်ပါ သည်ဟု စောင့်ထိန်းထားသော်လည်း လမ်းပေါ်မှ ကောက်ရ သည့်ပစ္စည်းကို အရှင်ရှိသောပစ္စည်းဟုသိပါလျှက် လိုချင်စိတ်ဖြင့် ပြန်မပေးလျှင်
သတိထားရပါမည်။ကာမေသုမိစ္ဆာစာရနှင့်ပတ်သက်၍ အမျိုးသား ဆိုလျှင် အမျိုးသမီး(၂၀)ကို ရှောင်ကြဉ်သင့်သည်။ အမျိုးသမီးဆို လျှင်
ယောင်္ကျားကို မပြစ်မှားသင့်ပေ။ လိမ်ပြောခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်သော မုသာဝါဒသိက္ခာပုဒ် ကို စောင့်ထိမ်းထားရုံမျှမက သစ္စ၀ါဒီ မှန်၍ အကျိုးရှိသော စကား
ပြည့်စုံနိုင်ပေသည်။ အရက်သေစာ သောက်စားခြင်းသည်လည်း စောင့်ထိန်းရုံမျှ မဟုတ်၊ ကိုယ်တိုင်လည်း မူးယစ်စေတတ်သည့် အရာများကို ထမင်းစားခါနီးဟု အကြောင်းပြု၍ ဆေးဖြစ်ဝါးဖြစ် လောက်ပင်လျှင် ဘာမှမဖြစ်နိုင်ပါဘူး
မမှီဝသဲင့်ပေ။
ကြောင်း သတိချပ်သင့်ပေသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ သီလ(morality) ကို ဆောက်တည်ရုံမျှ ဖြင့် မပြည့်စုံနိင်၊ ကိုယ်တိုင်လည်း သီလတရားကို ကျင့်သုံးမှသာ လျှင် ပြည့်စုံနိုင်ပေသည်။ ကိုယ်ကျင့်တရား ထိန်းသိမ်းစောင့် ရှောက်မှုကာလ ကြာမြင့်လာလေလေ ..ကိုယ့်အရည်အသွေး မြင့် မားလာလေလေ…ဖြစ်ပေသည်။ ထိုမှတဆင့် မြင့်မားလာသည့် ကိုယ့်အရည်အသွေးကို အခြေခံကာ ၀ိပဿနာ ဘာဝနာတရား ကို လက်တွေ့ပွားများခြင်းဖြင့် ၀ိမုတ္တိရသ ဟူသည့် ပန်းတိုင်သို့ ရောက်ရှိနိုင်ကြမည်
လူတစ်ယောက်ဖြစ်စေရန် ကိုယ်ကျင့်တရားနှင့် ပြည့်စုံရပါမည်။ ဟိရီ သြတ္တပ္ပ (Shame to do evil,hiri)(Fear to do evil, attapa) လူ့အရည်အသွေးကို မြင့်မားလာစေနိုင်သော ကိုယ် ကျင့်တရားများ လုံခြုံပြည့်စုံစေရန်အတွက် ဟိရီသြတ္တပ္ပတို့သည် အခြေခံကျသော တရားများ ဖြစ်ပေသည်။ မကောင်းမှုပြုရမှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ရှက်နေခြင်းသည် ဟိရီမည်၏။ ထိုဟိရီတရားထား
အရှက်တရားကြောင့် မကောင်းမှုပြုလုပ်ခြင်းမှ ဝေးကွာသွားခြင်း ဖြစ်သည်။ မကောင်းမှုပြုလုပ်လျှင် ပတ်ဝန်းကျင်၏ ကဲ့ရဲ့ ရှုပ်ချမှု အပြစ်တင်မှုကို စိုးရိမ်ကြောက်လန့်နေသည်။ ထိုကဲ့သို့ သြတ္တပ္ပ တရားထားခြင်းသည်
ဤသို့ဖြင့် စိုးရိမ်ကြောက်လန့်မှုတို့ကြောင့် မကောင်းမှုပြုလုပ်ခြင်း မှ ဝေးကွာသွားခြင်းပင် ဖြစ်ပါသည်။ ထိုတရားနှစ်ပါးသည် လောကလူသားများအား အရှက် ကြောက်ဟူသော စည်းကမ်းဘောင်အတွင်းမှ မကျော်လန်ွမိစေ ရန် စောင့်ရှောက်သည့်အပြင် မကောင်းမှုများမှ ရှောင်ကြဉ်ကာ လူသားလောကကို
သောကြောင့် လောကပါလတရား(Guardian of the world) ဟု ခေါ်ပါသည်။
မောင်နှင့်နှမ၊ သားနှင့်သမီး အဖြစ်ဖြစ် နေရာမှန် ရပ်တည်နေနိုင် ကြသည်မှာ ထိုလောကပါလတရား နှစ်ပါးကြောင့်ပင်၊ အကယ်၍ ထိုလောကပါလတရားများ မရှိလျှင် လူသားတို့သည် မတွေးဝံ့ သည့် အပြုအမူများကို ပြုလုပ်လာနိုင်သည်။ တိရစ္ဆာန်လောက တွင် လောကပါလတရား မရှိသောကြောင့် အမေနှင့်သား၊ အဖေ နှင့်သမီး၊ မောင်နှင့်နှမ၊ သားနှင့်သမီးမှန်း မသိကြဘဲ ဖေါက်လွဲ ဖေါက်ပြန် ဖြစ်နေကြသည်။ ထို့ကြောင့် လူသားများပင် ဖြစ်သော် လည်း ထိုတရားနှစ်ပါး မရှိလျှင် တိရစ္ဆာန်နှင့် မည်သို့မျှ ထူးခြား မည် မဟုတ်ပေ။ထို့ကြောင့် လောကကြီးကို သာယာစိုပြေစွာ အ လှဆင်ပေးနိုင်ပြီး လူသားများအား လူတော်လူကောင်းဖြစ်စေရန် အထောက်အပံ့ပေးနိုင်သောကြောင့်
တုနှိုင်းမမီ ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ နောက်တစ်ခု
အကြားအမြင် ဖြစ်ပါသည်။ သုတ အကြားအမြင်နှင့် ပတ်သက်၍ တုနှိုင်းမမီ (၄)တွင် အကျယ်တစ်ဝင့် ဖေါ်ပြ့ပီး ဖြစ်သောကြောင့် ဤတွင် မဖေါ်ပြတော့ပြီ။ စာဂ (Charity-) စာဂ ဟူသည် စွန့်ကြဲခြင်း၊ လှူဒါန်းခြင်းတို့ဖြစ်သည်။ စွန့်ကြဲခြင်းနှင့်လှူဒါန်းခြင်းသည် စွန့်လတ်ွတာခြင်း အတူတူပင် ဖြစ်သော်လည်း သုံးစွသဲည့် နေရာဌာနအားဖြင့် မတူညီကြပေ။ သိက္ခာဝါတော်ကြီးသော ပုဂ္ဂိုလ်မှ မိမိအောက်ငယ်သောသူအား ပေးကမ်းလျှင် စွန့်ကြဲပေးကမ်းသည်ဟု သုံးစွသဲကဲ့သို့ သိက္ခာဝါ တော်ငယ်သောသူက ကြီးသောသူအား ပေးကမ်းလျှင် လှူဒါန်း သည်ဟု ခေါ်ဝေါ်သုံးစြွဲ ကသည်။ လူများက သံဃာတော်များကို ဆိုလျှင်
သည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေ၊ စာဂတရား၏ သဘောကား စွန့်လတ်ွမှု ပင်ဖြစ်ပါသည်။ စာဂ ပတ်ဝန်းကျင်
အားကိုးကြပါသည်။ လူတစ်ယောက်သည် ရပ်ကွက်အတွက်ဖြစ် စေ၊ မြို့ရွာအတွက်ဖြစ်စေ လိုအပ်ရာရာ ပစ္စည်းများကို စွန့်လွတ် လှူဒါန်းနေလျှင် ထိုသူ့ကို မြို့ရွာနေလူများက ချစ်ခင်ကြသည့် အပြင် ပြောလိုက်သည့်စကားကိုလည်း ရိုသေစွာ လိုက်နာကြသ ဖြင့် သြဇာတိက္ကမရှိသည်။ စာဂတရား မရှိဘူးဆိုပါလျှင် ‘ဒီလူကပ်
သည့်အပြင် လူချစ်လူခင်လည်း မရှိတော့ပေ။ ပြောလိုက်သော စကားသည်လည်း အခွန်းတစ်ရာပြော၍ တစ်ခနွ်းအရာမထင်ပေ။ ထို့ကြောင့် စာဂတရားသည် လူသားတို့အလယ်တငွ် အစွမ်းထက် မြက်လှသော ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ စာဂ နှင့်ပတ်သက်၍ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ အဖြစ်အပျက် တစ်ခုကို ပြောပါဦးမည်။ ကဿပဘုရားရှင် လက်ထက်တော်က ဃဋိကာရ အမည်ရှိ အိုးဖုတ်သမားသည် ဘုရားသာသနာနှင့် လွန်စွာ ရင်းနှီးခဲ့ပါသည်။
ကျောင်းတော်တငွ်
မြက်မိုးကုဋီကျောင်း တစ်ဆောင် ဆောက်လုပ်ရာ သက်ငယ်အမိုး လိုအပ်နေသည့်အတွက်
အိုးဖုတ်သမား၏ အိမ်မှ သက်ငယ်အမိုးကို သွားရောက် ဖြူတ်ချ စဉ် မျက်မမြင်မိဘနှစ်ပါးက ‘ဒို့အိမ်အမိုးတွေ လာဖြုတ်ကြတာ ဘယ်သူတွေလဲ’ ဟု မေးသောအခါ ‘ကျောင်းက ကိုယ်တော်တွေ ပါ ဒကာကြီး-ဒကာမကြီး’ ဟု ရဟန်းတော်များက ပြန်ဖြေပါသည်၊ မျက်မမြင်မိဘနှစ်ပါးက ‘ကျောင်းကကိုယ်တော်တွေဆို ဖြူတ်ကြ ဖြုတ်ကြ’ ဟု ပြောပါသည်။ ဃဋိကာရ အိုးဖုတ်သမား တောထဲမှ ပြန်လာသောအခါ ‘ သားရေ…ကျောင်းက သားရဲ့ကိုယ်တော် တွေ မြက်မိုးကုဋီကျောင်းဆောင် ဆောက်လုပ်ရာမှာ သက်ငယ် အမိုး မလုံလောက်သည့်အတွက် အိမ်ကအမိုးကို ယူခငွ့်ပေးလိုက် တယ် သားရေယ…’ ဟု မိဘများက ပြောသောအခါ ဃဋိကာရ လည်း လွန်စွာ ၀မ်းမြောက်ဝမ်းသာ ဖြစ်ရပါသည်။ ထိုကဲ့သို့ သူတို့မိသားစု၏ ထက်သန်သော စေတနာ ဖြင့်
အပြင်ဖက်၌ မည်မျှပင် မိုးရွာရွာ ဃဋိကာရအိုးထိမ်းသည်မိသားစု
111 နေခဲ့သည့် အိမ်နေရာတွင် ယခု အချိန်အထိ မိုးမစိုပေ။ ဤကား
ပါသည်။ ထို့ပြင် ဒါနတော ဘောဂ ၀ါ ဟောတိ - စွန့်ကြဲပေး ကမ်းလှူဒါန်းဝေငှ မြတ်ဒါနကြောင့် ဖြစ်လေရာ ဘ၀များစွာ၌ မျက်နှာမငယ်ဘဲ
ထို့ကြောင့် နိဗ္ဗာနံ ပါပကံ မူလံ- စွန့်ကြဲပေးကမ်း လှူဒါန်းမှုသည် နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်း မူလအစ တရားကောင်းတစ်ခု ဖြစ်ပေ သည်။ ဘ၀သံသရာ ကျင်လည်ရာတွင် ထိုစာဂတရား ခေါင်းပါး သောကြောင့် အများနှင့်မတူ ဖြစ်လေရာဘ၀ အဆင့်အတန်း နိမ့် ကျစွာ နေရသည့်အပြင် ပစ္ဆိမဘ၀ိက ဟူသည့် နောက်ဆုံးဘ၀ ရောက်သည့်တိုင်
သော သာဓကများလည်း ရှိခဲ့ဖူး ပါသည်။ ထို့ကြောင့် စာဂ သည် ဘ၀သံသရာတွင် အများနှင့်မတူ အဆင့်အတန်းမြင့်မားပြီး နိဗ္ဗာန် တိုင်အောင်
ရေးသားလိုက်ရပါသည်။ ပညာ (Knowledge) ပညာသည် အမှားအမှန်ကို ဝေဖန်ပိုင်းခြားတတ်သော အသိဥာဏ်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုအသိဥာဏ်နှင့် ပတ်သက်၍ ဤနေရာ တွင် သမ္ပဇဉ်တရားလေးပါးကို ပြောချင်ပါသည်။ သမ္ပဇညာ၏ လိုရင်းအဓိပ္ပါယ်မှာ- အသိဥာဏ်ပင်ဖြစ် ကြောင်း မဟာစည်ဆရာတော်ဘုရားကြီး ရေးသားတော်မူခဲ့သည့် မဟာသတိပဋ္ဌာနသုတ်
112 အဓိပ္ပါယ်တငွ်
အသိဥာဏ်သည် လေးမျိုးရှိပါသည်။ အပြောအဆို
အလုပ်ကို ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် ကိုယ့်ဘ၀ကောင်းကျုိးချမ်းသာကို ဖြစ် စေနိုင်ပါသည်။ အကယ်၍ အကျိုးမရှိ ဟုသိရှိပါက ထိုအလုပ်ကို မလုပ်ဘဲ နေရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုသို့ အကျိုးရှိ မရှိကို စဉ်းစား တွေးတောသည့် အသိဥာဏ်ကို သတ္ထကသမ္ပဇဉ် ဟုခေါ်ပါသည်။ အလုပ်တစ်ခုသည်
မလုပ်သင့် စဉ်းစားဆင်ခြင်ရပါမည်။ အကျုိးအမြတ် အများကြီး ရရှိမည့် လုပ်ငန်းတစ်ခု ဖြစ်သော်လည်း အသက်အန္တရာယ်နှင့် မုချတွေ့ကြုံရနိုင်သည် ဟု သိလျှင် မည်မျှကောင်းကျိုးရမည် ဆို စေဦးတော့၊
အကျိုးရှိမည်ဟု သိသော်လည်း ထိုအမျိုးသမီးနှင့် ဆိတ်ကွယ်ရာ တွင် နှစ်ယောက်တည်းဖြစ်ခဲ့ပါက အကျိုးရှိသည်ကို သိပေမယ့် မသင့်တော်သောကြောင့်
လုပ်လည်းလုပ်သင့်သည့် အရာဖြစ်လျှင် အသိဥာဏ်ဖြင့် စဉ်းစား ကာ ပြုလုပ်ရပါမည်။ ထိုသို့ အကျိုးရှိသော်လည်း သင့်မသင့်ကို ဆင်ခြင်စဉ်းစားသည့်
အတွက် ကျေးဇူးများပေ၏။ ထိုတရား(၂)ပါးနှင့်ပြည့်စုံလျှင် လော ကတွင်
113 အလွန်အကျိုးရှိသော တရားနှစ်ပါးဖြစ်ပါသည်။ထိုသမ္ပဇည တရားနှစ်ပါးသည်
မဟုတ်၊ သမထ၀ိပဿနာ၏ အခြေခံ အထောက်အပံ့မျှသာ ဖြစ် ချေ၏။ ထိုသမ္ပဇဉ်(၂)ပါးကို ပါရိဟာရိကပညာဟု ၀ိသုဒ္ဓိမဂ်၌ ခေါ် ဆိုထားပါသည်။ ၃။ ၀ိပဿနာတရား အားထုတ်နေသော ယောဂီမှာ ဥပါဒါနက္ခန္ဓာငါးပါးဟူသော ၀ိပဿနာ၏ အာရုံ၌ မပြတ်နှလုံး သွင်းမှု ၊ ရှုမှတ်မှုသည် ဂေါစရသမ္ပဇဉ် ဟုခေါ်ပါသည်။ သွား၊ရပ် ထိုင်၊ လျောင်းတို့တငွ် မည်သည့်အမူအရာမျိုးကိုမဆို သတိပဋ္ဌာန် တရားလေးပါးနှင့်တကွ ထိုအာရုံလေးပါးကိုပင် ယောဂီ၏ကျက် စားရာ နယ်ပယ်အပိုင်ဖြစ်သောကြောင့် ဂေါစရဟု၎င်း၊ ထိုလေး ပါး၌ မပြတ်သိမှတ်မှု၊အသိဥာဏ်ကိုပင် ဂေါစရသမ္ပဇဉ် ဟု၎င်း၊ ခေါ်ဆိုရပါသည်။ တရား
ရှုမှတ်မှုပြည့်စုံခြင်းသည်ပင်လျှင် ဂေါစရသမ္ပဇဉ်နှင့် ပြည့်စုံသည် ဟု ဆိုရပါသည်။ နိဗ္ဗာန်လိုလားသည့် ယောဂီများသည် ဆိုခဲ့ပြီး သော ဂေါစရသမ္ပဇဉ်နှင့် ပြည့်စုံသည်ထက် ပြည့်စုံအော် ကြိုးစား မည်ဆိုပါလျှင် တရားထူးရနိုင်ပါကြောင်း အာဠိန္ဒက ကျောင်းနေ မဟာဖုဿဒေ၀မထေရ်အကြောင်း သာဓကတစ်ခုကို အကျဉ်းမျှ ဖေါ်ပြပေးပါမည်။ မဟာဖုဿဒေ၀မထေရ်သည် (၁၉)နှစ်ပတ်လုံး ဆွမ်း ခံကြွသောအခါ ရှုမှတ်မှုဖြင့် ကြွတော်မူပါသည်။ ရှုမှတ်မှု လွတ် သွားလျှင် ထိုလွတ်သွားသောနေရာသို့ တစ်ဖန်ပြန်လာပြီး ရှုမှတ် မှုဖြင့် တစ်ဖန်ပြန်သွားလေ၏။ ထိုကဲ့သို့ ရှုမှတ်လွတ်ခဲ့သည် ထင် ရသော
တရားရှု မှတ်လာရာ အနှစ်(၂၀) အတွင်း၌ ရဟန္တာဖြစ်တော်မူ ခဲ့ပါသည်။ လမ်းမှား၍ မျက်စိလယ်နေသောသူသည် အမြင်ရှင်း က လမ်းမှန်ရောက်တတ်သကဲ့သို့ ခန္ဓာငါးပါး ရုပ်နာမ်တရားအ ပေါ်ဝယ် အသိရှင်းအမြင်ရှင်းသွားသည်ကိုပင် အသမ္မောဟသမ္ပ ဇဉ် ဟုခေါ်ပါသည်။ ရှင်း လင်းပါဦးအံ့… ယောဂီသည် သွား၊ရပ်၊ထိုင်၊လျောင်း စသည်တို့၌ မပြတ်နှလုံး သွင်း ရှုမှတ်လျှက် ရှုမှတ်မှုစမွ်းရည် မြင့်မားလာလျှင် ဖြစ်ပေါ်သမျှ သော သဘောတရား အာရုံတစ်ခု၊ ထိုအာရုံကို သိနေတာက တစ်ခုဟု ဥာဏ်တငွ် သိမြင်လာပါသည်။ ထိုမှတစ်ဖန် ရှုမှတ်မှု ဥာဏ်
သဘောတရားများည် ပေါ်လာပြီးနောက် ပျောက်ပျက်သွားသည် ဟု ရှုမှတ်ဆတဲငွ် တီဗွီဖန်သားပြင်၌ ထင်ရှားပြတ်သားစွာ တွေ့ မြင်ရသကဲ့သို့
ရှုမှတ်ဆတဲငွ် အသိရှင်းသွားသည်ကိုပင် အသမ္မောဟသမ္ပဇဉ် ဟု ခေါ်ဆိုရပါသည်။
သည် မပြတ်ရှုမှတ်မှု ဂေါစရာသမ္ပဇဉ် အတွင်းမှာသာ ဖြစ်နိုင် သည်။
အသိဥာဏ် မဖြစ်လာနိုင် ဟူလို။ အချူပ်ဆိုရသော် လောဘ၊ဒေါသ၊မောဟစသော
ထိန်းချူပ် (Control) ပေးနိုင်သောကြောင့် လူသားအား စိတ်စမွ်း ရည်
115 လူသားများအတွက် မည်သည့်အရာနှင့်မျှ တုနှိုင်း၍မမီနိုင် အောင်ပင် အစွမ်းထက်လှပေသည်။ ဖေါ်ပြခဲ့ပြီးသည့် ဥစ္စာ(၇)မျိုးသည် လူ့အရည်အသွေး ကို မြင့်မားစေပြီး၊ အထွတ်အထိပ်သို့ ရောက်စေနိုင်သောကြောင့် စာဖတ်သူများသည် ထိုတုနှိုင်းမမီ ဥစ္စာ(၇)မျိုးကို ရယူသုံးစြွဲ ခင်း ဖြင့် အရည်သွေးမြင့်မားသည့် ဘ၀တိုင်း လျှောက်လှမ်းနိုင်ကြ သည့် လူတော်လူကောင်းများ ဖြစ်ကြပါစေကြောင်း ရေးသား လိုက်ရပါတော့သတည်း။
117 တုနှိုင်းမမီ(၈) အကောင်းဆုံးအရသာ ချို၊ ချဉ်၊ စပ်၊ ဖန်၊ အငန်၊ အခါး ဟူသော အရသာ(၆) မျိုးသည်၊ တစ်ခုနှင့်တစ်ခု တွယှဲဉ်ပေါင်းစပ်ထားလျှင်သော်လည်း ကောင်း၊ နှစ်သက်ဖွယ်အရသာကိုဖြစ်စေတတ်ကြ၏။ တန်ဆေး လွန်ဘေးဟူသည့်အတိုင်း နှစ်သက်လနွ်း၍ လိုအပ်သည်ထက်ပို ၍
ပိုလန်ွကာထားမိ၍သော်လည်းကောင်း၊လူကိုဘေးဥပဒ်အန္တရာယ် ဖြစ်စေတတ်သည်။ သစ္စာဆိုသည့်အရသာကား ဆာတွေကို
ကောင်းမြဲကောင်းနေသဖြင့်၊ မည်မျှလောက်များများ၊ မည်မျှပင် ကြာစေကာမူအန္တရာယ်မဖြစ်တတ်သည့်အပြင် ကြာလေကောင်း လေ
လည်း၊ သစ္စာတရားများ ပျံ့နှံ့နေပေသည်။ လောကနယ်ပယ်တင်ွပျံ့နှံ့နေသောသစ္စာသည်`ကတိ သစ္စာတည်သောအခါ နွယ်မြက်သစ်ပင်ဆေးဖက်ဝင်’ ဟူသည့်အ တိုင်းကတိသစ္စာတည်သောအခါ
တန်းဖိုးမရှိသည့်နယ်ွမြက်သစ်
ပင်များသည်ပင်လျှင် ဆေးဖက်ဝင်နိုင်ကာ အနာရောဂါပျောက် နိုင်ပေသည်။ သစ္စာအရသာ၌တည်ခဲ့လျှ င်
သောမြစ်ကြီး၏ ရေအလျင်သည် ရပ်သွားသကဲ့သို့ ထိုရေအ လျင်ကိုပင်မြေကြီးသဖွယ်ပြုကာ တစ်ဖက်ကမ်းသို့ကူးမြောက်နိုင် သေး၏။
118 မြတ်စွာ ဘုရားလက်ထက်တော်အခါက
ကပ္ပိနမင်းနှင့် နောက်ပါအမတ်တစ်ထောင်တို့သည် ကုက္ကုဋ ၀တီ ပြည်မှ သာဝတ္ထိပြည်သို့ ဘုရားဖူးရန်သွားကြရာတွင် လမ်းခရီး၌ အပရစ္ဆာမြစ်ကိုရောက်ရှိကြလေသည်၊ ထိုအခါ မဟာကပ္ပိနမင်း က`ရတနာသုံးပါးဂုဏ်ကျေးဇူးကြောင့် ရေသည်ရေမဟုတ်သကဲ့ သို့ ဖြစ်စေသတည်း’ဟု သစ္စာအဓိဋ္ဌာန်လျှက် ဘုရားဂုဏ်တော် ကိုနှစလ်ုံးသွင်း၍ ထိုမြစ်ကို ကူးသောအခါ မြင်း၏ခွာကိုသော်မှရေ မစိုဘဲ တစ်ဖက်ကမ်းသို့ကူးမြောက်နိုင်ခဲ့ကြပေသည်။ တစ်ဖန် နီ လ၀ါဟနာမြစ်ကိုရောက်သောအခါတွင်လည်း
သစ္စာအဓိဋ္ဌာန်၍ တရားဂုဏ်တော်နှလုံးသွင်းကာ အောင်မြင်စွာ ဖြတ်ကူးနိုင်ခဲ့ပါသည်။ မြစ်များကိုကူးဖြတ်ရာ၌ ဖေါင်မပါ သင်္ဘော မပါဘဲ အဆင်ပြေစွာ မြစ်သုံးစင်းကို ဖြတ်ကူးနိုင်ခြင်းသည် မဟာ ကပ္ပိနမင်း၏သစ္စာအဓိဋ္ဌာန်အရသာ အစွမ်းကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုမျှသာမက ပရိတ်တော်လာ ဘုရားအလောင်းတော် ငုံးမင်း၏ သစ္စာအရသာကလည်း ကြားရသူအဖို့
ကောင်းလှသကဲ့သို့ ကြည်ညိုစရာ၊ အံ့ သြစရာလည်းကောင်း လှပေသည်။ ဘုရားအလောင်းတော်ငုံးမင်းဖြစ်စဉ်က တောမီးကြီး လောင်ကျွမ်းစဉ် မိခင်ဘခင်များမှာ အသက်ဘေးကိုကြောက်ရွံ့ သဖြင့် မီးဘေးလွတ်ရာသို့ ထွက်ပြေးခဲ့ကြရာ အလောင်းတော် ငုံးမင်းတစ်ဦးတည်းသာ တောထဲ၌ကျန်ခဲ့ပါသည်။ ပတ်ဝန်းကျင် တွင်တောမီးကြီးလောင်လျှက် ပြေးမလွတ်ဖြစ်နေစဉ် ငုံးမင်းက `ငါ၏မိခင်
မီးနှင့်ဝေးရာအခြားသို့်ထွက်ပြေးသွားခဲ့ကြလေပြီ။ ငါ့မှာငယ်သေး ၍ပြန်လည်းမပြန်နိုင် သွားလည်း မသွားနိုင်ပေ၊ ဤမှန်ကန်သော သစ္စာစကားကြောင့် တောမီးကြီးငြိမ်းပျောက်ပါစေသတည်း’ဟု
119 သစ္စာအဓိဋ္ဌာန်ပြုလိုက်ရာ တောမီးကြီးသည် တစ်ခဏချင်း ပင်ငြိမ်းပျောက်သွားလေတော့၏။
အလောင်းတော်ရှိရာ တစ်ဆက်ခြောက်မင်းပယ်စာ အရပ်သည် လည်း ကမ္ဘာတည်သမျှ ကာလပတ်လုံး မီးဘေးမှ လွတ်ကင်း လျှက်ရှိပါသည်။ နောက်သစ္စာအရသာတစ်ခုကား
မျောက်မင်း ဖြစ်စဉ်က ဖြစ်ရပ်တစ်ခြု ဖစ်ပါသည်။ ထိုစဉ်က ဘုရား အလောင်းတော်သည်၊ မျောက်ပေါင်းရှစ်သောင်းကို ရှေ့သွားခေါ် ဆောင်ပြု၍ အုပ်ချုပ်ရသောမျောက်မင်းဖြစ်ခဲ့ဖူးပါသည်။ တစ်နေ့ သ၌ မျောက်အပေါင်းတို့နေထိုင်ကျက်စားသည့်တောထဲတငွ် ရေ ကန်ကြီးတစ်ခုရှိပါသည်၊
မသောက်ကြသေးဘဲ၊ ဘုရားအလောင်းတော်မျောက်မင်းအလာ ကိုစောင့်မျှော်နေကြပါသည်။ မျောက်မင်းရောက်ရှိလာပြီးရေကန် ၏အခြေအနေကို စုံစမ်းသောအခါ ရေကန်ထသဲို့ အဆင်းခြေရာ သာမြင်ရပြီး အတက်ခြေရာမမြင်ရသောကြောင့် `ဧကန္တ ဒီရေ ကန်သည်
မျောက်များကို ကန်ထသဲို့မဆင်းခိုင်းခဲ့ပေ။ သို့နှင့် ရေကန်စောင့် သောဘီလူးသည် မျောက်များမဆင်းလာသောကြောင့် နှလုံးမ သာမယာဖြစ်ကာ ရေကိုနှစ်ခြမ်းခွ၍ဲကုန်းပေါ်တင်လာပြီး မျောက် များအား `ဘာဖြစ်လို့များရေကန်ထမဲဆင်းရတာလဲ’ဟု မေးလေ ၏။ `ကျုပ်တို့ဆင်းရင်သင်စားတာ ခံရလိမ့်မယ်၊ ဒါကြောင့်ကျုပ် တို့ကန်ထဲမဆင်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်။’ဟု
သောအခါ ဘီးလူးက `ရေကန်ထဆဲင်းလာတဲ့ သတ္တ၀ါမှန်သမျှ တစ်ကောင်မှ အလွတ်မပေးခဲ့ ဖူးဘူး၊ သင်တို့ဆင်းရင်လည်းစား ရမှာပဲ’ဟု ပြောလေ၏။ `အသင်ဘီးလူးမစားနိုင်အောင် ကျုပ်တို့
120 ရေကန်ထဲမဆင်းဘဲရေကိုသောင်နိုင်အောင်ကြိုးစားမယ်’ဆို ပြီးဖြည်ု့ကျင့်ခဲ့သောပါရမီသစ္စာအဓိဋ္ဌာန်ဖြင့်သစ္စာဆိုကာရေကန် အနီးရှိအဆစ်ပါသည့်ကျူရိုးကိုယူ၍ပါးစပ်ဖြင့်မှုတ်ထုတ်လိုက်ရာ ကျူရိုးအတွင်း၌အဆစ်မရှိတော့ဘဲ
လေတော့သည် ။ ဤသို့ဖြင့် မျောက်အပေါင်းတို့သည် ကုန်းပေါ် ကနေ၍ ကျူရိုးနှင့် ကန်ထရှဲိရေကို သောက်သုံးကြရသည့်အပြင် ဘီလူးစားမည့် အန္တရာယ်မှလည်း လွတ်ကင်းခဲ့ပါသည်။ ထိုအချိန်မှစ၍ ဒကရက္ခဘီလူး စောင့်သော ရေကန်အ နီးမှ ကျူပင်ကျူရိုးတို့သည် ဤဘဒ္ဒကမ္ဘာပတ်လုံးအဆစ်မပါ အ ခေါင်းတစ်ခုတည်း တည်ရှိနေခြင်းသည် ဘုရားအလောင်းတော် မျောက်မင်း၏ သစ္စာအဓိဋ္ဌာန်အရသာပင်ဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာတည်သရွေ့ တည်ရှိမည့် ကပ္ပဋ္ဌိတိ လေးမျိုးကို ဤနေရာတွင်ဗဟုသုတ အလို့ငှာ ဖေါ်ပြပေးလိုပါသည်။ ထိုလေး မျိုးမှာ . . . . .။ (၁)
ဤကမ္ဘာပတ်လုံး တည်နေမည်။ (၂)
ဘုရားအလောင်းတော် ငုံးမင်း သစ္စာပြုရာ တစ်ဆယ့်
ခြောက်မင်းပယ်စာ အရပ်တငွ် တစ်ကမ္ဘာပတ်လုံး မီးမလောင်ပေ။ (၃)
ဃဋိကာရအိုးထိန်းသည်နှင့် မိဘတို့နေသည့် အိမ်နေ
ရာတွင်၊ ဤကမ္ဘာပတ်လုံး မိုးဘယ်လောက်ရွာ ရွာ မိုးမစိုပေ။ (၄)
ဒကရက္ခဘီလူးစောင့်သော ရေကန်ကိုဝန်းရံ၍ ပေါက်
နေသောကျူရိုးတို့သည်တစ်ခုတည်းသောအပေါက်ရှိခြင်းတို့ဖြစ် ပါသည်။ သစ္စာအရသာ၏အစွမ်း ထက်မြက်မှုသည် ယခင်က သာမဟုတ်သေး ၊ ယခုမကြာသေးမီ အင်းဝခေတ်အတွင်းတွင်
စားဖွယ်ရာကောင်းလွန်း၍တင်ပြပါဦးမည်။ အင်းဝခေတ်သာလွန်မင်းတရားကြီးလက်ထက်တွင် တောင်ဖီလာဆရာတော်
ထိုမထေရ်သည်၊ တောင်ဖီလာတောရ၌သီတင်းသုံးနေတော်မူစဉ် စစ်ကိုင်း၊ ပင်းယ၊ အင်းဝတစ်ကြောတွင် ထိုအချိန်ကမိုးအလွန် ခေါင်ကာ အစာရေစာများ ငတ်ပြတ်ခဲ့ကြသောကြောင့် ထိုနယ် တစ်ဝိုက်တွင်
အတွက် အချိန်မတော်သွားလာရဲသူ မရှိသလောက်ပါပေ။ တစ်နေ့နေ၀င်ရီတရောအချိန်
အကာလအခါမဲ့တငွ်
ဆံပင်ဖါးလျားချဖြင့်ဝတ်ထားသော အ၀တ်များစုတ်ပြတ်ကာဒုက္ခ အပူမီးများတောက်လောင်နေသော ဒကာမတစ်ဦး ဆရာတော်ထံ ရောက်ရှိလာပါသည်။လမ်းခရီးတွင် သူမက ဒုက္ခဖြစ်လာသော ကြောင့်ကျောင်းတွင်တစ်ညတာ တည်းခိုခငွ့်ပြုပါရန်လျှောက်ထား လေ၏။ ဆရာတော်သည် ၀ိနည်းတော်အရ မာတုဂါမနှင့်တစ်ည တာအတူနေမည့်အရေးကို အလွန်ဝန်လေးသော်လည်း ဒုက္ခဖြစ် သူကို နှင်လွှတ်ရန်မှာလည်းခက်နေသည်။ တစ်မိုးတစ်ယံတည်း တွင်အတူနေ၍မဖြစ်နိုင်ကြောင်း ပြောလေ၏။ ထိုအခါ သူမ၏ အားကိုးလွန်းသောမျက်နှာကို မြင်ရသောကြောင့် မတတ်သာဘဲ ကျောင်း၏အပြင်ဘက်စင်္ကြတငွ်
သည်။ ဤသို့တစ်မိုးတစ်ယံတည်းဖြစ်နေ၍ ဆရာတော်သည် ည အချိန်တွင် လုံးဝမအိပ်ဘဲ သူမကြောင့်ငါသည် ဘာဝနာအလုပ် ကိုညလုံးပေါက်ရှုမှတ်ရပေသည်ဟု တွေးကာ တစ်ညလုံးတရားရှု
122 မှတ်နေလေတော့သည်။(သူတော်ကောင်းကြီးများ၏စိတ်နေ သ ဘောထားသည်အတုယူဖွယ်ကောင်းလေစွ) မကြာမီ
အပြင်ဘက်တင်ွနေရသည်မှာ
ကြောက်စရာကောင်းလှ၍ ကျောင်းခန်းအထဲတွင်နေခွင့်ပေးမည့် အကြောင်း အပြင်ကနေ ပိတ်ထားသောတံခါးကိုလက်ဖြင့်ခေါက် ကာ သနားစဖွယ်အကူအညီတောင်းလာ၏။ မတတ်သာရကား သူမအားကျောင်းခန်းအထဲသို့ ၀င်ခငွ့်ပေးကာ ဆရာတော်သည် ကျောင်းအပြင်ဘက်တွင် သီတင်းသုံးတော်မူပါတော့သည်။ မိုးသောက်ယံရောက်လုနီးနီးအချိန်သို့
အခါ သူမသည် ဆရာတော်အနီးသို့ ကပ်လျက် ယခုပင်ခြေသ လုံးကိုသိုင်းဖက်တော့မည်ဟန်ဖြင့် `ကယ်တော်မူပါ’ဟု သနားစ ဖွယ်တောင်းပန်နေပြန်သောကြောင့်
ကာ ကျောင်းနံရံတင်ွထိုးစိုက်ထားသည့် တံပူသတ်သည့်ဓါးမကို ယူ၍သူ့ခြေသလုံးကိုဓါးဖြင့်မွှန်းပါလေတော့သည်။ တွင်သွေးများထွက်လာသည်ကို
``ဆရာတော်ဘုရား တပည့်တော်မ မှားပါပြီဘုရား’’ဟုလျှောက် ကာ မနက်လင်းသည်နှင့် သူမထွက်ခွါသွားပါလေတော့သည်။ သူမသည်မင်းသမီးတစ်ယောက်ဖြစ်ကာ ရောက်လျှင်``မှန်ပါဘုရား
ဆရာတော်၏အကျင့်သီလကိုတပည့်တော်မ ဘုရားဟုကြောက်လှသောကြောင့် လိမ်လည်၍ မကြာမီ
ထိုသတင်းသည် ပျံ့နှံ့သွားလေရာ မူးကြီးမတ်ရာ
123 ဆရာတော် ဆရာတော်ကျောင်းသို့ ရောက်ရှိလာပါတော့ သည်။သို့နှင့်ဆရာတော်သည်ရောက်ရှိလာသောပရိသတ် များ၏ သံသယကိုဖြေဖျောက်နိုင်ရန်
ယခုအချိန်တင်ွငါ့အားသစ္စာမှတစ်
ပါး အခြားအားကိုးစရာဟူ၍မရှိတော့ပါဟုတွေးကာ`ငါ၏ သီလ ပျက်စီးခဲ့ပါမူ ဤဓမ္မသည် ချသောခဏတွင် ရေ၌ မြုပ်ပါစေသား’’ သီလစင်ကြယ်ပါမူ
အဓိဋ္ဌာန်ပြု၍ ဓားမကိုရေတွင်ချလိုက်၏။ ဓားမသည်လူစကားနား လည်သည့်ပမာ ရေပေါ်တွင် ပေါ်ကာ ငါးတစ်ကောင်ကဲ့သို့ ဆန် တက်ကာ ကူးခတ်သွားလေ၏။ မင်းကြီးနှင့်တကွ ပြည်သူပြည် သားများသည် ထိုမြင်ကငွ်းကိုမြင်ရ၍ ဆရာတော်၏ ကိုယ်ကျင့် တရားကို ပို၍ကြည်ညိုကြလေတော့၏။ ယခုအချိန်ထိ တောင်ဖီ လာတောရ
ဆရားတော်၏သစ္စာအစွမ်းထက်ပုံမှာ အံ့မခန်းရုံမျှမက မည်သည့် အရာနှင့်မျှလည်း တုနှိုင်း၍မမီနိုင်ပါချေ။ ဤသို့ဖြင့် တုနိုင်းမမီ သစ္စာအရသာ၏
ကောင်းလှပေသည်။ ထို့အတူ ဓမ္မအင်ပါယာကြီးတွင်လည်း မြတ်ဗုဒ္ဓထုတ် ဖေါ်တော်မူခဲ့သော တုနိုင်းမမီ ဓမ္မသစ္စာတရားများမှာ ယခုထက် တိုင်ထင်ရှားရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ ဓမ္မသစ္စာတရားများကို အမှန်တ ကယ်အသုံးပြုသူတိုင်း
သစ်လင်ွတောက်ပ နေသည့်အပြင် မည်သည့်အခါမျှ upcate လုပ်စရာမလိုပေ။ ကမ္ဘာအဆက်ဆက် မြတ်ဗုဒ္ဓ ဘုရားရှင်တို့၏ ကြိုးပမ်း တော်မူချက်ဖြင့် ပြန်လည် ဖော်ထုတ်တော်မူခြဲ့ ကသကဲ့သို့ ဤယ ခုအခါတွင်လည်း
124 ပြန်လည်ဖေါ်ထုတ်တော်မူခဲ့သောကြောင့် ဗြဟ္မာများစွာတို့သစ္စာဓမ္မကို သည်နှင့်အမျှ
သိခငွ့်ရနေကြပေသည်။
လောကမှထကွ်
မြောက်တော်မူခဲ့ကြသည့် သူတော်ကောင်းကြီးများ၏ အရေအ တွက်သည် တစ် နှစ် သုံး လေး ဂဏန်းရေးချက် မရေတွက်နိုင် တော့ပေ။ ထို့ကြောင့် လောကလူသားများအတွက် တကယ့် တုနိုင်းမမီ သစ္စာဓမ္မများ (သဘာဝအမှန်တရားများ) ဟုပြောလျှင် မှားမည်မထင်ပေ။ ထိုသဘာဝအမှန်တရားကား အရေအတွက် အားဖြင့်လေးမျိုးရှိပါသည်။ (၁) ဆင်းရဲခြင်းအမှန်တရား ထိုသစ္စာတရားကို သည့်
သဘာဝတရားများတွေ့မြက်ရန် လေ့လာရပါသည်။ ဤသည်ကို ပင်တရားအားထုတ်သည်ဟု
တရားရှုမှတ်မှု အချိန်ကာလ ကြာလာသောအခါ ရှုသိစရာ အာရုံ နှင့် ထိုအာရုံကို ရှုသိသောစိတ် ဤအရာနှစ်ခုမှတစ်ပါး မည်သည့် အရာကိုမျှ မတွေ့ရပေ။ သွားသည့်အခါတွင် သွားသည့်အာရုံနှင့် ထိုအာရုံအပေါ် သိစိတ် ၊ ထိုင်သည့်အခါတွင် ထိုင်သည့်အာရုံနှင့် ထိုင်သည့်စိတ်၊ ရပ်သည့်အခါတွင်လည်း ရပ်သည့်အာရုံနှင့် ရပ် သည့်စိတ်၊ လျောင်းသည့်အခါတွင်လည်း လျောင်းသည့်အာရုံနှင့် လျောင်းသည့်စိတ်၊ စားသည့်အခါတွင်လည်း စားသည့်အာရုံနှင့် စားသည့်စိတ်၊ မြင်သည့်အခါတွင် မြင်သည့်အာရုံနှင့် မြင်သည့် စိတ်၊ ကြားသည့်အခါတွင် ကြားသည့်အာရုံနှင့် ကြားသည့်စိတ် ဖြင့် မည်သည့်အချိန်မှာပင်ဖြစ်စေ ရှုသိစရာအာရုံနှင့် ထိုအာရုံအ ပေါ် ရှုသိစိတ် ဤနှစ်မျိုးမှလ၍ွဲ `ငါ သူတစ်ပါး ယောက်ျား မိန်းမ’
125 ဟူ၍မရှိပေ ဤတွင် ရှုသိစရာအာရုံကား ရုပ်တရားဖြစ်ပြီး ရှုသိစိတ်က နာမ်တရားဖြစ်ပါသည်။ ထိုရုပ်နာမ်တရားကိုပင် ဘ၀ ဟုခေါ်ကြပါသည်။ ထိုမှတဆင့် ရှုမှတ်မှုအား မြင့်တက်လာသော အခါ ရှုမှတ်နေသောယောဂီမှာ`အာရုံတည်းဟူသောအကြောင်း တရားကြောင့် ရှုသိစိတ်ဟူသည့် အကျိုးတရားဖြစ်ပေါ်လာရတာ ပဲ’ဟု ရုပ်နာမ်အကြောင်းအကျိုးကို ရှုသိဆတဲငွ် သိမြင်လာရပေ သည်။ (စဉ်းစားတွေးတော၍ သိသည့်သုတမယဥာဏ် မဟုတ် သည်ကို သတိပြု )။ ထိုမှတဆင့် ရှုမှတ်မှုစွမ်းရည်မြင့်မားလာသောအခါ ရုပ် နာမ်၏ မမြဲ၊ ဆင်းရဲ၊ အစိုးမရသည့် သဘော သိမြင်၍ ထိုမှတ ဆင့် ယောဂီသည် ရုပ်နာမ်တရားတို့၏ မပြတ် ဖြစ်ပျက်မှုကို သိ မြင်ရလေ၏။ ထိုသို့သိမြင်လေလေ ဘ၀၏ ဆင်းရဲအမှန်တရား ကိုသိမြင်လေလေဖြစ်ပေသည်။
သည် ရုပ်နာမ်တရားတို့၏ မပြတ် ဖြစ်ပျက်မှုပင်ဖြစ်ပေတော့ သည်။ ဘ၀ဆင်းရဲမှုကို များများသိမြင်လေလေ ဆင်းရဲခြင်းမှ လွတ်ဖို့ရာနီးလေလေ ဖြစ်ပါသည်။ ထိုကြောင့် တရားအားထုတ် သည့်အခါ ဆင်းရဲမှာ ကို ကြောက်စရာမလိုပေ။ ဘာကြောင့်ဆို လျှင် မိမိသွားရမည့် လမ်းသည် ဤဆင်းရဲသည့် လမ်းမှ ကျော် ဖြတ်ရမည်ဖြစ်သောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ ဆင်းရဲသည့် သဘာဝအမှန်တရားကို သိချင်သပ ဆို လျှင် တရားရှုမှတ်ခြင်းဖြင့် ဘ၀ကို ဓမ္မနှင့်အညီ သုတေသနပြုရ မည်ဟု သတိချပ်သင့်ပေသည်။ (၂) ဆင်းရဲကြောင်းအမှန်တရား ဆင်းရဲကြောင်းတရားဆိုသည်မှာ ဘ၀ခန္ဓာအသစ်ဖြစ် ပေါ်ကြောင်း
ကြောင်းဆင်းရဲကြောင်းအမှန်တရားမှာ တဏှာလောဘပင်ဖြစ်ပါ သည်။
အမှန်တရားဟုခေါ်ပါသည်။ (၃) ဆင်းရဲချုပ်ခြင်းအမှန်တရား ဆင်းရဲဖြစ်ကြောင်းတဏှာတရားကို
ခြင်းဖြင့် တဏှာချုပ်လျှင်ဆင်းရဲချုပ်ငြိမ်းသည်။ ဤသည်ကိုပင် နိယောဓ သစ္စာ ဆင်းရဲချုပ်ခြင်းအမှန်တရားဟုခေါ်ပါသည်။ (၄) ဆင်းရဲချုပ်ကြောင်းအမှန်တရား ထိုအမှန်တရားကို ဆင်းရဲချုပ်ကြောင်းဖြစ်သည့်ပုဗ္ဗဘာ ဂပဋိပဒါမဂ္ဂင်ဟုခေါ်ပါသည်။ ပုဗ္ဗဘာဂ- မဂ်၏ရှေးအဖို့၊ ပဋိပဒါကျင့်ရမည့်၊
ကျင့်တရားမှာ မဂ္ဂင်(၈)ပါးအကျင့်တရားဖြစ်ပါသည်။ ထိုမဂ္ဂင်(၈) ပါးအကျင့်တရားကို မည်သို့အသုံးပြုမည်နည်း။ အသုံးပြုပုံကား သတိပဋ္ဌာန်တရားကို လက်တွေ့ကျင့်သုံးခြင်းပင်ဖြစ်ပါသည်။ ဤ နေရာ၌အကျဉ်းချုံးကာနားလည်လောက်ရုံမျှ ဖေါ်ပြပေးပါမည်။ ယောဂီသည်
လျှင်ငါးပါး၊ ရှစ်ပါးသီလဆောက်တည်ရသကဲ့သို့ သာမဏေဆို လျှင်သာမဏေသီလ၊ ရဟန်းဆိုလျှင် ရဟန်းသီလလုံခြုံအောင် စောင့်ထိန်းကြရပါမည်။
သည် သီလမဂ္ဂင်မည်၏။ ယောဂီသည် ရှုမှတ်ရမည့်အာရုံ ထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာ သောအခါ ထိုအာရုံကို ရှုမှတ်နိုင်စေရန် ကြောင့်ကြစိုက်ပေးခြင်း သည်သမ္မာဝါယမ-မဂ္ဂင်မည်၏။
127 အာရုံပေါ်တိုင်းအမှတ်ရနေခြင်းသည်သမ္မာသတိမဂ္ဂင်မည်၏ အာရုံပေါ်တွင်ရှုသိစိတ်ကပ်၍တည်နေခြင်းသမ္မာသမာဓိမဂ္ဂင်မည် ၏။ ဤကားသမာဓိမဂ္ဂင်သုံးပါးဖြစ်ပါသည်။ တရားရှုမှတ်သောအခါ ရှုစိတ်ကိုအာရုံပေါ်သို့ ရောက် အောင်တင်ပေးရပါသည်။
ခေါ်၏။ အာရုံနှင့်ရှုသိစိတ် တွေ့ဆုံတိုင်းအမှန်အတိုင်းသိတာက သမ္မာဒိဋ္ဌိမဂ္ဂင်မည်၏။ အချုပ်ဆိုရသော်သတိပဋ္ဌာန်တရားပွါးများခြင်းသည်ပင် လျှင် မဂ္ဂင်ရှစ်ပါးအကျင့်တရားဖြစ်၍ ထိုအကျင့်တရားများကိုကျင့် သုံးခြင်းဖြင့် သဘာဝအမှန်တရားအား အဆင့်ဆင့်သိမြင်ပြီး မဂ် ဖိုလ်ကိုမျက်မှောက်ပြုကာလောကအဆုံး(ဆင်းရဲအဆုံး) ရောက် ကြရသောကြောင့်
တရားသည် သစ္စာတရားမှန်သမျှတို့တွင် တုနိုင်းမမီသောသစ္စာ တရားဖြစ်ကြောင်းတင်ပြရေးသားလိုက်ရပါတော့သတည်း။
129 တုနှိုင်းမမီ(၉) အံ့ဖယ်ွသာသနာ မြတ်ဗုဒ္ဓသည်
တွင် လူတို့၏အဇ္ဈာသယနှင့်လျော်ညီစွာ လူ၊ နတ်၊ ဗြဟ္မာများနား လည် သဘောပေါက်စေရန် မြင်းသမားလာလျှင် မြင်း ဥပမာ၊ နွား သမားလာလျှင် နွားဥပမာ၊ တံငါသည်လာလျှင်တံငါ ဥပမာ၊ ဇနီး မောင်နှံနှင့်ပတ်သက်လာလျှင် အိမ်ထောင်ရေး ဥပမာ-စသည်ဖြင့် ဓမ္မနှင့်လျော်ညီစွာ အမျိုးမျိုး အဖုံဖုံဖြင့် ဓမ္မရေးရာများကို ကျွမ်း ကျင်ပြောင်မြောက်စွာ
ပတ်သက်လာလျှင် အကျိုးရှိမည်ဆိုပါက လူနတ်ဗြဟ္မာ မည်သူ ပင်ဖြစ်စေ၊ သားတော်ရာဟုလာပမာကဲ့သို့မခြား၊ စိတ်တော်ထား ကာ ဟောကြားဆုံးမ ချေချွတ်တော်မူခဲ့ပါသည်။ ထိုသို့ မြတ်ဗုဒ္ဓ ဆုံးမတော်မူချက်များကိုပင်လျှင်`သာ သနာ’ဟု ခေါ်တွင်ကြပေသည်။ ထိုသာသနာကို လိုက်နာကျင့် သုံးသူ လူနတ်ဗြဟ္မာများသည်၊ အိုနာသေ ဘေးဆိုးကြီး များမှ လွတ်မြောက်နိုင်သည့်အပြင်
ဘဒ္ဒကမ္ဘာတွင်လည်း လွန်ခဲ့သည့်နှစ်ပေါင်း(၂၅၀၀)က ပွင့်တော်မူ ခဲ့သည့် ဂေါတမမြတ်စွာ ဘုရားလက်ထက်တော်တွင် အိုနာသေ ဘေးက
မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ပိဋကတ်တော်မှတ်တမ်းအရ အရေအတွက်များလှပါ ပြီ။ မြတ်ဗုဒ္ဓ အဆုံးအမကို လိုက်နာကျင့်သုံးသူများသည် ယခု လည်း ထိုဘေးဆိုးကြီးများမှ လွတ်မြောက်ဆ၊ဲ နောင်လည်းလွတ် မြောက်ကြဦးမည်မှာ
130 ဖြစ်သည့်သာသနာတော်ကြီးကိုယှဉ်နိုင်သည်(တုနှိုင်မီ သည်)ဟူ၍မရှိခဲ့ဖူးသကဲ့သို့ယခုလည်းရှိမည်မဟုတ်နောင်လည်း ရှိမည်မဟုတ်ပါချေ၊။ ထိုသာသနာတော်နှင့်ပတ်သက်၍ မြတ်ဗုဒ္ဓလက်ထက် တော်အခါက အဖြစ်အပျက်တစ်ခုရှိခဲ့ဖူးပါသည်။ အခါတစ်ပါး၌ မြတ်စွာ ဘုရားသည် နဠေရု အမည်ရှိသည့် တမာပင်ရင်းတွငသ်ီ တင်းသုံးနေတော်မူစဉ် မဟာရာဒ အသူရာက ``အရှင်ဘုရား အ ရှင်ဘုရားရဲ့ သာသနာတော်အတွင်းမှာ အရှင်ဘုရားရဲ့တပည့် သာဝကတွေဟာ
ဘုရား’’ဟုမေးလျှောက်ပါသည်။ ထိုအခါ မြတ်စွာ ဘုရားက`မဟာ ရာဒ’-အံ့ဖယွ်(၈)ပါးနှင့်ပြည့်နှက်နေသည့် မဟာ သမုဒ္ဒရာကြီးမှာ သင့်ရဲ့အသူရာများပျော်မွေ့နိုင်ကြသလို အံ့ဖယွ်(၈)ပါးနှင့် ပြည့်စုံ နေတဲ့ ငါဘုရားရဲ့သာသနာတော်မှာ တပည့်သာဝကတွေဟာ ပျော်မွေ့နေနိုင်ကြပေတယ်’’ ဟု မိန့်တော်မူကာ ထိုအကြောင်း ကို အင်္ဂုတ္တရနိကာယ်အဋ္ဌကနိပါတ် တွင် မြတ်စွာဘုရားဟော ကြားတော်မူခဲ့ပါသည်။ အံ့ဖယွ်(၈) ဖြာ မဟာသမုဒ္ဒရာအစဉ်နက်ဝှမ်း၁။ မဟာသမုဒ္ဒရာကြီးသည်ကမ်းပါးအစပ်ကစပြီးအစဉ် အတ်ိုင်း တစ်လက်မ နှစ်လက်မ တစ်ပေ နှစ်ပေ၊ တစ်ကိုက် နှစ် ကိုက်၊ တစ်မိုင် နှစ်မိုင် စသည် အစဉ်အတိုင်း နက်ရှိုင်း နက်ရှိုင်း လာပါသည်။
အလယ် ဗဟိုချက်မ (centre) နေရာတွင် သမုဒ္ဒရာရေပြင်ပေါ်မှ သမုဒ္ဒရာအောက်ကြမ်းပြင်အထိ ၈၄၀၀၀
131 တစ်ယူဇနာ(၁၄) တွင်တစ်ယူ
ဇနာ(၈)မိုင်ဝန်းကျင်ဟုဆိုသဖြင့် နက်ရှိုင်းမှုရှိသည်ဟု တဖြည်းဖြည်းနက်ရှိုင်း
သည်ပင်လျှင် မဟာသမုဒ္ဒရာကြီး၏ ပထမ အံ့ဖွယ်တစ်ပါးဖြစ်ပါ သည်။ ကမ်းကိုမလွန် ၂။ ဒုတိယအံ့ဖွယ်ကား မဟာသမုဒ္ဒရာရေသည် မည် သည့်အခါမျှ ကမ်းစပ်ကိုကျော်လန်ွခြင်းမရှိပေ။ ရွံဖယ်ွဆယ်ပစ် ၃။ မဟာသမုဒ္ဒရာကြီးတွင် ခွေးသေကောင်ပုပ်၊ မြင်း သေကောင်ပုပ်၊ ဆင်သေကောင်ပုပ်၊ လူသေကောင်ပုပ် စသည့် အညစ်အကြေးများသည် မဟာသမုဒ္ဒရာအလယ်သို့ ရောက်နေ မည်ဆိုလျှင် လှိုင်းလုံးကြီးများက ပုတ်ခတ်သည့်အတွက်ကြောင့် ထိုအညစ်အကြေးများ ကမ်းစပ်သို့ရောက်ရှိသွားရပါသည်။ မည် သည့်အညစ်အကြေးပင်ဖြစ်စေ မဟာသမုဒ္ဒရာရေပြင်တွင်မရှိနိုင် ပေ။ ထိုကဲ့သို့အညစ်အကြေးများသည် မဟာသမုဒ္ဒရာထဲရောက် လျှင်
ရှည်ရပ်တည်နေနိုင်စွမ်းမရှိဘဲ ကမ်းစပ်သို့ ရောက်ကြရသည်။ ဤသည်ပင်လျှင် မဟာသမုဒ္ဒရာ၏ တတိယ မြောက်အံ့ဖယ်ွတစ် ပါးဖြစ်ပါသည်။ တစ်မည်ဖြစ်ခြင်း ၄။ မြစ်ချောင်းများစွာမှ စီးဆင်းလာသော ရေများသည် နောက်ဆုံးမဟာသမုဒ္ဒရာထဲသို့သာ ရောက်ရှိကြပါသည်။ ထိုသို့ ရောက်ရှိသောအခါ ဤရေက ဧရာဝတီမြစ်ရေ၊ သံလွင်မြစ်ရေ၊
132 စစ်တောင်းမြစ်ရေ၊ ခေါ်ဝေါ်၍
ဖွယ်တစ်ပါးပင်ဖြစ်ပါသည်။ မယွင်းမတိုး ၅။
ရွာသွန်းမှုကြောင့်ဖြစ်စေ၊ မြစ်ချောင်းအင်းအိုင်များမှ အဆက်မ ပြတ်စီးဆင်းနေ၍ဖြစ်စေ
ဟူ၍မရှိခဲ့ပေ။ ထို့အပြင် မိုးခေါင်၍ဖြစ်စေ၊ မိုးခေါင်သောကြောင့် မြစ်ချောင်းအင်းအိုင်များမှ ရေမစီးဆင်းနိုင်၍လည်းမဟာသမုဒ္ဒရာ များသည် မည်သည့်အခါမျှ လျော့သွားခြင်းမရှိပေ။ ဤကဲ့သို့ ရေများ တိုးခြင်း၊ လျော့ခြင်း ၊ မရှိခြင်းသည်ပင်လျှင်မဟာသမုဒ္ဒ ရာ၏ ပဉ္စမမြောက်အံ့ဖယ်ွတစ်ပါးဖြစ်ပါသည်။ ဆယ်မျိုးရတနာ ၆။ ဆဋ္ဌမမြောက် အံ့ဖယ်ွကား မဟာသမုဒ္ဒရာကြီး၏ နက်ရှိုင်းသော နေရာများတွင် ရွှေ၊ ငွေ၊ စိန်၊ကြောင်၊ ပုလ။ဲ သန္တာ၊ နီလာ၊ ဂေါ်မုတ်၊ မြ၊ ပတ္တမြား။ ဥဿဖရား ဟူသည့်ရတနာဆယ် ပါးအမြောက်အမြားရှိပါသည်။ ရသာဆားတူး ၇။
မဟာသမုဒ္ဒရာ၏ သတ္တမမြောက် အံ့ဖယ်ွတစ်ပါးဖြစ်ပါသည်။ ကြီးသူနေရာ ၈။ မဟာသမုဒ္ဒရာထဲတွင် အလွန်ကြီးမားသောငါးကြီး များသာ နေထိုင်ကြပေသည်။ ငါးကြီးနှင့်ပတ်သက်၍ မဟာသမုဒ္ဒ ရာထဲ နေထိုင်သော ငါးကြီးများမှာ (၆)စင်းရှိသည်ဟု စာပေက ဖေါ်ပြသည့်အတွက် ဗဟုသုတအလို့်ငှာ ဖေါ်ပြပေးလိုက်ပါသည်။ (၁)တိမိရ အမည်ရှိငါးကြီးဖြစ်ပြီး၊ထိုငါး၏အမည်မှာ ယူဇနာတစ် ထောင်၊ မိုင် ၈၀၀၀ ရှည်လျားသည်။ (၂) တိပိင်္ဂလ အမည်ရှိ ငါး ကြီးသည်လည်း တိမိရ ငါးကဲ့သို့ပင်အလျားတူညီကြသည်။ (၃) တိမိရ တိပိင်္ဂလအမည်ရှိ ငါးကြီးသည်လည်း အထက်ပါ ငါးကြီး များနှင့် အလျားတူညီကြပေသည်၊ (၄) အာနန္ဒာအမည်ရှိ ငါးကြီး သည် အလျားယူဇနာမိုင်(၄၀၀၀)ရှည်လျားပါသည်။ (၅) တိမိအာ နန္ဒ အမည်ရှိ ငါးကြီး၏ အလျားမှာလည်းထို့အတူ မိုင်(၄၀၀၀) ရှည်လျားသည်။ (၆) အဇ္ဇောရဟအမည်ရှိ ငါးံကြီး၏ အလျားမှာ လည်းထို့အတူ ရှည်လျားပါသည်။ ဤကားမဟာသမုဒ္ဒရာထဲတငွ် နေထိုင်ကြသည့် ငါးကြီး(၆)စင်းဖြစ်ပါသည်။ ထို့အပြင် အသူရာ နဂါး၊ ဂန္ဓဗ္ဗနတ် ဆိုတာတွေလည်း ရှိကြပေသေးသည်။ ဤကဲ့သို့ ကြီးသူတို့၏
အဋ္ဌမမြောက် အံ့ဖယ်ွတစ်ပါးဖြစ်ပါသည်။ ဤကား မဟာသမုဒ္ဒရာ ၏ အံ့ဖယွ်(၈)ပါး ဖြစ်ပါပေတော့သည်။ ထိုအကြောင်းကို မှတ်မိလယ်ွစေရန် ဆောင်ပုဒ်လေး ဖြင့် အကျဉ်းမှတ်ထားနိုင်ရန် ဖော်ပြပေးလိုက်ပါသည်။
134 ဆောင်ပုဒ် အစဉ်နက်ဝှမ်း၊ ကမ်းကိုမလွန်၊ ရွံဖယ်ွဆယ်ပစ်၊ တစ်မည်ဖြစ်ခြင်း မယွင်းမတိုး၊ ဆယ်မျိုးရတနာ၊ ရသာဆားတူး၊ ကြီးသူနေရာ အံ့ရှစ်ဖြာ မှတ်ပါ သမုဒ္ဒရာ (မှတ်ပါသာသနာ)။ သာသနာ အံ့ဖယွ်(၈)ပါး ၁။
လည်း တဖြည်းတဖြည်း နက်ရှိုင်းသွားပါသည်။ ငါးပါးသီလထက် ရှစ်ပါးသီလက နက်ရှိုင်းပါသည်။ ရှစ်ပါးသီလထက် ဆယ်ပါးသီလ က ပို၍ နက်ရှိုင်းပါသည်။ ဆယ်ပါးသီလထက် သာမဏေသီလ က ပို၍နက်ရှိုင်းပါသည်။ သာမဏေသီလထက် ရဟန်းသီလက ပို၍ပို၍ နက်ရှိုင်းပါသည်။ ထို့အတူ တစ်ရက်စောင့်ထိန်းသည့် သီလကုသိုလ်ထက် နှစ်ရက်စောင့်ထိန်းသည့် သီလကုသိုလ်က သာလွန်နက်နသဲကဲ့သို့ တစ်လစောင့်ထိန်းသည့် သီလကုသိုလ် ထက် တစ်နှစ်ပတ်လုံး စောင့်ထိန်းသည့် သီလကုသိုလ်က ပို၍ လေးနက်ပေသည်။ ထိုသီလအကျင့်ကနေ ဓူတင်အကျင့် စသည့် တဖြည်းတဖြည်း နက်ရှိုင်းသည်ထက် နက်ရှိုင်းသွားပါသည်။ သီလအခြေခံ၍ အားထုတ်သည့်အတွက် သီလကုသိုလ်ထက်
ထိုမှတစ်ဆင့် သမထအားကောင်းလျှင် ပထမဈာန်ကနေ ဒုတိယ ဈာန်၊
နက်ရှိုင်းသထက် နက်ရှိုင်းလာခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ၀ိပဿနာတရားအားထုတ်နေသည့် ယောဂီများသည် သတိပဋ္ဌာန်တရားကို တစ်ချက်ရှုမှတ်လျှင်
ရှုမှတ်လျှင် ကုသိုလ်ဆယ်ချက်၊ ရှုမှတ်မှု တစ်ရာလျှင် ကုသိုလ် တစ်ရာရခြင်းသည်ပင်
သဘောပင်ဖြစ်သည်။ ဤသို့ဖြင့် ယောဂီ၏ရှုမှတ်မှုအားလျော်စွာ စိတ်တည်ငြိမ်မှု
ရင့်ကျက်လာလျှင် မဂ်ဉာဏ် ဖိုလ်ဉာဏ်တိုင်ရောက်ရှိကာ နိဗ္ဗာန် ကို မျက်မှောက်ပြုနိုင်ပေသည်။ ဤသည်ပင်လျှင် သီလကနေ သမာဓိ၊ သမာဓိ ကနေ ပညာ၊ ပညာကနေ ၀ိမုတ္တိသေ ဆိုသည့် လွတ်မြောက်မှု
နက်ရှိုင်းသထက် နက်ရှိုင်း၍လာပါသည်။ ထိုကဲ့သို့ ကုသိုလ်တရားများ တဖြည်းဖြည်း နက်ရိငှုး လာခြင်းသည်ပင်လျှင် သာသနာတော်၏ ပထမအံ့ဖယ်ွတစ်ပါး ဖြစ်ပါသည်။ ၂။ သမုဒ္ဒရာရေသည် ကမ်းစပ်ကနေ လွန်ခြင်း (ကျော် တက်ခြင်း) မရှိသကဲ့သို့ တပည့်သာဝကများသည် မြတ်ဘုရား ပညတ်တော်မူခဲ့သည့်
လွန်၍ မကျင့်ကြပေ။ မြတ်ဘုရား၏ တပည့်သာဝကများဖြစ်တော် မူကြသော
အသက်ဟူသော အကြောင်းကြောင့် ပညတ်တော်မူထားသည့် သိက္ခာပုဒ်ကို မည်သည့်အခါမျှ မကျူးလွန်ကြပေ။ ၀ိနည်းတော်
အသက်နှင့်လဲပြီး သိက္ခာပုဒ်တော်ဆိုသည့် စည်းကမ်းဘောင်ကို မလွန်ဘဲ စောင့်ထိန်းတော်မူကြပေသည်။ ထိုကဲ့သို့
ခြင်းသည်ပင်လျှင် ဒုတိယမြောက်သာသနာတော်၏ အံ့ဖွယ်တစ် ပါးဖြစ်ပါသည်။ ၃။ သမုဒ္ဒရာရေအလယ်တွင် အညစ်အကြေးမှန်သမျှ ကို လှိုင်းလုံးကြီးများက ရိုက်ပုတ်ထုတ်သကဲ့သို့ ခွေးသေကောင် ပုပ်နှင့်တူသည့် ဒုဿီလ (သီလမရှိ) ပုဂ္ဂိုလ်များကိုလည်း သီလရှိ သည့်
သာသနာတော်တငွ်
သော အညစ်အကြေးများသည် မည်သည့်အခါမျှ မရှိပေ။ ထိုကဲ့သို့ အညစ်အကြေးနှင့်တူသည့် သီလမရှိသည့် ပုဂ္ဂိုလ်များ သာသနာတော်တငွ် မရှိခြင်းသည်လည်း သာသနာ တော်၏ တတိယမြောက် အံ့ဖွယ်တစ်ပါးဖြစ်ပါသည်။ ၄။ များစွာသော မြစ်ချောင်းများက စီးဆင်းလာသော ရေပင်ဖြစ်သော်လည်း သမုဒ္ဒရာထဲသို့ရောက်လျှင် သမုဒ္ဒရာရေ ဟု အမည်တစ်မျိုးသာရသကဲ့သို့ မင်း၊ ပုဏ္ဏား၊ သူဌေး၊ သူကြွယ်၊ ဆင်းရဲသား၊
၀င်ရောက်၍ ရဟန်းပြုကြသောအခါ မည်သူသည် မင်းရဟန်း၊ ပုဏ္ဏားရဟန်း၊
“သာကီဝင်မင်းသား ဘုရားသားတော်” ဟူသည့် အမည်တစ်မျိုး သာ ဖြစ်သွားကြရပေသည်။
137 ထိုကြောင့် မည်သည့်အမျိုးပင်ဖြစ်စေ သာသနာ တော်အတွင်းရောက်လျှင်
သည်ပင်လျှင် သာသနာတော်၏ စတုတ္ထမြောက် အံ့ဖယ်ွတစ်ပါး ဖြစ်ပါသည်။ ၅။ သမုဒ္ဒရာရေသည် မြစ်ချောင်းများက အဆမတန် စီးဆင်း၍လည်း မည်သည့်အခါမျှ မတိုးလာသည့်အပြင် မိုးခေါင် ၍လည်း မည်သည့်အခါမျှ လျော့သွး ခြင်းမရှိသကဲ့သို့ သာသနာ တော်ကြီးသည်လည်း အငြိမ်းဓာတ်ကို
သည် မည်သည့်အခါမျှ ပြည့်လျှံသွားခြင်းမရှိ၊ လျော့သွားခြင်း (ကွက်လပ်ဖြစ်နေခြင်း) မရှိခဲ့ပေ။ ဤသည်ပင်လျှင်
အံ့ဖယ်ွတစ်ပါးဖြစ်ပါသည်။ ၆။
ရတနာ၊ ဓမ္မရတနာ၊ သံဃာ့ရတနာ စသည့် ရတနာများရှိပေ သည်။ သမုဒ္ဒရာအတွင်းရှိ ရတနာများမှာ မည်မျှများပြားစေကာမူ တန်ဖိုးဖြတ်နိုင်ပါသော်လည်း
မြတ်သုံးပါးမှာမူကား တန်ဖိုးဖြတ်၍ မရနိုင်လောက်အောင် တန်ဖိုး ကြီးမားလှပေသည်။ ထိုရတနာမြတ်သုံးပါးအနက် ဂုဏ်တော်ကိုး ပါးနှင့် ပြည့်စုံတော်မူသော ဘုရားရတနာကား တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင် သည့်အတွက် အထူးဆိုဖယ်ွရာ မရှိတော့ပေ။ ဓမ္မရတနာ၌ပင် လျှင် သတိပဋ္ဌာန်လေးပါး၊ သမ္မပ္ပဓာန်လေးပါး၊ ဣဒ္ဓိပါဒ်လေးပါး၊ ဗောဇ္ဈင်ခုနစ်ပါး၊ ဗိုလ်ငါးပါး၊ မဂ္ဂင်ရှစ်ပါး စသည့် ရတနာတွေ
ပရမတ္ထသံဃာ ဖြစ်သည့် သောတာပန်၊ သကဒါဂါမ်၊ အနာဂါမ်၊ ရဟန္တာစသည့် ရတနာများလည်း ရှိနေပေသည်။ ထိုကဲ့သို့ သည့်
ဆဋ္ဌမမြောက် အံ့ဖယ်ွတစ်ပါး ဖြစ်ပါသည်။ ၇။ သမုဒ္ဒရာရေ၏ ထုထည်ပမာဏသည် မည်မျှများ ပြားစေကာမူ ထိုရေ၏အရသာကား ငန်သောအရသာ တစ်မျိုး သာရှိသကဲ့သို့ မြတ်ဘုရား၏သာသနာတော်တင်ွလည်း ပိဋကတ် သုံးပုံ နိကာယ်ငါးရပ် ဓမ္မက္ခန္ဓာပေါင်း ရှစ်သောင်းလေးထောင် စသည့် မည်မျှများပြားစေကာမူ ၀ိမုတ္တိအရသာ တစ်မျိုးသာရှိပေ သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ သာသနာတော်အတွင်း ဓမ္မသည် အရေ အတွက်များပြားလှသော်လည်း အရသာကား ၀ိမုတ္တိရသဆိုသည့် လွတ်မြောက်မှုအရသာတစ်ခုတည်းပင် ဖြစ်ပါသည်။ ထိုအကြောင်းနှင့်စပ်၍ ယခုခေတ်တငွ် မဟာစည်နည်း၊ မိုးကုတ်နည်း၊ စွန်းလွန်းနည်း၊ လယ်တီနည်း၊ အနာဂါမ်ဆရာ သက်ကြီးနည်း၊ သဲအင်းဂူနည်း၊ ပခုက္ကူနည်း စသည့် နည်းပေါင်း များစွာရှိကြပါသော်လည်း
ချက်ကား နိဗ္ဗာန်ဟူသည့် ၀ိမုတ္တိရသာပင် ဖြစ်ကြပေသည်။ နိဗ္ဗာန် ဦးတည်ချက်ရှိသည်ကား မှန်သော်လည်း နည်းလမ်းမှန်ကန်မှုမရှိ လျှင် ထိုနည်းလမ်းသည် မှားသောအကျင့်လမ်းသာလျှင် ဖြစ်ချေ မည်။ ထိုထိုနည်းနာနိဿယများကို လူတို့အတွက် အမှားအမှန် ခြွဲ ခားသိစေရန် မည်သည့်ပေတံဖြင့်တိုင်းထွာ ဆုံးဖြတ်မည်နည်း။ ဥပမာ Computer များတွင် Software, Program များဖြင့် ပြဿနာမျိုးစုံကို ဖြေရှင်းကြရသကဲ့သို့ ယခု ခေတ်ပေါ်
အမှားများကို “သတိပဋ္ဌာန်” ဆိုသည့် Dhamma Software ဖြင့် ဖြေရှင်းနိုင်ပေသည်။ မည်သည့်နည်းပင်ဖြစ်စေကာမူ သတိပဋ္ဌာန် ထဲ အကျုံးမ၀င်လျှင် (သတိပဋ္ဌာန်မပါလျှင်) ထိုနည်းမှာ မှားသည် ဟုဆိုရပေမည်။ အဘယ့်ကြောင့်နည်းဟူမူ သတိပဋ္ဌာန်ပါဠိတော် နိဒါန်းတွင်
တစ်ကြောင်းတည်းသော လမ်းမှာ သတိပဋ္ဌာန်လေးပါးဖြစ်သည် ဟု ဆိုထားသောကြောင့် မည်သည့်နည်းပင်ဖြစ်စေ အမှန်အမှား ပြဿနာကို သတိပဋ္ဌာန်ဆိုသည့် အမှန်တရားပေတံဖြင့် တိုင်း ထွာနိုင်ပါသည်။ ထိုကြောင့် သတိပဋ္ဌာန်တရားလေးပါးကို အခြေ တည်ထားသော တရားနည်းလမ်းမှန်သမျှသည် နိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင် သည်ချည်းဟု မှတ်ယူရပေမည်။ ထိုသို့ သိနိုင်စေရန် စာရှုသူများ သတိပဋ္ဌာန်လေးပါးကို အရေးတကြီး လေ့လာသင်ကြားဖို့ တိုက်တနွ်းလိုပါသည်။ အချုပ် ဆိုရသော် မြတ်ဗုဒ္ဓဟောကြားတော်မူသည့် တရားများစွာရှိသော် လည်း ထိုတရားများ၏ ပန်းတိုင်မှာ ၀ိမုတ္တအရသာတစ်ခုတည်း သာရှိခြင်းသည်ပင်လျှင်
အံ့ဖယ်ွတစ်ပါးပင် ဖြစ်ပါသည်။ ၈။ သမုဒ္ဒရာထဲတွင် အလွန်ကြီးသော ငါးများနေထိုင် သကဲ့သို့
သကဒါဂါမ်၊ အနာဂါမ်၊ ရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဟူသည် အကြီးဆုံးငါးပင် ဖြစ်သည်။ ထိုကဲ့သို့ အရိယာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများသာ နေထိုင်နိုင်ခြင်း သည်ပင်လျှင်
အံ့ဖယွတ်စ်ပါးပင်ဖြစ်ပါသည်။
140 မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ဂုဏ်ပေါင်း
အံ့ဖယ်ွမျိုးစုံ
ဖြစ်စေကာမူ မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ အဆုံးအမကို ယှဉ်နိုင်သည့် အဆုံးအမ ဟူ၍
မဟုတ်သောကြောင့် တုနှိုင်းမမီ သာသနာတော်ကြီးဟု သာသနာ တော်ကို
142 တုနှိုင်းမမီ (၁၀) နှစ်ပေါင်း(၂၅၀၀)ကျော်က ဗိုင်းရပ်စ်ဆော့ဖ်ဝဲ ကွန်ပျူတာ အသုံးပြုသူများအနေနှင့် မိမိ၏ကွန်ပျူတာ ရှိ program များ၊ file, folder များကို virus က ဖျက်ဆီးပစ် သောကြောင့် အပျက်စီးအဆုံးအရှုံးများနှင့် ရင်ဆိုင်ကြရပါသည်။ ထို့ကြောင့် ကွန်ပျူတာအသုံးပြုသူများ စိတ်အနှောင့်ယှက် ဖြစ် ကြရသည်။ ၁၉၈၂ ခုနှစ်ကတည်းက virus (ဗိုင်း ရပ်စ်) အမျိုးမျိုး ပေါ်ပေါက်ခဲ့ရာ၊ ယခု ၂၀၀၇ခုနှစ်ဆိုလျှင် (၂၅)နှစ်ပြည့်ပြီဖြစ် သောကြောင့် ဗိုင်းရပ်စ် ငွေရတု (First Generation) တစ်ခုသို့ တိုင်ခဲ့လေပြီ။ (က) ယနေ့အခါတွင် computer, system များကို ဖျက်ဆီး ပစ်နေသော Elk Cloner, Brain, Morris, Meliss, Love bug, Code Red, Blaster, Sasser စသည့် ဗိုင်းရပ်စ်အမျိုးမျိုးပေါ် ပေါက်ခဲ့ပါသည်။ ထို virus (ဗိုင်းရပ်စ်)များ၏ နှောင့်ယှက်ဖျက် ဆီးခြင်းမှ ကာကွယ်နိုင်ရန်အတွက် (AVG, Avast, Antivirus, Kaspersky
ရေးသားတီထင်ွနိုင်ခ့ပဲါသည်။ ထိုဆော့ဖ်ဝဲများကိုလည်း ဖြစ်နိုင် လျှင် ပို၍ကောင်းပါသည်။ အကယ်၍ ထို ဆော့ဖ်ဝကဲို Update မလုပ်ထားပါက
ထို့ကြောင့် ဗိုင်းရပ်စ်ကိုသတ်နိုင်ရန် ဆော့ဖ်ဝကဲို မကြာခဏဆို သလို Update လုပ်ပေးရပါသည်။ (ခ) ထိုကဲ့သို့ပင် လူတို့၏ ခန္ဓာကိုယ်၌ ဗိုင်းရပ်စ်ပိုး ကူးစက် ခံရပြီဆိုလျှင်
143 ဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ခံရခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော ရောဂါ များအား ဆိုင်ရာပဋိဇီဝဆေးများကို မှီဝသဲုံးစြွဲ ခင်းဖြင့် ပျောက် ကင်းရပါသည်။ အကယ်၍ သတ်မှတ်ထားသောရက်ထက် ပိုလွန် ၍ Update မဖြစ်သော ပဋိဇီဝဆေးများကို သုံးစွဲမိပါက ရောဂါ မပျောက်သည့်အပြင် အဆိပ်ဖြစ်ပြီး အသက်ပါ ဆုံးရှုံးနိုင်ပါသည်။ ထိုသို့မဖြစ်စေရန် သတ်မှတ်ထားသော ရက်မွန် ပဋိဇီဝဆေးများ ကို ဆရာဝန်များ၏ လမ်းညွှန်မှုအရ မှီဝမဲည်ဆိုပါက ဆိုင်ရာဗိုင်း ရပ်စ်ပိုးများကင်းရှင်းပြီး ခံစားနေရသည့် ရောဂါများမှ ကင်းစင် သွားနိုင်ပါသည်။ သို့သော်လည်း HIV virus (ဗိုင်းရပ်စ်)များ ကူးစက်ခံရပြီဆိုပါက ထိုဗိုင်းရပ်စ်ကို သတ်နိုင်ေသာ ဆေးမပေါ် ပေါက်သေးသောကြောင့် “ကုရာနတ္ထိ ဆေးမရှိ” ဆိုသည့်အတိုင်း မကြာမီ
ယနေ့ခေတ်တငွ်
သုတေသနပညာရှင်များသည် ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိ ကူးစက်တတ် သော virus (ဗိုင်းရပ်စ်)ပိုးမျိုးစုံကို ရှာဖွေတွေ့ရှိကြပါသော်လည်း စိတ်ခန္ဓာအတွင်း၌ ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးရှိနေသည်ကို သုတေသနပညာရှင် များ မသိကြသေးပေ။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုလျှင် စိတ်ထဲ၌ရှိသော ဗိုင်းရပ်စ်ကို ရှာဖွေရမှန်း မသိခြင်း၊ ရှာဖွေတွေ့ရှိရန် လက်တွေ့ သုတေသနမပြုလုပ်ခြင်းတို့ကြောင့်
ဖော်ထုတ်နိုင်စမွ်းမရှိကြခြင်း ဖြစ်လေသည်။ (ဂ) ယနေ့အချိန် စိတ်ခန္ဓာအတွင်း ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကို ရှာဖွေ မတွေ့ရှိကြသော်လည်း
လွနခ်ဲ့သောနှစ်ပေါင်း
အချိန်က စိတ်၌ဖြစ်သည့် ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးမျိုးစုံကို တွေ့ရှိခဲ့သည်သာမ က ထိုပိုးများအား ပယ်သတ်သောနည်းကို တွေ့ရှိခဲ့သော သုတေ သနပညာရှင်ကြီးတစ်ဦး
144 သုတေသနပညာရှင်ကြီးပေတည်း။ ထို မြတ်ဗုဒ္ဓသုတေသန ပညာရှင်ကြီးသည် ခန္ဓာဗေဒပိုင်းဆိုင်ရာ၌ ကျွမ်းကျင်ရုံသာမက စိတ္တဗေဒ၌လည်း
ဗိုင်းရပ်စ်ကို ရှာဖွေတွေ့ရှိတော်မူခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဆက်ဦးအံ့ …. စိတ်၌ကူးစက်တတ်သည့် ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးအမျိုးမျိုးရှိသည့် အနက် စိတ်ထ၌ဲကုသိုလ်တရားများ မဖြစ်အောင် လိုက်လံနှောင့် ယှက်နေသော ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကို ဖော်ပြလိုပါသည်။ ထိုပိုး၏အမည် ကို “နီဝရဏ” ဗိုင်းရပ်စ်ဟု မြတ်ဗုဒ္ဓသုတေသန ပညာရှင်ကြီးက နာမည်ပေးတော်မူခဲ့ပါသည်။ ထိုနီဝရဏဗိုင်းရပ်စ် အမျိုးအစား ငါးမျိုးခွဲခြားထားပါသည်။ ၄င်းတို့မှာ (၁) ကာမစ္ဆန္ဒနီဝရဏ (၂) ဗျာပါဒနီဝရဏ (၃) ထိနမိဒ္ဓနီဝရဏ (၄) ဥဒ္ဓစ္စ၊ ကုက္ကုစ္စ နီဝရဏ (၅) ၀ိစိကိစ္ဆာ နီဝရဏ ဟူ၍ ဖြစ်ပါသည်။ ဤနေရာ၌ စိတ်ကို တိုက်ခိုက်သော ဗိုင်းရပ်စ်များ၏ အဓိပ္ပာယ်ကို ရှင်းလင်းပါဦးမည်။ ကာမစန္ဆ္ဒ နီဝရဏ ထိုဗိုင်းရပ်စ်ကား နှစ်သက်လိုချင်ခြင်းသဘောရှိသည်။ နှစ်သက်လိုချင်ဖွယ်ရာ အာရုံများနှင့်တွေ့ရလျှင် စိတ်၌ ကာမ ဆန္ဒ နီဝရဏ ဗိုင်းရပ်များ ကူးစက်ဖြစ်ပေါ်လာတတ်ပါသည်။ ထိုအခါ
ဖြူစင်မှု၊ အပြစ်ကင်းမှု မရှိတော့ပေ။ နှစသ်က်လိုချင်ခြင်းသည်။ အကြွေးတင်သည်နှင့်တူသည်ဟု
နှစ်သက်လိုချင် သောစိတ်များဖြစ်ပေါ်လာလျှင် ထိုစိတ်ကို သတိ ပဋ္ဌာန်နည်းနှင့် ပယ်သတ်ခြင်းဖြင့် ဖြူစင်အောင် ပြုလုပ်ရပါသည်။ (နှစ်သက်လိုချင်၊ ကြွေးမြည်တင်၊ လျှင်လျှင် ပယ်ဖျောက်လေ)။ ဗျာပါဒနီဝရဏ ဗျာပါဒနီဝရဏ ဗိုင်းရပ်စ်သည် အလိုမကျ၊ စိတ်ဆိုး၊ ဒေါသထွက်၊ အငြိုးမပြေ၊ တေးမှတ်ခြင်း စသော သဘောရှိသည်။ မနှစ်မြို့ဖွယ် အာရုံများနှင့်တွေ့လျှင် စိတ်သည် စိတ်ဆိုးခြင်း၊ စိတ်ညစ်ခြင်း၊ အငြိုးမပြေခြင်း၊ တေးမှတ်ခြင်း၊ ခက်ထန်ခြင်း၊ ဒေါသထွက်ခြင်းစသော ဗျာပါဒ ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးများ ကူးစက်ဖြစ်ပေါ် လာတတ်ပါသည်။ ဒေါသ ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရသောစိတ်သည် တည်ငြိမ်မှု၊
မြတ်ဗုဒ္ဓက စိတ်ဆိုး၊ စိတ်ပျက်၊ ဒေါသထွက်ခြင်းသည် ရောဂါဖြစ် သည်နှင့်တူသည်ဟု မိန့်တော်မူပါသည်။ ရောဂါဖြစ်သူများသည် မအိပ်နိုင်၊ မစားနိုင်သကဲ့သို့၊ ဒေါသတအားကြီးလာလျှင် မစားနိုင် မသောက်နိုင်၊ မအိပ်နိုင်ဖြစ်ကြရပါသည်။ ထို ဒေါသအားကြီး သောစိတ်ကို
အောင်ပြုလုပ်ရပါသည်။ (စိတ် ပျက် စိတ်ဆိုး ရောဂါမျိုး နှိမ်ချိုး ပယ်ဖျောက်လေ)။ ထိနမိဒဓနိဝရဏ ထိုဗိုင်းရပ်စ်ကား ထိုင်းမှိုင်းပျင်းရိခြင်း သဘောရှိသည်။ ထိုတရားများ
ရှုပ်ထွေးနေပါတော့သည်။ ထိုရှုပ်ထွေးပြီး ထိုင်းမှိုင်းပျင်းရိသော စိတ်သည် အချုပ်ထဲရောက်နေသည်နှင့်တူသည်ဟု မြတ်ဗုဒ္ဓမိန့် တော်မူခဲ့ပါသည်။ အချုပ်ထဲရောက်နေသူများသည် စားချင်တိုင်း
သည်။ ထို့ကြောင့် ထိုင်းမှိုင်းပျင်းရိနေသောစိတက်ို သတိပဋ္ဌာန် နည်းနှင့်
(ထိုင်းမှိုင်းပျင်းရိ၊ ချုပ်နှောင်မိ၊ မှတ်သိပယ်ဖျောက်လေ)။ ဥဒ္ဒစ္စ၊ ကုက္ကုစ္စ နီဝရဏ ထိုဗိုင်းရပ်စ်သည် ပျံ့လွင့်ခြင်း၊ ပူပန်ခြင်း သဘောရှိ သည်။
တည်ငြိမ်မှု၊ သန့်ရှင်းမှု၊ အပြစ်ကင်းမှု၊ ဖြူစင်မှုမရှိတော့ပေ။ ထို့ ကြောင့်
မြတ်ဗုဒ္ဓ မိန့်တော်မူခဲ့ပါသည်။ ကျွန်အဖြစ်ရောက်နေသောသူများ သည် လွန်လပ်မှုမရှိပေ။ ထို့ကြောင့် ပျံ့လွင့်ပူပန်သောစိတက်ို သတိပဋ္ဌာန်နည်းနှင့် ပယ်သတ်ခြင်းဖြင့် လွတ်လပ်အပြစ်ကင်းပြီး ဖြူစင်အောင် ပြုလုပ်ရပါသည်။ ၀ိစိကိစ္ဆာ နီဝရဏ ၀ိစိကိစ္ဆာနီဝရဏ ဗိုင်းရပ်စ်သည် ယုံမှားခြင်းသဘော ရှိသည်။ စိတ်ထဲ ယုံမှားမှု၊ သံသယဖြစ်မှုများ ဖြစ်ပေါ်လာပြီဆို လျှင် စိတ်သည် ကြည်လင်ခြင်းမရှိ ရှုပ်ထွေးနေပါတော့သည်။ ယုံ မှားသံသယဖြစ်နေသောစိတ်သည် ရောက်နေသည်နှင့်တူသည်ဟု လမ်းနှစ်ခွေရာက်နေသူသည်
ဟိုဘက်လမ်းက သွားရနိုးနိုး တိကျသောဆုံးဖြတ်ချက်ကို မချနိုင် သကဲ့သို့ ယုံမှားသံသယဖြစ်သူသည်လည်း အမှန်ကို မဆုံးမဖြတ်
ယုံမှားသံသယဖြစ်သောစိတ်ကို သတိပဋ္ဌာန်နည်းဖြင့် ပယ်သတ် ခြင်းဖြင့် ကြည်လင်သန့်ရှင်း အပြစ်ကင်းအောင် ပြုလုပ်ရပါသည်။ (ယုံမှားဒွိဟ၊ လမ်းနှစ်ခ၊ွ တွေ့ကပယ်ဖျောက်လေ)။ နီဝရဏ ဗိုင်းရပ်စ် (Virus) ကို ပယ်သတ်နိုင်သော မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ တုနှိုင်းမမီ ဗိုင်းရပ်စ် ဆော့ဖ်ဝဲ (Virus Software) ဟူသည်(The Ariya Path of Eight Constituents) မဂ္ဂင်(၈)ပါး ဟု ဆိုအပ်သော သီလ သမာဓိ ပညာ အကျင့်တရားများဖြစ်ပါ သည်။ ထို့ကြောင့် စာဖတ်သူများသည် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ တုနှိုင်းမမီ မဂ္ဂင်(၈)ပါး
နေ့စဉ်မှန်မန်ှအသုံးပြုကာ
နီဝရဏ ဗိုင်းရပ်စ်များကို သုတ်သင်ပေးမည်ဆိုပါက ဗိုင်းရပ်စ် အကိုက်ခံရ၍ ရှုပ်ထွေးပြီး အဆင့်နိမ့်နေသော စိတ်သည် နီဝရဏ များ ကင်းစင်တည်ကြည် ငြိမ်သက်လာကာ တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင် သော စိတ်စွမ်းအားပိုင်ရှင် ဖြစ်လာနိုင်မှာဖြစ်ကြောင်း တိုက်တွန်း ရေးသားလိုက်ရပါတော့သတည်း ။
149 တုနှိုင်းမမီ (၁၁) အွန်လိုင်းပေါ်က မေးခွန်းတစ်ခု လောကကြီး၌ သစ်ပင်များသည် မြေ၊ ရေ၊ လေများကို အမှီပြု၍
(Solar energy) သည်လည်း မရှိမဖြစ် အထူးလိုအပ်သော အရာ တစ်ခုဖြစ်ချေ၏။ နေရောင်ခြည်မရရှိဘဲ လောင်းရိပ်ကျရောက်နေ သော သစ်ပင်များသည် ရှင်သန်ကြီးထွားမှု မရှိနိုင်ချေ။ နေ၏ လင်းရောင်ခြည်ကို ရရှိသောအခါ သစ်ပင်များ ရှင်သန်ကြီးထွား နိုင်ကြပေသည်။ ထို့အတူ လောကလူသားများသည် ဘ၀၌တန်ဖိုးရှိစွာ ရှင်သန်နေထိုင်နိုင်ရန် အရေးတကြီး လိုအပ်နေသည်မှာ မြတ်ဗုဒ္ဓ ၏ တုနှိုင်းမမီ ဓမ္မလင်းရောင်ခြည်ပင် ဖြစ်ပါသည်။ တုနှိုင်းမမီ ဓမ္မ အလင်းရောင်ကို ခံစားကြရသူတိုင်း စိတ်ချမ်းမြေ့သောဘ၀ကို ပိုင်ဆိုင်ကြရသည်။
ရှင်သန်နေထိုင်ရသည်မှာ အဓိပ္ပာယ်ရှိလှပါသည်။ ထိုကဲ့သို့ လူ သားများ စိတ်ချမ်းမြေ့မှုရရှိကြစေရန် “မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ဓမ္မအလင်း ရောင်များကို လူသားများအား လက်လှမ်းမီသမျှ ဖြန့်ဝေပေးနိုင် ရင် ကောင်းမှာပဲ”ဟု တွေးမိပါသည်။ ထိုကြောင့် online ပေါ်တွင် Light of Dhamma ဟူသော title ဖြင့် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ဓမ္မလမ်း ကြောင်းနှင့် လျော်ညီစွာ စွမ်းနိုင်သလောက် ဓမ္မစာပေများကို post တင်ပေးနေသည်မှာ July, 2006 ကတည်းက ဖြစ်ပါသည်။ ထိုသို့ ရေးသားခဲ့ရာ တစ်နေ့သ၌ စင်ကာပူနိုင်ငံတငွ် နေထိုင်သော အမျိုးသမီးတစ်ဦးက “အရှင်ဘုရား တပည့်တော် တို့ ဗုဒ္ဓဘာသာက လက်ခံယုံကြည်နေသော နတ်ပြည်၊ ဗြဟ္မာ့ ပြည် အပါယ်လေးဘုံကို အများက ယုံကြည်လက်ခံလာအောင်
website ထဲ၌ comment ပေးထားသည်ကို ဖတ်ရှုလိုက်ရပါ သည်။ ထိုမေးခွန်းကို အများလက်ခံယုံကြည်အောင် အဖြေပေး နိုင်ဖို့ရန် လွယ်ကူလှသည် မဟုတ်ပေ။ သို့သော်လည်း အမေးရှိ က အဖြေရှိရမည်ဖြစ်ပါသည်။ နတ်ပြည်၊ ဗြဟ္မာ့ပြည်၊ ငရဲ၊ ပြိတ္တာစသော ဘုံများသည် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များအတွက် လက်ခံယုံကြည်သောကြောင့် ပြဿ နာမရှိသော်လည်း ဘာသာခြားများ၊ ဘာသာမဲ့များက သူတို့မမြင် နိုင်သော အရာဖြစ်သောကြောင့် လက်ခံယုံကြည်မှု မရှိသည်မှာ အဆန်းမဟုတ်ပါချေ။ ထိုမေးခွန်းကို တိုက်ရိုက်ဖြေကြားရန် မဖြစ် နိုင်သည့်အတွက် ဥပမာပေး၍ အဖြေပေးရပေတော့မည်။ ဥပမာ --အမေမွေးကတည်းက မျက်စိနှစ်ကငွ်း အလင်းမရရှာ သော သူများအား ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ သက်ရှိသက်မဲ့ အရာဝတ္ထုများ ကို ညွှန်ပြသော်လည်း မျက်ဝါးထင်ထင် မသိမြင်နိုင်ချေ။ မသိမြင် သောကြောင့် မယုံကြည်နိုင်ဟု ပြောဆိုယူဆလျှင် ထိုအယူအဆ သည် မှားသော အယူအဆသာ ဖြစ်ချေမည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆို သော် မိမိမမြင်သော်လည်း တကယ်ရှိသော အရာဝတ္ထုများကို မျက်စိမြင်သော (အမြင်အားကောင်းသော) လူအများက သိမြင် နေခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ ထို့အတူ အ၀ိဇ္ဇာအမှောင်ဖုံးနေသော ပုထုဇဉ်လူသား များသည် နတ်ပြည်၊ ဗြဟ္မာ့ပြည် စသည်များကို သာမန်မျက်စိဖြင့် မမြင်နိုင်ချေ။ ထိုသို့ မမြင်နိုင်သောကြောင့် မရှိနိုင်ဘူးဟု ထင်မြင် ယူဆလျှင် မှားသောအယူအဆသာဖြစ်ချေမည်။ အဘယ်ကြောင့် ဆိုသော် ဘုရား၊ ရဟန္တာ၊ အရိယာ ဈာန် အဘိညာဉ်ရရှိပြီးသော
ထိုထိုဘုံများကို မြင်နိုင်သောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်ဟု ဖြေကြား လိုက်ပါသည်။ သို့သော်လည်း အဖြေကို ပို၍ပြည့်စုံအောင် ကျယ် ကျယ်ပြန့်ပြန့် ဖြေကြားပေးစေလိုကြောင်း၊ online ပေါ်ကနေ မေတ္တာရပ်ခံလာသောကြောင့် ထပ်မံဖြည့်စကွ်၍ အဖြေပေးလိုက် ရပြန်ပါသည်။ ဥပမာ-၂ စင်ကာပူနိုင်ငံသုိ့
သည် စင်ကာပူနိုင်ငံသို့ မရောက်ဖူးသော်လည်း ထိုနိုင်ငံသည် မရှိနိုင်ဟု ထင်မြင်ယူဆလျှင်ကား မှားသောအယူအဆသာဖြစ်ရ ချေမည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် မိမိ မရောက်ဖူးသော်လည်း ထိုစင်ကာပူနိုင်ငံသို့ ရောက်ဖူးသူများ ရှိနေသောကြောင့် ဖြစ်ပါ သည်။ ဥပမာ-၃ သင်္ဘောဖြင့်
သော တစ်နေရာ၌ သင်္ဘောတစ်စီးခုတ်မောင်းနေ၏။ ထိုအခြင်း အရာကို သာမန်မျက်စိဖြင့် မမြင်နိုင်သော်လည်း အဝေးကြည့်မှန် ပြောင်းအားဖြင့် အကူအညီယူ၍ ကြည့်မှသာလျှင် သင်္ဘောခုတ် မောင်းနေသည်ကို တွေ့မြင်ရ၍ ဆိုလိုသည်မှာ သာမန်မျက်စိဖြင့် မမြင်ရုံမျှနှင့် မရှိဘူးဟု ထင်မြင်ယူဆ၍ မရနိုင်ပါချေ။ အဘယ် ကြောင့်ဆိုသော် အဝေးကြည့်မှန်ပြောင်း၏ အားဖြင့် အသုံးပြု သောအခါ မြင်ရခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ ဥပမာ-၄ လူခန္ဓာကိုယ်၌ရှိသော ဗိုင်းရပ်စ် (virus)များကို သာမန် မျက်စိဖြင့် မမြင်နိုင်ချေ။ ထိုဗိုင်းရပ်စ် (virus)များကို မြင်တွေ့လို
152 သော် အဆပေါင်းများစွာချဲ့၍ ကြည့်ရသော မိုက်ခရို စကုပ် (microscope)
မမြင်နိုင်ချေ။ ၀ိဇ္ဇာတည်းဟူသော ဉာဏ်မျက်လုံးနှင့်ကြည့်မှသာ လျှင် တွေ့မြင်နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် ၀ိဇ္ဇာဉာဏ်များရရှိနိုင်ရန် အကျင့်လမ်းစဉ်များကို လိုက်နာကျင့်သုံးကြမည်ဆိုပါက ထိုထိုဘုံ များကို ရောက်ရုံမျှသာမက ဆင်းရဲခပ်သိမ်းမှလည်း လွတ်ကင်း နိုင်ပါသည်။ ဥပမာ-၅ တစ်ခါက ရေထဲ၌ ငါးနှင့်လိပ်တို့နေထိုင်ကြ၏။ တစ်နေ့ သောအခါ လိပ်သည် ကုန်းပေါ်သို့တက်ရောက်ကာ ဟိုဟိုဒီဒီ သွားခြင်းဖြင့် သစ်ပင်၊ တော၊ တောင်၊ ပန်းမန်များကို တွေ့မြင်ခဲ့ရ သည်။ ထိုလိပ်သည် သူတွေ့မြင်ခဲ့ရသည်များကို ရေထဲရှိငါးအား ပြောကြားပါသော်လည်း ငါးသည် ထိုအရာများကို မမြင်နိုင်သော ကြောင့် ‘မဖြစ်နိုင်’ ဟုဆိုကာ မယုံကြည်နိုင်ဖြစ်နေလေသည်။ ကုန်းပေါ်၌
အကြောင်းကို ကုန်းပေါ်သို့ ရောက်ဖူးသောသူများသာ သိမြင်၍ ယုံကြည်နိုင်ကြသည်။ အမှန်တကယ် နတ်ပြည်ရှိကြောင်း အသိ အမြင် ရှင်းချင်သပဆိုလျှင် ရေထဲငါးလို မဖြစ်စေဘဲ၊ အကျင့်လမ်း စဉ်များကို လိုက်နာကျင့်သုံးခြင်းဖြင့် အသိအမြင် ရှင်းနိုင်ပါသည်။ ဥပမာ-၆ လောက၌ စိတ်တည်ငြိမ်ကြောင်း ကျင့်စဉ်တရားများ ကို လိုက်နာကျင့်သုံးကြခြင်းဖြင့် စိတ်တည်ငြိမ်မှုကို ရရှိကြသည်။ ထိုသို့ စိတ်တည်ငြိမ်မှုရရှိသောကြောင့် စိတ်ချမ်းသာကြရသည်။ သို့သော်လည်း စိတ်တည်ငြိမ်ကြောင်းအကျင့်ကို ကျင်သုံးလျှင်
မည်မျှပင် ဟောပြောစေကာမူ၊ ၄င်းကျင့်စဉ်ကို ကိုယ်တိုင် လက် တွေ့မကျင့်သုံးဖူသောသူများက ထိုသို့
ဖြစ်ချေမည်။ အဘယ်ကြောင့်နည်း ထိုလက်တွေ့ကျင့်စဉ်များကို ကျင့်သုံး၍ စိတ်တည်ငြိမ်ကာ စိတ်ချမ်းမြေ့မှုအရသာကို လက် တွေ့ ခံစားရသောသူများစွာ ရှိနေသောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ ဥပမာ-၇ တစ်ခါက ဆရာတစ်ယောက်သည် စာသင်ခန်းထဲတငွ် သင်ပုန်း၏
‘တပည့်တို့ နိဗ္ဗာန်ကို မြင်ကြရဲ့လား’ ဟုမေးရာ တပည့်များက ‘မမြင်ပါဘူး ဆရာကြီး’ဟု အားလုံးပြန်ဖြေကြသည်။ ဆရာက ‘တပည့်တို့ ဒီအတိုင်းနေရုံနဲ့ နိဗ္ဗာန်မမြင်နိုင်ဘူး၊ ဒီလမ်းအတိုင်း သင်ပုန်းရှိရာ လျှောက်လာပြီး သင်ပုန်းအနောက်သို့ ရောက်လျှင် ရေးထားသော နိဗ္ဗာန်ကို မြင်ရလိမ့်မယ်’ဟု ပြောခဲ့သည်။ ထို့ အတူ နတ်ပြည်စသော ဘုံဌာနများသည် ဒီအတိုင်းနေရုံမျှဖြင့် မြင်နိုင်သူ ရှားလှပါသည်။ အမှန်စင်စစ်
အဆုံးတိုင်အောင် လျှောက်လှမ်းနိုင်မှသာလျှင် နတ်ပြည်စသည် သိမြင်နိုင်ပါသည်။ ဥပမာ-၈ ဆက်လက်၍ ပြောလိုသည်မှာ - ရုပ်ရှင်မင်းသားကြီး တစ်ဦးက တိပိဋကဓရ ဓမ္မဘဏ္ဍာဂါရိက ဦးဝိစတ္တိသာရာဘိဝံသ (အသက်ထင်ရှားရှိစဉ်က)အား မေးလျှောက်ဖူး၏။ “အရှင်ဘုရား နိဗ္ဗာန်ဆိုတာ အမှန်တကယ်ရှိပါသလားဘုရား”ဟု မေးသောအခါ ဆရာတော်ကြီးက မျက်နှာတော်တင်းသွားပြီး “ဘာလဲ … မင်းက
154 ဗုဒ္ဓဘာသာကို စော်ကားတာလား” “မဟုတ်ပါဘူးဘုရား” “တပည့်တော် တကယ်သိချင်လို့ပါ ဘုရား”၊ “အေး မင်းမှာ နိဗ္ဗာန် ရောက်နိုင်တဲ့ လမ်းစဉ်ကို ကျင့်သုံးမှုမရှိဘနဲ့ နိဗ္ဗာန်ဘယ်မှာရှိ တယ်ဆိုတာ
သိချင်ရင် ကျင့်ရတယ်” ဟူ၍ ဖြစ်၏။ ဆရာတော်ကြီး၏ အဖြေလိုပါပဲ။ နတ်ပြည်၊ ဗြဟ္မာ့ပြည် မည်သည့်နေရာ၌ရှိသည်ကို သိချင်သည်ဆိုလျှင် ပေးကမ်းစွန့်ကြဲ မှု၊ ကိုယ်ကျင့်တရားစောင့်ထိန်းမှု၊ အဖန်ဖန်အထပ်ထပ် အား ထုတ်မှု (ဒါန၊ သီလ၊ ဘာဝနာ)များကို ကျင့်သုံးမည်ဆိုလျှင် မည်သည့်နေရာ၌ နတ်ပြည်ရှိသည်ဟု သိနိုင်သည့်အပြင်၊ သမ ထဘာဝနာပွား၍ သမထဈာန်ရရှိပြီး ၄င်းဈာန်များ မဆိတ်သုဉ်းခဲ့ လျှင် ဗြဟ္မာ့ပြည်အထိ သိနိုင်ရောက်နိုင်ပါသည်။ ထို ရောက်နိုင် ကြောင်း
စသည် မရှိနိုင်ဟု ထင်မြင်မယူဆသင့်ပါ။ အချုပ်ဆိုရသော် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ တုနှိုင်းမမီ သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာ
ဆိုပါလျှင် လူအများမမြင်နိုင်ဟုဆိုသည့် နတ်ပြည်၊ ဗြဟ္မာ့ပြည် သာမက ထိုထက်ကျော်လန်ွကာ အိုနာသေမှ လွတ်ကင်းသည့် နိဗ္ဗာန်တိုင်အောင်
မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ တုနှိုင်းမမီ မဂ္ဂင်ရှစ်ပါး အကျင့်တရားများကို ကြိုးစား ကျင့်သုံးသင့်ကြောင်း သတည်း ။
156 တုနှိုင်းမမီ (၁၂) ဖန်တီးရှင် လောကသတ္တ၀ါတို့သည် ဖန်တီးရှင်ဆိုသူ၏ စီမံမှုကို ခံယူကြရာဝယ်
အကျည်းတန်မှုကိုလည်း ခံယူကြရပါသည်။ ထိုဖန်တီးရှင်သည် လူသားတို့အတွက် လူ၊ နတ်၊ ဗြဟ္မာ၊ ငရဲ၊ တိရစ္ဆာန်၊ ပြိတ္တာ စသည့် အဆင့်နိမ့်သော ဘ၀၊ အဆင့်မြင့်သော ဘ၀စသည့် အရောင်အသွေးမျိုးစုံသော ဘ၀များကို ရောက်ရှိအောင် ဖန်တီး ပေးနိုင်သောကြောင့် တုနှိုင်းမမီ ဖန်တီးရှင်ဟု ခေါ်ဆိုနိုင်ပါသည်။ လူ့လောကကြီးအတွင်း မီးဘေး၊ ရေဘေး၊ လေဘေး၊ ငတ်မွတ်ခေါင်းပါးသည့်ဘေး၊ စသည့်
လူသားတို့ သန္တာန်ဝယ် ကိလေသာတရားများ အားကြီးသော အခါတွင် ဖြစ်တတ်သည်ဟု မြတ်ဗုဒ္ဓဟောတော်မူခဲ့ပါသည်။ ရှင်းဦးအံ့ - လူသားတို့ ၀န်းကျင်တွင် လောဘအားကြီး သောအခါ
အပြင် မီးဘေးလည်း သင့်တတ်ပေသည်။ ထို့အပြင် သေလွန် သောအခါ ပြိတ္တာဘုံသို့ လားရောက်ရသည်။ လူသားတို့ဝန်းကျင် တွင် ဒေါသအားကြီးသောအခါ လက်နက်ဘေး၊ စစ်ဘေး စစ်ဒဏ် သင့်တတ်သည့်အပြင် ရေဘေးနှင့်လည်း ရင်ဆိုင်ရပြီး သေလွန် သောအခါ
လူသားတို့ဝန်းကျင်တငွ်
မောဟအားကြီးသောအခါ ရောဂါဘေးဆိုးကြီး ကျရောက်တတ် သည့်အပြင် လေဘေးလည်း သင့်တတ်ပါသည်။ သေလွန်သော အခါ တိရစ္ဆာန်ဘ၀ ရောက်ရသည်။
157 ဆိုလိုသည်မှာ အကောင်း
မဟုတ် နေ့စဉ်ပြုလုပ်ပြောဆို ကြံစည်နေသည့် ကံ တရားများပင် မဟုတ်ပါလော။ မြတ်ဗုဒ္ဓက
မိန့်တော်မူခဲ့ပါသည်။ ၄င်းတို့မှာ ၁။ ဂရုကံ ၂။ အာသန္နကံ ၃။ အာစိဏ္ဏကံ ၄။ ကဋတ္တာကံ ဟူ၍ ဖြစ်သည်။ ၁။ ဂရုကံ ကုသိုလ်တရားဘက်၌
သည် ကြီးလေးသော ဂရုကံများဖြစ်သည်။ သောတာပတ္တိမဂ်ရရှိ ပြီးသောသူများသည် သေလွန်သည့်အခါ ထိုကုသိုလ် ဂရုကံ ကြောင့်အပါယ်မကျရောက်ရတော့ပေ။ ထို့အတူ အကုသိုလ်ဘက်တွင် ဆိုရပါမူ ပဉ္စာနန္တရိယ ကံသည် ဂရုကံ မည်၏။ သေလွန်သောအခါ ထိုကြီးလေသော အကုသိုလ် ဂရုကံက အပါယ်သို့ ဆွဲချလေတော့၏။ ၂။ အာသန္နကံ သေခါနီးကာလ တရားကို
ကုသိုလ်၊ အကုသိုလ်တရားတို့ကို အကြိမ်ပေါင်းများစွာ ပြုလုပ် ထားစေကာမူ
ကုသိုလ်၊ အကုသိုလ်ပုံရိပ်များ ထင်ဟပ်လာပြီဆိုလျှင် ထိုထင် ဟပ်လာသော ကံတရားကို အာသန္နကံဟု ခေါ်ပါသည်။ သေခါနီး
အကြောင်းညီညတ်ွလျှင်
သန္နကံ၏ အဆုံးအဖြတ်ကိုလည်း ခံယူကြရပါသည်။ ၃။ အာစိဏ္ဏကံ ကြိမ်ဖန်များစွာ
မကောင်းကံများ (အလေ့အကျင့်များစွာ ပြုလုပ်ထားသောကံ)ကို အာစိဏ္ဏကံ ဟု ခေါ်ပါသည်။ ၄။ ကဋတ္တာတံ ပြုကာမတ္တ (ပြုရုံမျှ) ဖြစ်သော ကံကို ကဋတ္တာကံ ဟု ခေါ်ပါသည်။ ကံလေးမျိုး၏ အကျိုးပေးပုံ မဂ်ဖိုလ်ရရှိသောသူများကို
ကောင်းသော ဂရုကံ သေလွန်လျှင် အကျိုးပေးပါလိမ့်မည်။ မြတ် ဗုဒ္ဓလက်ထက်တော်က အဟိံသကသည် လူပေါင်းများစွာကို သတ်ခဲ့ပါသော်လည်း မြတ်ဗုဒ္ဓနှင့် တွေ့သောအခါ အရဟတ္တမဂ် ကိုရရှိပြီး ထိုအရဟတ္တမဂ်တည်းဟူသော ဂရုကံကြောင့် သေလွန် သောအခါ
အနက် အဖသတ်သည့်ကံ’ကို ကျူးလွန်မိသော အဇာတသတ်မှာ မူကား အသက်ရှင်စဉ်တငွ် မြတ်ဗုဒ္ဓအား ကြည်ညိုလွန်းလှသော ကြောင့်
ကာလ သူပြုခဲ့သော အဖသတ်သည့် ဂရုကံက သူ့အားအကျိုး ပေးကာ သူသွားရမည့် ဒုဂ္ဂတိ (အပါယ်ဘုံ)ကို အဆုံးအဖြတ် ပေးခဲ့လေသည်။ ဂရုကံမရှိသော သူများသည် သေခါနီးတွင် အာသန္နကံ က အကျိုးပေးပါလိမ့်မည်။ ထိုအာသန္နကံ အကျိုးပေးပုံကား -
လူဆိုးကြီး သည် ရှင်ဘုရင်၏အမိန့်တော်ဖြင့် နှစ်ပေါင်း(၅၅)နှစ် တိုင်တိုင် ရာဇ၀တ်သားများအား သတ်ခဲ့ပါသော်လည်း မသေမီ အရှင်သာရိပုတ္တရာကို
ကြောင့် ကွယ်လန်ွသောအခါ နတ်ပြည်သို့ ရောက်ခဲ့ရပါသည်။ ဤသည်မှာ
(အာသန္နကံ)က အားကြီးစွာနှင့် အကျိုးပေးလိုက်သောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ တစ်ခါက လူတစ်ယောက်သည် ငယ်စဉ်မှစ၍ အရွယ် ကြီးရင့်သည့်တိုင်အောင်
ကျောင်းမှု ပြုခဲ့ပါသည်။ အိုမင်းလာသောအခါ သားဖြစ်သူရဟန်း က “င့ါရဲ့ဖခင်သည် သေခါကျလျှင် ဘ၀ကူးကောင်းပါစေတော့” ဟူသည့် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ဖခင်မုဆိုးကြီးအား ရဟန်းပြုစေခဲ့ပါ သည်။
သူ၏အာရုံထ၌ဲခွေးနက်ကြီးများက
ဟစ်နေပါတော့သည်။ ထိုအခါ သားရဟန်းက “ငါရဲ့ဖခင်ဟာ ဒီလိုနိမိတ်နှင့်
အပါယ်မကျစေရဘူး”ဟုတွေးကာ ကျောင်းရှိ ကပ္ပိယအား ပန်းခူး စေ၍ မနီးမဝေးတွင်ရှိသော စေတီတော်ရှိရာသို့ ဖခင်ရဟန်းကြီး အား ခေါ်ဆောင်သွားပါသည်။ စေတီသို့ရောက်သောအခါ “အိုး … အရှင်ဘုရား … ဒီမှာ အရှင်ဘုရားအတွက် ဘုရားမှာ ပန်းလှူပေးထားပါတယ် ဘုရား၊ အဲဒီ ကုသိုလ်ကို အာရုံပြုလိုက်ပါဘုရား” ဟု ပြောသော အခါ ဖခင်ရဟန်းကြီးသည် ကုသိုလ်အာရုံရသည်နှင့် တပြိုင်နက်
160 “ဟဲ့ … သား .. နတ်ပြည်က သားရဲ့မိထွေးက ငါ့ကို လာခေါ်နေပြီ”ဟု ပြောပါလေတော့သည်။ မကောင်းသော အာရုံ ထင်သောအခါ ကြောက်လန့်တကြားဖြစ်ရသော်လည်း ကောင်း သောအာရုံထင်သောအခါ၌မူကား စိတ်ထတဲငွ် ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ ရလေသည်။ ထို့ကြောင့် ဘ၀နေ၀င်ခါနီးအချိန်တငွ် လူနာ၏အနား၌ မိတ်ဆွေကောင်းရှိရန် အထူးလိုအပ်လှပါကြောင်း အထက်ပါဖြစ် ရပ်ဖြင့် ထင်ရှားသိသာပါပြီ။ ထို့ပြင် တစ်ဖန် ရင်းနှီးသော သီလရှင်ဆရာလေးတစ်ပါးပြော သော ဖြစ်ရပ်မှန်တစ်ခုကို ပြန်လည်တင်ပြရပါလျှင် တစ်ခါက စာသင်တိုက်ကြီးတစ်ခုကို အုပ်ချုပ်ရသော သီလရှင်ဆရာကြီးတစ်ပါး ရှိခဲ့ဖူးပါသည်။ တစ်နေ့သ၌ သူသည် ရိပ်သာတစ်ခုတငွ် သီလရှင်ဆရာကြီးတစ်ပါးထံ နည်းခံ၍ တရား အားထုတ်ခဲ့ရာ တရားဖြင့်ပျော်မွေ့ပြီး အသက်ထက်ဆုံး ၀ိပဿ နာတရားကို မလွတ်တမ်းအားထုတ်နိုင်ခ့ပဲါသည်။ နောက်ဆုံးတွင် သတ္တ၀ါတို့၏ ဓမ္မတာအတိုင်း ထိုသီလရှင်ကြီးသည် မကျန်းမမာ ဖြစ်ကာ ကွန်လန်ွခဲ့ပါသည်။ တစ်နေ့သောအခါ တရားပြသခဲ့သော သီလရှင်ဆရာ ကြီး စင်္ကြံလျှောက်နေခိုက် “အရှင်ဘုရား … တပည့်တော်က (…)ပါဘုရား”ဟု နောက်နားမှ ပုံသဏ္ဌာန်မမြင်ရဘဲ စကားပြော သံလောက်ကိုသာ ကြားခဲ့ရပါသည်။ ထိုအခါ တရားပြသီလရှင် ဆရာကြီးသည် “ဒေါ် (….) က ဒီမှာ ဘာလာလုပ်နေရတာလဲ”ဟု မေးရာ တပည့်တော်သေပြီးတဲ့နောက် အခုဒီနေရာမှာ ဆင်းဆင်း ရဲရေဲနရပြီး တံမြာက်လှည်းနေရတာပါဘုရား”ဟု ပြန်ပြောလာပါ ည်။ “ဟင် … တရားတွေ အချိန်အကြာကြီး အားထုတ်ထားပါ
ကွယ်လန်ွပြီဖြစ်သည့် ထိုသီလရှင်က သူ့ရဲ့ဖြစ်စဉ်ကို ပြောပြပါ လတော့သည်။ သီလရှင်ဆရာကြီးသည်
ကို အုပ်ချုပ်၍ စာချလာခဲ့ရာ တစ်ဖက်ကလည်း ၀ိပဿနာတရား ကို စွမ်းနိုင်သမျှ ကြိုးစားအားထုတ်ခဲ့ပါသည်။ တစ်နေ့ မကျန်း မမာဖြစ်ကာ အိပ်ရာထဲ၌ ဘုံးဘုံးလဲလေတော့သည်။ ထိုစဉ် သူ၏ တပည့်တစ်ဦးက “အရှင်ဘုရား … အရှင်ဘုရား ဒီလို မကျန်းမမာ ဖြစ်တာဟာ လက်ထောက် သီလရှင်ဆရာက ကျောင်းလိုချင် သောကြောင့် ဂမ္ဘီရအစီအရင်တစ်ခုနဲ့ ပြုလုပ်ထားသည့်အတွက် အခုလို မကျန်းမမာဖြစ်ရတယ်လို့ ဗေဒင်ဆရာထံက အဟော ထွက်ပါတယ်ဘုရား”ဟု အမှတ်မထင် ကြားလိုက်ရသောစကား ကြောင့် စိတ်နှလုံးမကောင်းဖြစ်ခဲ့ရပါသည်။ သို့နှင့် မကြာမီ ထို မကောင်းသောစိတ်ဖြင့် သေဆုံးခဲ့ရသောအခါ ( …. ) အပါယ်ဘုံ သို့ရောက်ခဲ့ရပါသည်။
ကုသိုလ်တစ်ခုဟု ပြောဆိုနိုင်သော ၀ိပဿနာကုသိုလ်များ ရှိပါ သော်လည်း
မကောင်းသောနှလုံးသွင်းမှု အကျိုးပေးသောကြောင့် ဖြစ်ရပါသည်။
အာသန္နကံ အကျိုးပေးပုံသိသာထင်ရှားပါပြီ။ အထက်ပါ ဆိုခဲ့ပြီးသော ဂရုကံနှင့် အာသန္နကံဖြစ်ခငွ့် မရဘူးဆိုပါက အာစိဏ္ဏကကံအကျိုးပေးပါလိမ့်မည်။ အာစိဏ္ဏ ကံဟူသည် မိမိတို့ နေ့စဉ်မှန်မှန်ပြုလုပ်ခဲ့သော ကောင်းသော
လောင်းလှူခြင်း၊ ဘုရားဆွမ်းတော်တင်ခြင်း၊ မိဘစသည်တို့အား ပုံမှန်ထောက်ပံ့လှူဒါန်းခြင်း၊ ဥပုသ်သီလကို နေ့စဉ်မှန်မှန် စောင့် ရှောက်ကျင့်သုံးခြင်း၊ ဗုဒ္ဓါနုဿတိဘာဝနာ၊ မေတ္တာဘာဝနာ ၊ မရ ဏာနုဿတိဘာဝနာ စသည် နေ့စဉ်မှန်မှန်ပွားများခြင်း၊ နေ့စဉ် ဘုရားရှိခိုးခြင်း စသည်တို့သည် အာစိဏ္ဏကံကုသိုလ်များ ဖြစ်ပါ သည်။ အကုသိုလ်ဘက်၌ မကောင်းသောအမှုများကို နေ့စဉ် မှန်မှန်ပြုလုပ်ခြင်းစသည်တို့သည် အာစိဏ္ဏကံ အကုသိုလ်များဖြစ် ပါသည်။ အကယ်၍ ထိုအာစိဏ္ဏကံ မရှိဘူးဆိုပါက ဘ၀တွင် အမှတ်မထင် ပြုလုပ်ခဲ့သော (ကဋတ္တာကံ)က အကျိုးပေးပါလိမ့် မည်။ အချုပ်ဆိုရသော် အသက်ထင်ရှားရှိစဉ်က ဒါန၊ သီလ၊ ဘာဝနာ စသည်များကို ပြုလုပ်၍ မဂ်ဖိုလ်နိဗ္ဗာန်မရသေးလျှင် သေခါနီး၌ မကောင်သေား အာသန္နကံကြောင့် မရောက်သင့် သည့် ဒုဂ္ဂိတိဘုံများ၌ ရောက်ရတတ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ဘ၀ကူး ကောင်းစေရေးအတွက် မိမိတွင် အနည်းဆု့း သောတာပတ္တိမဂ် ကို မျက်မှောက်ပြုနိုင်ရန် ကျင့်သုံးထားနိုင်ပါမှ မိမိ၏ဘ၀အလှကို ဖန်တီးနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
သောဂရုကံ မရှိဘူးဆိုပါလျှင် လူတစ်ဦးအား အာသန္နကံသည် အရေးအကြီးဆုံးဖြစ်ပါသည်။
ကောင်းသော အာသန္နကံရရှိရန်အတွက် မိမိ၏အနီး၌ သူတော်
ဆောင်းပါးဖြင့် သတိပေးရေးသားလိုက်ရပါတော့သတည်း။ စိတ်နေသန့်ရှင်း ဘေးရန်ကင်း လွန်မင်းချမ်းသာကြပါစေ … xxxxxxxxxxxxxxx
+UKawvida _ Uncomparable
1 နမော တဿ ဘဂ၀တော အရဟတော သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဿ မာတိကာ2ထုတ်ဝေသူ ဒေါ်မိုးကေခိုင် ချိုတေးသံစာပေ၊ ရွှေနံ့သာကျေးရွာ၊ ပုလဲမြို့သစ် ( ၄)45 လိပ်စာ ဦးကောဝိဒ...